Ike gwụrụ na àgwà nke Canonical na ụfọdụ ndị ọrụ Ubuntu | Site na Linux
Ike gwụrụ site n'àgwà nke Canonical na ụfọdụ ndị ọrụ Ubuntu
Ike gwụrụ m maka omume Ubuntu na ụfọdụ ndị ọrụ distro a, n'ihe OpenSource bụ na isi iyi nke ha si na-a suụ kemgbe ọtụtụ afọ.
N'oge na-adịghị anya dịka ọtụtụ n'ime gị maara, Ubuntu kpebiri imepụta sava ya eserese, nke a na-akpọ Mir, na ihe a na-eme na crotch nye ndị mmepe nke Wayland, ee Wayland, ihe nkesa ahụ ha na-ekwu, kemgbe Ubuntu 10.04, na ha ga-eji.
Na ngwụcha, achọpụtara ya na Ubuntu na-etolite sava ya eserese kemgbe 2012, n'azụ azụ obodo. Ọ dị mma, agaghị m ekwusi ike na ọ dị njọ iwe mmadụ niile maka ndị nzuzu na enweghị nghọta nke Canonical, mana karịa ihe niile m chọrọ igosipụta onwe m ihe kpatara Ubuntu ji mee ihe jọgburu onwe ya, ma ọ dịkarịa ala n'ụdị ya.
Ihe nkesa eserese bụ ihe dị mkpa, Xorg aghọwo ihe mgbe ochie ma ọ na-esikwa ike itinye ụfọdụ ihe na ya, ebe ọ bụ na echeghị maka ihe taa chọrọ. Ojiji nke otu ihe nkesa ma ọ bụ ọzọ, nwere ike ịpụta n'ụzọ dị mfe, na-ahapụ onye ọzọ na-enweghị nkwado ọ bụla site n'aka ndị na-emepụta ya, na-enyefe ya nkwado dị mfe nke ndị ọkwọ ụgbọala n'efu, nke n'ihe banyere Intel ma ọ bụ AMD, ka na-anabata nke ọma, ma n'ihe banyere NVidia….
Ọ bụ ebe a, ebe Canonical, maka eziokwu dị mfe nke inwe ọrụ ebe ọ nwere ike igosi njikwa ya na njikwa zuru oke, nke ọchịchị aka ike, kpebiri imepụta ihe nkesa ọzọ, na-ekewa nkewa karịa na panorama (ma na-eche na ndị ọrụ ya bụ ndị ahụ ndị na-eme mkpesa banyere nke ahụ enweta distros), nke, enweghị ihe ọ bụla Wayland na-enweghị.
Emebiela ịrara aka ahụ, na-agbanyeghachi obodo niile, na ndị mmepe nke GNOME, KDE, na gburugburu ndị ọzọ na-arụ ọrụ ugbu a ịnakwere Wayland. Ihe omuma atu doro anya bu na GNOME 3.10 (Septemba 2013?) Ga enwe otutu nkwado maka Wayland.
Ndị obodo, dịka ọ dị ka ọ dị, boun, ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ n'efu na ọrụ, na ọkara ka ị na-arụ ọrụ, mmadụ na-apụta ịgwa gị na ọrụ gị abaghị uru ọ bụla, olee ihu ha ga-anọ?
Nke a bụ otu ndị mmepe si kwin kwupụta ihe dịka:
Tupu m banyekwuo nkọwa m chọrọ ime otu ihe doro anya: Canonical kpam kpam kwere ịzụlite ihe ọ bụla ha chọrọ. Enwere m mma na nke a ma achọghị m ma ha mepụtara ihe nkesa ngosi ọzọ, kernel nke ya ma ọ bụ shei desktọọpụ ọzọ. Achọghị m ịma ịma. Ọ bụ ego Canonical / Mark ma ọ nwere ike itinye ya n'ụzọ ọ bụla ọ bara uru. M ga-ọbụna na-eche ma ọ bụrụ na ọ ga-proprietary software, nke ahụ bụ niile dị mma.
Ihe na-adịghị mma na-ebute nnukwu ọgba aghara na gburugburu ebe obibi nke sọftụwia n'efu site na ịnye arụmụka ụgha na teknụzụ ma na-eme nkwupụta siri ike banyere ngwanrọ Canonical anaghị enye aka. Nke a anaghị anabata ya. Nke a bụ ihe na-akụda mmụọ ma bibie ọtụtụ ntụkwasị obi m nwere na Canonical. Ọ ga-esi ike iwughachi ntụkwasị obi a. Canonical nwere ike beụrịrị ọ thatụ na ọ bụ ụwa sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ọbụghị ụlọọrụ ụwa nkịtị. Enwere okwu ụfọdụ nke nwere ike ibilite ngalaba iwu na ụlọ ọrụ nkịtị . O mekwara ka m nwee ọtụtụ mkpali ma ọ dịkarịa ala n'akụkụ m ma ajụrụ m ya ma ọ ka bara uru ịbụ onye so na usoro ihe eji eme software n'efu. Kama ịrụkọ ọrụ ọnụ ugbu a anyị nwere ọnọdụ ebe ndị otu okike na-aghọ ndị asọmpi na nke badmouth akụkụ nke ngwanrọ ngwanrọ. Ọnọdụ dị oke nkụda mmụọ.
N'ezie enwere ezigbo ihe kpatara iji mepee Mir nke nwekwara uche. O di nwute na ha adabataghi rue ugbu a. Ekwenyesiri m ike na amaara m ihe kpatara ya ma ọ bụrụ na a gaara ekwu ha ozugbo ọ gaara abụ maka m na ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịdị mfe karị. Ọ ga-ewepụ obi nkoropụ nke ọkwa ahụ kpatara na ọ gaghị adị mkpa ka anyị kwurịta ya ma ọlị, n'ihi na akara ajụjụ ndị ahụ agaghị adị. Mana o doro anya na Canonical kpebiri inye arụmụka arụ ọrụ ụgha banyere ndị bụ ezigbo.
Ọ bụ ihe dị mma maka ndị mmepe ka ị ghara ịma, ị nwere ike iche ụwa, ebe naanị gburugburu ebe nwere ike ịchụ Mir bụ Unity, yana ndị ọzọ niile na-achọghị ma ọ bụ dị ka Unity, enweghị ike iji gburugburu nwere nkwado ọkwọ ụgbọala mechiri emechi?
Mana ka anyị gaa n'ihu, ka anyị hụ ara, nke ga-eme ka KDE na Mir:
Mir enweghi ezigbo protocol. A kọwara "isi dị n'ime" dị ka "protocol-agnostic". Nke a na - ewetara anyị nsogbu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya. Ihe owuwu anyị dị iche (dị ka akọwara n'elu) na anyị chọrọ usoro nkwekọrịta n'etiti shea desktọọpụ na onye mejupụtara. Ọ bụrụ na Mir enyeghị anyị na anyị ga-eji usoro nke aka anyị. Na nke dị adị, a na-akpọ ya "Wayland". Yabụ ọ bụrụgodi na anyị ga-akwado Mir, anyị ga-achọ usoro iwu Wayland?!? Nke ahụ enweghị isi n’echiche. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgba ọsọ n'ụzọ nke Wayland n'elu Mir naanị iji nweta atụmatụ anyị chọrọ, gịnị kpatara na anyị ga-agba Mir ọ bụla?
Iji mee ka gburugburu dị ka ọrụ KDE, na Mir, Wayland ka ga-adị mkpa, ihe na-enweghị isi, ya mere, ọ ka mma iji naanị Wayland, ọ dị mma?
Ugbu a, ọdịmma, Canonical ka na-aga, nke nwere ike ịga nke ọma ma ọ bụ mejọọ gị. Dịka ọmụmaatụ, Achọrọ m icheta na taa, Canonical abụghị ụlọ ọrụ mgbaze, ma ọ bụ na ọ na-achịkwa n'ahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ na sava, ebe Red Hat na-achịkwa, yabụ n'ikpeazụ, mkpebi ahụ na-agbagha dị ka Red Hat ma ọ bụ Suse , ga-eme ka itule ya otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Nsogbu na-abịa, mgbe ị na-etinye ọtụtụ awa na awa, na-agụ nkwupụta sitere n'aka ndị ọrụ Ubuntu, na ibe dị ka Phoronix, ị na-ahụ ihe dị ka nke a:
Mba, mba mba… I nwetaghi ya. Ọ DBGHB onye na-arịọ ya ka ọ kwado MIR. Kwin adịghị mkpa maka Canonical, ọ bụ ya. Ọ DBGHB onye na-ajụ echiche ya banyere ihe Canonical na-eme MIR na ịdị n'otu. Enweghị nkwekọrịta ọ bụla maka desktọọpụ ndị ọzọ n'ihi na ọ dịghị mkpa. O kwuputala na ya enweghị mmasị na MIR, yana ezigbo ihe kpatara na kwin adịghị mkpa.
Canonical kpebiri, ọ bụ ihe dị m n'uche, na ha enweghị ike ịtụkwasị obi na ọrụ ndị ọzọ nke atọ na-anaghị enye ihe ọ bụla ma e wezụga ọrụ nke aka ha, dịka ọmụmaatụ, shen na kde. Wayland, gnome na kde anaghị ahụ ebum n’uche ha, gịnị kpatara ị ga-eji jiri iwu sobe ha? nke ahụ enweghị uche.
Ọzọkwa, echere m na ọ ga-abụrịrị ihe ga-echefu banyere kde na ihe ọma maka kde na ihe ọma maka ihe ọma, na otu ụzọ ga-esi dịpụrụ adịpụ karịa site na ụlọ akwụkwọ ochie linux distro paradigm nke gụnyere ngwugwu metụtara njikọ, njikọ na-enweghị njikọ ma ọ bụ ọbụlagodi esemokwu.
Onye nrụpụta a kwesịrị ịgbalịsi ike na arụmọrụ ya, ndakọrịta ngwaike yana ojiji ojiji, ihe o gosipụtara enweghị mmasị na ya. O kpebiri ịga maka ụzọ, nke ọma, malite ịrụ ọrụ na nke ahụ, KWIn ga-adị mkpa na agbanyeghị.
Mgbe m hụrụ nke a, enwere m ike ịsị, ndụ OpenSource, ogologo ndụ, kedu ụdị echiche ..., echere m na ụfọdụ ndị ọrụ nwetara sistemụ arụmọrụ na-ezighi ezi, ụfọdụ dị ka ndị ọrụ Mac OS X, ọ bụghị GNU / Linux.
Ma ọ bụrụ na m na-eji GNU / Linux taa ma ọ bụghị OS X na pc m, ọ bụ naanị maka nnwere onwe nke inwe ike iji ihe ọ bụla m chọrọ, site na nkwado Nvidia, na enweghị ịgbaso echiche nke onye ọ bụla. N'ihi na ịdabere na naanị otu onye, ​​m ka mma iji OS X, ma ọ dịkarịa ala ihe ha na-eme, ọ bụ ezie na ụzọ ndị ahụ nwere ike bụrụ arụrịta ụka, ha na-eme ya nke ọma.
Agbanyeghị, a na-eje ozi ire ọkụ. Mana ọ bụrụ na a hapụrụ m ihe, ọ bụ na onye ọ bụla nweere onwe ya ime ihe ha chọrọ, mana isi nke GNU / Linux kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ maka onye ọ bụla, ma ghara ịnwa ime ka nkewa dị otu a buru ibu ma na-egbu mgbu. Nke a abụghị Windows, nke a agaghị abụ Apple, n'ihi na ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ nke itinye ihe na ndị ọzọ, mgbe obodo a na-asọpụrụ onwe ya mgbe niile na nnwere onwe yana ịkekọrịta ihe na mmadụ niile?
Mir na Kubuntu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ike gwụrụ site n'àgwà nke Canonical na ụfọdụ ndị ọrụ Ubuntu
Ihe 365 kwuru, hapụ nke gị
Kedu "ịmị ọkụ" nwere ike ịgụ ebe a site n'oge ruo n'oge, nri?
Dị ka ndị ị na-eme site n'oge ruo n'oge?
Maka ozi gị, n'okwu m na-eju anya n'elu m na-eji otu n'ime okwu kachasị mma nke ntinye ederede blog a na-anakọta. Ugbu a, n'ihi azịza gị, achọpụtara m ụdị mmadụ ị bụ, ya mere enwere m ike ịgafe echiche gị - yana nke onye edemede nke ntinye - site na njiri mmeri, n'ihi na anaghị m echebara ndị nkịtị echiche nke shoddy. Ekele.
Ekwesịrị ịhazi okwu a: /
Nke a bụ ihe na - eme mgbe ndị mmadụ na - atụ ụjọ na nkesa Linux ha na - eji nwere ike ịhapụ n'enweghị ikike ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ha mechiri emechi. N'ihi ya, ha agaghị enwe ike iji kaadị ikuku ha ka ha banye na Facebook nledo ihe ọ bụla ma ha jiri Google chọọ Internetntanetị maka ihe enyere ha ka ha nyochaa na nke ahụ nwere ike ọ gaghị ezo aka dịka a ga-asị na ọ mere ha site na Mmụọ Nsọ. Ghara ikwu banyere ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA ka ha gwuo na Steam. 🙂
PS: Ihe omume na ihe odide niile a kọọrọ ebe a bụ akụkọ ifo ma ọ bụghị iwe iwe onye ọ bụla. Facebook, Google, NVIDIA, na Steam buighalaahia nke ndi nwe ha.
Wuao, isiokwu na-ere ọkụ, oge ruo n'oge, anyị ga-echere iji hụ ihe ga-eme.
Echere m na enwere ike imeghe, mpekere nke GNU / Linux na-ata ahụhụ abụghị naanị teknụzụ kama ọ bụ nke nkà ihe ọmụma, n'otu aka anyị nwere Ubuntu nke mepụtara usoro niile nke ngwaahịa na-azaghachi n'ahịa ahụ, ha na-ekwu maka Wayland maka ihe karịrị afọ 5 na ihe ọ bụla Nke a abụghị oge maka atụmatụ ahịa, Mir bụ azịza kachasị ezi uche dị na ya; ebe ọ bụ na ngwa ngwa nke ahịa na gam akporo (Linux, ma ọ bụghị GNU / Linux) na-eripịa ahịa a Windows na-akụda, enwere ohere, mana ọ pere mpe ma mepee ụzọ ahụ obere oge.
Enweghị ohere maka mmepe afọ 30, Ubuntu na-aza ahịa ahụ ọ bụghị nke obodo, ahịa ahụ dịkwa mma, ahịa ahụ chọrọ ngwaahịa dị mma dabara na mkpa (ozugbo enwere ike), m ga-achọ iji Debian na nkwụsi ike ya na desktọọpụ mana eziokwu bụ na ọ ka nwere usoro anaghị arụ ọrụ nke ọma yana nhazi ya adịghị nwayọ, n'ime ụwa ebe oge bara uru, a na-akwụ m ụgwọ iji wụnye ya na sava, Ubuntu LTS na-achị na desktọọpụ m, dị mfe, mara mma ma kwụsie ike. Mgbe Debian nwere OS nke na-achọghị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ na Thinkpad T410 m, desktọọpụ dị ọcha ma mara mma (lee Xubuntu) ụbọchị ahụ m gbanwere.
N'ime ụwa nke ahịa ahụ na-achịkwa, enweghị m ike ịnye Fedore, Suse ma ọ bụ Mageia, ebe ọ ga-apụta ọtụtụ puku dollar, akụrụngwa na oge iji zụọ mmadụ 500, Achọrọ m Ubuntu, nke nwere nnukwu obodo ma nwee nghọta.
N'ikpeazụ, m na-ekwu na ohere ahụ meghere n'ihi na n'ikpeazụ onye ọrụ chọrọ ya nwere Ubuntu Mini Remix na UCK dị ọcha, dị mfe ma dịkwa mfe, ị nwere ike ịme Ubuntu gị ka ọ tụọ ma ọ bụ ka mma iji ndụdụ, nke a bụ GNU / Linux the mkpebi dịịrị onye njedebe ikpeazụ.
Enweghị m oge iji gụọ nkuzi na nkuzi, m na-eji kọmputa m arụ ọrụ ma m ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na m arụ ọrụ ọzọ n'oge kachasị dị mkpirikpi. Abịa na ndị na-eme afọ ojuju gbasara oge na ọnụahịa, enweghị m ike itinye ha katalọgụ na ODT, ma ọ bụ tar.gz. Ọ bụrụ na ha enweghị ike imeghe ya, ha zipụrụ m ka m jiri ịnyịnya ibu wee pụọ na asọmpi ahụ.
Ọ bụrụ na sisadmin m na-atụ Ubuntu egwu, chee echiche ihe ọ ga-eche banyere Arch ma ọ bụ Gentoo.
Ugbu a, laghachi na isiokwu ahụ, anyị nwere mmasị na ihe na-arụ ọrụ ma mee ngwa ngwa, anyị enweghị oge ichere maka ngwa nnwere onwe, imeghe, nkwụsi ike na nke amamihe. Ndị ahịa anaghị echere anyị. NA IHE M KPỌR H KWES HR H KWES FLR FL FLOSS bụ na nwa agbata obi ọ bụla na-etinye ngwa ma ọ bụ distro ma nye ya aha dị egwu nke na-adịghị akwụsi ike ma na-enye 0.002% ọhụụ. Afọla m nri mediocre ma ọ bụ nke emechaghi ngwa nke na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe na nsụgharị ha ọzọ nke a ga-ewepụta n'ime afọ abụọ mana agaghị m enwe ya na Debian anụ maka afọ 4 ọzọ.
Etu ị si chọọ ka ị nwere emelitere, agwakọtara, rụọ ọrụ nke ọma na sọftụwia. Ka enwere mmekorita na mmekorita. All na-arụ ọrụ maka nkezi ọrụ (bụghị engineer, kọmputa sayensị na-amụrụ).
Ọ bụrụ na Canonical chọrọ ịbụ onye ọchịchị, mgbe ahụ maka sistemụ arụmọrụ dị mma karịa ọgba aghara nke imewe, arụmọrụ na nkwụsi ike. Ya mere enwere m olile anya na Ubuntu jikọtara ọnụ, gbadoro onye ọrụ, nke ọma, mara mma, kwụsie ike, ma nwee ntụkwasị obi. Na na ha ga-ewepụ ịnyịnya ibu ha na nkesa ọbara ndị ahụ niile ha na-enye bụ ọgba aghara.
Pclinux os, opensuse, even debian, ha di mfe distros, zuru ka mmadu mee ka mmadu kwenye na ubuntu di nfe ma na igaghi eme ihe obula, lee anya nsogbu nile o na-enwekari mgbe obula ohuru putara, ma oburu na ichoro inye ya lee, lee nsogbu ndi ebiputara na omg ubuntu, ya na skype, na chrome wdg ...
Ihe nkesa ndị ahụ ị kpọtụrụ aha abụghị nkesa dị mfe maka onye na-abụghị injinia usoro ma ọ bụ ndị ọrụ nwere nka nwere ọgụgụ isi. Na debian ndabara nchọgharị na-emechi onwe ya mgbe niile na pidgin jikọọ MSN ma nye ọtụtụ nsogbu na vidiyo nke laptọọpụ m. Enweghị m ike ịwụnye OpenSuse n'ihi na ọ na-egosi njehie na nkebi na draịvụ m ike. Amaghi m Pclinux, amaghi m ihe njikwa ngwugwu o na-eji ma agaghi m eji ya n’ihi na dika m siri kwu, enweghi m oge iji geek ahu. E wezụga nke ahụ, ama m ama otu esi eji ngwa ngwa na synaptic, echeghị m Pclinux na-enye m ngwugwu ọ na-enweghị ike ịchọta na Ubuntu.
Ihe adịghị m mma bụ ngwa ahụ, ha ezughi oke, ọ bụ otu ihe nzuzu na nkesa niile. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ojiji nke Linux na oke desktọọpụ agaghị ekwe omume, nke na-agwụ ike nke ukwuu iji hazie sava samba maka obere ọfịs, na windo nke dị mfe. Ndị mmepe Floss anaghị eji ahụmịhe onye ọrụ windo eme ihe, ha na-achọkwa ịdị jụụ oge ọ bụla site na "imepụta" UI dị egwu, adịghị mma, na enweghị omume enyi. M na-eche: Ndi MS njikwa panel interface proprietary? Ọ bụ utopia na SAMBA enwere ike ịhazi otu windo? Ndi oro edi isio isio? ma ọ bụ na ọ bụ nanị imegharị ihe ọmụma tupu. Ọ bụghị anyị niile bụ ndị ama ama, enwere ndị mmadụ ihe anyị ji kọmputa arụ ọrụ bụ na anyị anaghị eji ụbọchị niile eri nkuzi ma ọ bụ gbuo oge na xvideos.
Enwere m ụdị njehie ndị ahụ ka njọ na Ubuntu, achọghị m ịbụ onye geek, enwere m ike ikwu otu ihe ahụ gị.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bịa gwa m okwu banyere UI mara mma, akpọla m windo ọ bụla, agbanyeghị osx.
Njirimara ị na-achọ na nkesa, dịka ị kwuru ha, ka ga-erute. Kedu ihe dị mfe iji rụọ ọrụ gị? Pịa ugboro abụọ, * .exe nke Microsoft nwere ka anyị ji?
Na "ịdị mfe" nke ojiji metụtara onye ọrụ ihe ọmụma banyere OS. Maka na mgbe ị gachara Windows, ị ga - achọpụta na enwere ngwa ọrụ ịmaghi ihe ị ga - eme na ọ ga - eme ka ndụ gị dịkwuo mfe. Echeghị m na Apple na-ere na ọnụahịa ọ na-eme, ahịrị na akara nke koodu; ha na-ere ahụmịhe onye ọrụ. Ahụmahụ nke karịa karịa ebe ọ bụla, echiche nke igbe ojii bụ ihe etinye. Ndị mmadụ na-eji iOS anaghị akwụ ụgwọ ịmara otu esi ata apụl, mana otu esi eme ihe ha na-eme n'amaghị etu esi eme ya.
Ihe omuma nke distro adighi amasi gi? ọmụmụ na mmepe nke oru ngo nke nwekwara ike ịrụ ọrụ, olee otu ọ ga-esi bụrụ ọdịda ma n'ikpeazụ a nwalere ya? Ọfọn, ejila ya na ọ bụ ya.
A na-eji ego azụta ụdị udo ahụ ị na-achọ, maka ndị nwere ụdị ụdị gị. A na-azụta ịdị mfe nke GNU / Linux obodo na-achọ site na mbọ.
A na-ajụ ajụjụ gị ma zaa ya n'onwe ya:
Q: Gịnị bụ mfe nke iji gị? Pịa ugboro abụọ, * .exe nke Microsoft nwere ka anyị ji?
A: A na-eji ego azụta ụdị udo ahụ ị na-achọ, maka ndị ụdị gị. Njirimara ị na-achọ na nkesa, dịka ị kwuru ha, ka ga-erute.
Ebee ka anyị ga-aga ọwa ọkụ ??? Ọ bụ ezie na agụla m banyere ya, ekwenyere m na akara ikpeazụ na post ahụ. O doro anya karịa na Canonical anaghị echebara obodo Linux echiche.
Dịka m nwere ike icheta, ọ chọghị ịma.
Eziokwu, mana mgbe m malitere iji Ubuntu (8.04), ọ dị m ka ọ dịkarịa ala imekọ ihe ọnụ. Ugbu a ọ bụghịzị mma na azụ, ka ọ bụrụ ịgba nkịtị.
Ọ dabara nke ọma, enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ na ụwa Linux anyị.
Ezigbo isiokwu. Ihe ndị dị ka ndị a na-akwado echiche m dere na post nke usoro nchịkọta Ubuntu ọhụrụ, Canonical na-achọ kwa ụbọchị iji mee ka ohere dị n'etiti nkesa ya na obodo Free Software dịkwuo elu. Achọpụtara m na ọ dị nwute na ha kwenyere na naanị otu ụzọ isi meziwanye bụ site na ịgbanye "mgbọrọgwụ" ha na SL.
PS: site na nkọwa onye ọrụ na-egosi na post ahụ, amaghị m ma m ga-achị ọchị ma ọ bụ kwaa ákwá.
Ọ bụ isiokwu m masịrị m nke kachasị na blọọgụ a ma ekwenyere m, otu ihe kpatara ya bụ ịbawanye ikike na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ nke yiri ka ọ dị m mma, ọzọ bụ, nkewa, enweghị mmasị na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ndị niile nọ na canonical na-anwa ịbụ "pụrụ iche "Na" dị iche iche "mgbe ị na-anwa ịdị ka Apple
Zaghachi Charlie Vegan
Ọ ga-abụ maka nhọrọ, o doro anya na ọ dịghị eche banyere free software ma ọ bụ naanị na-eji ya na uche
Kwụsị ịkpọasị gị.
Ọ bụghị ịkpọasị ... ọ kachasị Ubuntu kemgbe ogologo oge setịpụrụ ụwa utopia nke ndị ọrụ nwere ike ịbata ... Ugbu a ka mmepe a na - achịkwa ndị ọzọ ... iji gosi bọtịnụ isi na - achọ ... echeghị m Enweela ndụmọdụ banyere mmepe na njirimara onye ọrụ ha nwere na ndị mmepe ha ... Lee ihe nke ọma ma ị ga - achọpụta na Cannonical bụ nke na - eweta ụdị nzuzu a
N'aka nke ozo, aghotara m ihe ojoo gi, na ozo, okwu ikpeazu i tinyere bu nke oma, ighota na onodu Canonical bu ka ha leba anya na mmasi ha, nke dika ihe ndi ahu adabaghi ​​na nke ndi ngwanrọ n'efu. Ugbu a, na mgbakwunye na itinye aka na Canonical mgbe ọ na-egwu egwu, nke m chere na ọ zuru oke (m na-emekwa egwuregwu ahụ xD), anyị kwesịkwara ịbanye ntakịrị n'ime ụzọ ndị gbara ọchịchịrị nke Red Hat kere. N'ezie, n'oge na-adịbeghị anya ị bipụtara otu isiokwu banyere nke a ("izu ọjọọ") na ihe dị mma karịa.
Achọrọ m ka Canonical chioma na ụlọ ọrụ gị, desktọọpụ GNU / Linux adabereghị na Ubuntu, ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị mkpa ugbu a.
Amaara m na ọ bụrụ na site n'otu afọ site ugbu a gaa m akwara gnome na-enweghị nkwado site n'aka ndị ọkwọ ụgbọala nvidia, ọ bụ ebe ahụ ka njem m na Linux gafere, agaghị m eji ubuntu ma ọ bụ "jarto de vino" xD
N'ime otu afọ ọtụtụ ihe nwere ike ime, anyị anụbeghị echiche nke ndị na-ekesa ndị ọkwọ ụgbọala nwere ikike na nke a.
M ka na-eche na n’otu aka ọ dị mma na ya ile anya maka ọdịmma ya Canonical, dị ka RedHat na-eme site na ịga ụzọ Gnome ka ọ chọrọ, mana na nke ọzọ, ahụghị m otu ọ ga - esi merie “agha” a:
-Ọ bụrụ na ọ bụ maka ego, a na-agba Canonical ume ka ọ bido ime uru Ubuntu na-enwetaghịzi ihe ndị a ga-eme iji bido ịchịkọta shillings site n'aka ndị ọrụ ya, n'aka nke ọzọ RedHat na SuSe ọnụ nwere ụzọ (ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala mfe karịa Canonical ) iji mee nkwekọrịta nkwekọrịta azụmahịa iji nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala maka Wayland.
-Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ihe ebe Canonical, RedHat, SuSe ma ọ bụ onye ọ bụla enweghị ike ịbanye ịjụ ndị ọkwọ ụgbọ ala maka Wayland, mana otu ụlọ ọrụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịlele ihe kachasị mkpa, o doro anya na Gnome na KDE ka ejiri ya karịa Unity, n'akụkụ nke a, ọ ga-efunahụ Canonical.
Ọ… Amaghị m ihe m ga-akpọ ya, mpako ma eleghị anya…. Shuttleworth emeela ka ọ banye n'okporo ụzọ ebe ọ na-aga ịnwe oge siri ike nke ukwuu iwepụ ya na-enweghị ịmekọrịta mmekọrịta dị mkpa maka ụwa nke linux.
Re ozi nkeonwe nke ndị ọrụ anakọtara na spyware ma jupụta ihu na mgbasa ozi bụ otu ụzọ isi nweta nnukwu ego, lee google.
Anyị ga-ahụ ole Amazon na-ewetara gị ...
Ma ọ dịkarịa ala, ụlọ ọrụ ngwanrọ 5 nke na-abịa na Debian Wheezy enweghị spyware nke na-abịa na Ubuntu (nke sitere na Amazon, n'ezie). Ka o sina dị, Cannonical enyewo m otu ihe ọzọ iji nọgide na-eji Debian na njedebe nke ụbọchị m.
Ee, ndị ọrụ, ego buru ibu na-abịakwute ha na a manyere ha ịrịọ maka onyinye mgbe ị na-ebudata Ubuntu ISO.
Echere m na n'ihi nkenke oke nke ozi m, emeghị ka m ghọta.
Ihe m na-ekwu bụ na, dị ka ị rụtụrụ aka, Canonical enweghị ọtụtụ nhọrọ iji nweta OS na ego (Sre ya dị ka Mac OS X ma ọ bụ Window $ na-ere bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche.).
Ya mere, ihe fọdụrụ bụ ịghọ usoro jupụtara na spyware na spam, m wee kwuo FULL, n'ihi na ọ bụ naanị ole na ole ezughị, ọ bụ ya mere m ji tinye na "Anyị ga-ahụ ole amazon na-ewetara gị ..."
Onyebuchi JJ dijo
Anaghị m eji Windows mmanya na os x.
Echere m na ndị canonical ahụ na-anwa ime otu ihe ahụ dị ka google na android na chromeOS ma ọ bụrụ na ha nwere ike iri ntakịrị nke ahịa, mana maka m naanị ihe ha ga - enweta bụ imikpu karịa.
cannoical ndị mmadụ na-arịa ọrịa uche
Ekwenyere m na gị, Google na-eji kernel Linux na Chrome OS na gam akporo iji rụọ ọrụ ya, nke ahụ dị mma maka mgbanwe nke kernel mana maka akụkụ ndị ọzọ nke gburugburu - GNU - NO
Ubuntu choro igbaso uzo ahu, ma o di n'ime ikike ya, n'oge na adighi anya GNU / Linux, ma obu GNU / Linux, ma obu Linux - kernel - ya na ihe ndi ozo, o bu nkpebi dika ulo oru Ha nwere ikike niile dị n'ụwa, ma ndị anyị achọghị iji ya ga-eji Mint ma ọ bụ Manjaro ma ọ bụ Sabayon.
Nsogbu a bu iguzo “n’azu” nkwekorita nke bu distros, mpi na mmekorita, n’ihi na Mir, bu GNU, adighi ka ndi obodo dum gbakota aka ma nwee obi uto dika Wayland, obu ezie na o ruru uzo Wayland Ọzọkwa bugging ya na-adịbeghị anya ndụdụ nke otu leghaara free Mmepụta, ka ọ hụ ma ọ bụ onye ziri ezi, ma ọ bụrụ na otú, ekwukwa ya ndozi.
A na-ahụ ọtụtụ egos na ụwa Linux nke na-egosi na ọ na-arịwanye elu ahịa, ya mere ndị na-enweghị isi na-esonye - Peterkpụrụ Peter -
Onye edemede nke post ahụ jupụtara n'ọnụ ya na-ekwu maka nnwere onwe, nnwere onwe na nnwere onwe, mana ọ na-apụta na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ (ma ọ bụ mmadụ) chọrọ ịme ihe ọhụrụ n'ime ngwanrọ n'efu, ọ dị njọ. Ugbu a ọ tụgharịrị na ọ bụrụ na ị banye n'ụwa a, ị ga-emekọrịta ihe dị adị, apụtakwala n'ogige atụrụ, n'ihi na nkatọ na-ezokwasị gị. Ọfọn, ekwetaghị m. Nnwere onwe bụ maka ihe niile. Mgbe ahụ ọ na - ekwu maka ma ọ ga - ekwe omume ịgba ọsọ kde na mir na blah blah blah. Nkatọ ahụ bụ ihe nzuzu dị ka ikwu na Arch ma ọ bụ Debian bụ ihe mkpofu n'ihi na ha anaghị eji otu nkwakọ ngwaahịa ahụ dị ka Red Hat. Ọ bụrụ na ngwanrọ na-arụkọ ọrụ na ihe dị ma ọ bụ na-aga n'èzí (nke yiri ka ọ bụ ihe post ahụ na-atụ aro), mgbe ahụ n'ezie, emehiere m mgbe m na-ahọrọ ya maka kọmputa m.
ejirila ezi obi gafee ugwu ugwu ubeda, ma ị meela ntụnyere kwesiri ọchịchị onye kwuo uche ya, kelee maka enweghị esemokwu gị.
Eziokwu bụ na okwu gị juputara na arụmụka. Agbanyeghị.
Agụbeghị m otu arụmụka doro anya banyere ihe kpatara eziokwu ahụ bụ na Canonicla na-ewepụta ihe nkesa ya ma ọ bụ sistemụ ngwugwu ya adịghị mma. Ọ dịghị otu. Naanị m na-agụ ndị na-akwa ákwá na-ekwu na ọ bụrụ na ọ gaghị eburu nke a ma ọ bụ nke ahụ, ma ọ bụ na ya anaghị etinye aka na nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ dị mma, ọ dị mfe, Canonical na - amalite sistemụ arụmọrụ ya ma na - eme ya ihe doro anya. Notgaghị emepe ihe ị na-agaghị eji (dịka nkwado kde). Ọ bụ nzuzu. Ọ bụ ihe nzuzu dị ka ihe atụ ndị m nyere na mbụ (na nke ị na-akpọ demagogues; okwu na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya mgbe ha chere na ọ bụghị gị). Na ikwu na ihe Canonical na-eme adịghị mma n'ihi na ihe ọ chọrọ n'ezie bụ ịnwe njikwa nke sava eserese ya ... nke ọma. Ọ bụ na m na-enwe obi ụtọ n’oche m mgbe m na-agụ ọtụtụ bullshit. Kpọrọ ihe, gịnị kpatara ya?
Ndewo Lupine_3rd, Naanị m chọrọ ịkọwa ihe ndị mmepe nwere ike na-eche na ihe kpatara ha ji eme mkpesa.
Ka anyị were ya na tupu 2012 ị nwere enyi nwanyị, ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu wee bido ịhazi agbamakwụkwọ ahụ. Started malitela ime nkwadebe, obi dịkwa gị ezigbo ụtọ. Na mbido afọ a, ịchọpụta na enyi gị nwanyị na onye ọzọ na nzuzo na-akpa kemgbe afọ 2012, ugbu a kedụ ka ị ga-eme?
Echere m na nke a bụ myirịta yiri ya, ọ bụ na ị naghị eche?
Ntụnyere ahụ dị mma, mana enweghị ụzọ a: Enyi gị nwanyị na-enweta aka onye ọ bụla maka na ọ chọrọ ya. O nweere onwe ya. Ya mere, gịnị bụ nsogbu ahụ? Ekworo n'ihi na otu n'ime ndị na-etinye aka ya na ya, dị ka, ọ ka mma?
M pụtara, ịnọgide na ntụnyere 😉
Ana m aza onwe m n'ihi na enweghị m ike ịzaghachi ozi Giskard.
Ee, enyi gị nwanyị nwere ike iji aka ha mee ihe niile ha chọrọ na ihe niile ha chọrọ, mana ihe na-ezighi ezi bụ iji ntụkwasị obi gị na nkwa gị eme ihe. Ọ bụrụ na e nwee nkwekọrịta, ka e dee ya ma ọ bụ kwuo ya, ọ bụ ihe nkịtị na ọ bụrụ na a ghọgbuo mmadụ ọtụtụ ga-eji ajọ anya hụ ya.
Rochịkọta, ma ọ bụrụ na Canonical ọkọkpọhi gị aka ị na-aga na-amasị ya: -D?
Nwanne, ana m agbaso ihe omuma gi. Nwanyị na-alụ nwanyị na nke a bụ n'efu SOFTWARE. Nke onye obula nwere ike itinye aka ya. Ọ dị m nwute na ị ghọtaghị ihe atụ.
ihe na-eme bụ na na na enyi nwanyị bụ a bitch xDD
Giskard, m ghọtala ebe ị na-aga. M jidere ndị ọzọ ụzọ.
Ka o sina dị, azịza gị tọrọ nnọọ ọchị!
Nnwere onwe inwere onwe aghaghị ịnwe oke na mgbochi. Enweghị m ike iti onye ọzọ ihe maka eziokwu ahụ bụ na enwere m onwe m ma nwee ike ịme ihe ọ bụla m chọrọ. Na ihe ubuntu mere mgbe ọ na-eke ihe osise ya bụ iji mee ka usoro ọgbụgba ahụ gbagoro ogologo oge wee mee ka o doo anya na ha enweghị mmasị ma ọ bụ na ha enweghị mmasị na nkà ihe ọmụma nke ngwanrọ ahụ, ya bụ nanị ndị ndị ọ dị ka ọ masịrị n'agbanyeghị ma ha agaghị adaba na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ.
Ihe ị na-ekwu bụ "ịkwa iko."
Kpọmkwem, ọ welitere A PILE nke afọ, na n'ihu MIR o yiri ka ọ ga-emecha formalizing, na na canonical ike ikwe ka ya….
Ekwenyere m gị enyi. Canonical bụ ụlọ ọrụ ọ ga-ele anya maka onwe ya. Ihe ndị ọzọ bụ ma ọ nwere ụkpụrụ ọma ma ọ bụ na ọ bụghị na ọ bụ okwu ọzọ. Mana echere m na anyị bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-agụ isiokwu ahụ naanị anyị hụrụ nke ahụ: ịkwa ákwá n'enweghị ihe kpatara ya.
Ugbu a, ọ bụrụ na ihe niile isiokwu ahụ kwuru na-emezu, ikekwe post dị ka nke a ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị.
Amaghị m, ana m enwe ịkpọasị dị ọcha. Dị ka m kpọrọ afọ iri na ụma asị. Ihe dịka "MTV anaghịzikwa egosi vidiyo, iwe m na-ewe, ị gakwaghị ahụ ọnyà ọwa ahụ, ka emechara achọghị m"
Still nyeghi nkọwa ọ bụla, belụsọ na ị bụ onye ubuntu fanboy ma ọ bụ ubuntu akwụọla gị ụgwọ. Site na nkwupụta gị ọ na-egosi na ị naghị eche banyere ụkpụrụ, ị naghị eche banyere emeghe na ị naghị eche na mkpebi Ubuntu nwere ike ịhapụ LInux ọtụtụ, yana ọnọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị ka bsd, ọ bụ ezie na ọ dị mma, otu o sila dị, ahụrụ m na ọ dịịrị ya mfe iji nkwado nkwado karịa mirland karịa obodo ọzọ, ebe ọ bụ na nke a nwere okpu na-acha uhie uhie, intel na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ọzọ n'azụ ya. (mana ọ bụ ihe ọjọọ na samsung na tizen too)
Nke ahụ bụ arụmụka, ọ bụrụ na ụfọdụ na-eme atụmatụ ịme linux, apụl, na-ekwenye na ha nwere ike iji linux na-egwu egwu ka ha chọrọ n'azụ obodo, ha nwere ike, mana emela mkpesa na ịkpọasị a na ndị a na-abawanye. . Achọrọ m iji osx ma ọ bụ windo, karịa ubuntu, ugbu a.
O wutere m na taa ị biliri n’akụkụ na-ezighi ezi nke ụlọ ndina ma dee post a.
Achọrọ m ide akwụkwọ a ọtụtụ ụbọchị, naanị na m dị umengwụ ide, yabụ m ga-esi n'akụkụ aka nri nke nnụnụ, nke nnwere onwe, na nke imeghe, bilie kwa ụbọchị.
Nnwere onwe dịka FSF si kwuo abụghị iji ndị ọkwọ ụgbọ ala, yabụ na ị gaghị echebara ihe na-eme mir, wayland wdg anya, na-eji ọkwọ ụgbọ ala n'efu
Eziokwu bụ na achọghị m ịga n'ihu na-arụ ụka banyere oke ehi a. Aga m aza gị otu ihe. Say na-asị na m bụ onye ubuntu fanboy ma ọ bụ na ọ na-akwụ m ụgwọ (dị ka a ga - asị na ọ dị njọ). Ọfọn, m na-eji Ubuntu eme ihe, MA m na-eji ya na Gnome Shell. Yabụ ọ bụrụ na otu ụbọchị ihe niile ị gwara m mezuru, ọ ga-atụgharịkwa m, ebe ọ bụ na m ga-ekpebi n'etiti ịga nkesa ọzọ na-akwado ya ma ọ bụ na-aga Unity. Ma n'agbanyeghị nke a, Agaghị m akatọ ihe Canonical na-eme ma ọ bụ na ọ naghị eme, n'ihi na rue ugbu a, ha enyela m ngwaahịa nke bụ maka m dị oke mma na enweghị onwe. Yabụ, dịka m na-eji ya, echeghị m na m nwere ikike ịkwa ákwá na ịkụ ụkwụ n'ihi na ha gbanwere nke a ma ọ bụ ihe ahụ. Ọ dịka ọ dị enyi m kpọrọ m ka m rie nri n’ụlọ ya, ọ masịghịkwa isi nri ya wee wụọ ya ihu. Ihe ọzọ dị iche ga - abụ ma m kwụọ ụgwọ ya, ma ọ bụ ha manyere m itinye ya na kọmputa m ee ma ọ bụ ee. Mana nke ahụ anaghị eme, ya mere….
Na tupu ị gwa m ka m nwaa mgbagharị ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ, m ga-agwa gị na enweelarị m. Anọ m na-eji Linux afọ ole na ole ugbu a ma m ka na-eji Ubuntu (ọ bụ nke m malitere), n'ihi na enweghịzi m oge ma ọ bụ ọchịchọ ịhazi Debian ma ọ bụ Arch, dịka m mere na mbụ na Ubuntu na-arụ ọrụ ihe ebube nye m ma n'otu oge ahụ na-enye m udo m na-achọ.
Ugboro 66 dijo
Okwu gị yiri ihe ịga nke ọma 😀
Anọ m na-eji Ubuntu kemgbe Hardy, na eziokwu bụ na ebi m ala nke ọma bụ ntọala ya na ngwungwu ụgwọ, m na-ejikwa ndị ọzọ, dị ka fedora na ịgafe Chakra wdg, ma dịka m na-aga, o doro anya na Deede Shuttleworth bụ onye na-etinye « pasta "ime ihe o na eme na n'ezie o bu maka ochicho ya na nkasi obi ya, napupu ihe bu Gnu / Linux, maka akuku a ihe o mere adighi nma, ma obu onye nwe ya na onye nwe ya" alaeze ", ma N’ime obere ụwa a, a naghị amanye mmadụ amanye, ọ bụrụ na ọ masịrị gị ị na-eso ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị “ọnụ ụzọ”.
Mana ka anyị ghara ịdọpụ ntutu anyị ma ọ bụ tinye aka anyị n’isi n’ihi na e nwere ọrụ dị mma ma ọ bụ ka mma karịa nke ndị a “ọkụkọ” a, ịmaatụ Manjaro ma ọ bụ SolusOs, Chakra na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ echiche m dị umeala n'obi. Ma nke a na-eweta ma ga-eweta oge dị mma.
Ekele Linux ndị enyi
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ abụghị nke ahụ, lee, anyị na-ekwu maka canonical ahụ chọrọ ịgbanwe ihe nke isi gnu / Linux ma nwee ike ịhapụ ndị ọzọ niile ..., na-enweghị uche ọ bụla.
Ọ bụrụ na post ahụ na-ezo aka na ya, mana ihe ekwuru ya na mbụ, nwoke ahụ kpuchiri ya ma nwee ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke ka ọ baa ọgaranya na ọ na-etinye ego na azụmaahịa ya na ọ ga-achọ ịme sistemụ arụmọrụ ya (mara na m na-ekwu sistemụ arụmọrụ ma ọ bụghị nkesa) uto gị na isi gị, ihe atụ mac os si na unix pụta, na nso nso a Andriod a "linux" nke na-abịa site Google, ebe a "ca" otu na-eweta ember na sardine ya.
Na ngwụcha ụbọchị a ga - enwe ndị na - eji "Ubuntu OS", Windows ndị ọzọ, Mac ndị ọzọ na Linux ndị ọzọ, na onye ọ bụla ihe ha tụbara ha ...
Ihe na-esi ísì ụtọ nke ifufe 4, kwụpụta ụgbọ mmiri ahụ na-ekpu ekpu.
Kwuru nke ọma! Ugbu a, wụpụ ụgbọ mmiri kubutu ma banye n'ụgbọ mmiri buru ibu nke Debian.
Kubuntu bụ ihe dịtụ iche ugbu a, ọ daberekwaghị na Canonical kama na obodo, ma ọ bụrụ na Ubuntu ga-emikpu, ọbụlagodi na Kubuntu na Xubuntu nwere oge ọjọọ, ha nwere ohere ndị ọzọ iji kwụpụta onwe ha ma dịka ọmụmaatụ dabere na Debian .
ihe nkesa ihe osise nke na-ejikwa ike ịkwado ya site n'aka ndị na-ese ihe ngosi ga-abụ nke na-enwe mmeri, echekwara m na nke ahụ ga-abụ MIR. ebe ọ bụ na obere obere ma nvidia, amd na intel bụ ndị na-amalite ịrụ ọrụ na canonical, na n'ezie a ga-ebugharị uzuoku a na mir, na mir ga-emesị bụrụ ụkpụrụ.
ego na Linux dị na azụmahịa azụmahịa, ebe ubuntu anaghị achịkwa. N'ọnọdụ ọ bụla na nvidia o yikarịrị ka ọ ga-aga n'ihu na-akwado x ruo ogologo oge, dị ka frebsd na-akwado
Ajuju ajuju ajuju gini?
Maka na dị ka m maara, ọkọlọtọ na-ezo aka n'ụkpụrụ nke onye ọ bụla nwere ike (ma kwesịkwa) ịgbaso. Mana na nke a ọ metụtara naanị ngwaahịa ndị Canonical,
Dị ka Unitydị n'Otu, ị nwere ike ịsị na ọ mara mma ma bụrụ oge a ka ịchọrọ (okwu dị iche iche nke onwe gị n'ụzọ) mana site na nke ahụ ịbụ ịbụ ma ọ bụ ịbụ onye ga-abụ ọkọlọtọ enwere ọtụtụ ọdịiche.
Ihe ga - eme bụ na Canonical na OSs ga - ekewapụ kpamkpam na obodo ma mepụta ụzọ ọzọ maka ndị niile ji "nnwere onwe" akpọrọ egwuregwu egwuregwu ọgbọ ọzọ karịa nnwere onwe anaghị eji na ledoo.
Nke ahụ abụghịkwa ihe ọhụrụ, ọ dịlarị adị ogologo oge, naanị ugbu a ka a ga-enwe nhọrọ ọzọ maka klaasị ndị ọrụ ahụ.
Intel na Wayland na-arụkọ ọrụ ogologo oge, n'aka nke ọzọ egosiri na Wayland nwere ike iji Mesa-Android
Zaghachi ar @ y
Mir nwekwara ike iji tebụl android dị ka ị na-akpọ ha
M na-ahụkwu na ọ na-aga maka njikwa karịa maka ihe ọ bụla
Ana m akwado Ubuntu n'ụzọ zuru ezu. Enwere ihe nkesa Linux Linux karịrị 300, nke imerime ha anaghị enye ihe ọ bụla ọhụrụ, kama Ubuntu na-arụ ọrụ ọhụụ dịka Unity desktop, Ubuntu phone, mir, wdg. mgbe ahụ, ha na-aga na Ubuntu na-ekwu na ọ naghị akwado sọftụwia efu na ọ na-achọ naanị uru nke ya, mana m na-eche, Unity, Mir na ndị ọzọ abụghị sọftụwia n'efu? n'ụzọ dị otú ahụ na onye ọ bụla (onye maara) nwere ike ibudata koodu isi ma gbanwee ya ka mma ha. Agụkwara m na ụfọdụ na-ekwu na ọ dịbeghị mgbe canonical nwere mmasị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ mana agbanyeghị peeji GNOME (ọ bụrụ na okwu ahụ dị: P) site na canonical na 2006 Mark Shuttleworth nyere nnukwu ego na Ọrụ KDE ghọrọ otu n'ime ndị na-akwado KDE, na nkenke, echere m na ha na-enye distro nnukwu mkpa nke ha nwere ike ọ naghịdị eji.
Nsogbu a abughi nke ahụ, a na-atụ gnome na kde na wayland, ha agaghị agbanwe atụmatụ ha n'ihi na canonical kwenyere n'ụzọ ọzọ, nke anaghị ewetara uru ọ bụla na wayland, naanị n'ihi na canonical chọrọ. Enwere nsogbu ahụ.
Gịnịkwa bụ nsogbu ahụ? gnome ma ọ bụ kde agaghị anwụ anwụ maka na canonical na-akwado ma ọ bụ na-akwụsị ịkwado ụzọ ala. Onye ọ bụla na-ahọrọ ụzọ ọ bụla ha chọrọ. Maka m Ubuntu bụ ụlọ ọrụ na-akwado sọftụwia na-akwụghị ụgwọ site na imepụta ọrụ ọhụụ. Ọ bụrụ n ’ịkwado ọrụ na-aga n’ihu, ha mepụtara ndị ọhụrụ, ọ bụ maka na ha nwere ụfọdụ adịghị mma maka ọdịmma ha. Anwala ịchọ ebe gbara ọchịchịrị ebe ọdịghị.
Ọ bụ ụta na nvidia enweghị ndị ọkwọ ụgbọala n'efu? Kama ịkatọ ya maka enweghị ha, ọ dị mfe ịkatọ canonical, nke dị jụụ ma bụrụ ihe ejiji.
Na ihe omume nke mir anabataghi nkwado nke nvidia ma obu amd, aga m acho ihu ihu ihu gi, gi na onwe gi. ebe ahụ egosiri m na ị naghị echebara obodo, ma ọ bụ Linux, ma ọ bụ opensource, kama naanị ubuntu.
Nke mbu, ekpela m ikpe na-amaghị m, ọbụlagodi maka ikwu okwu na-adịghị emegide imeghe ma ọ bụ Linux n'ozuzu ya. Anọla m Gnu / linux mee ihe afọ iri na atọ, etinyerela m ụwa a nke ukwuu, ekele dịrịkwa ọrụ m. N'ịbụ onye edemede nke post ahụ, ị ​​kwesịrị isetịpụ ihe atụ.
Naanị ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n'okwu m bụ nke ị chọrọ ịhụ. Na-anwa ịta ụta maka ihe ị tụrụ anya na ị ga-eme ma ọ bụ nvidian na-eme, kama ịta ha ụta. Ọ bụ drawer. M na-eche banyere Ubuntu dị ka nkesa ọ bụla ọzọ, ọ dịbeghị mgbe m jiri ya na m pchome, mana nke ahụ anaghị egbochi m ịhụ ọchịchọ nke ụfọdụ n'ime gị nwere maka ihe niile na-esi Ubuntu.
Ekwenyere m, ọ dị mfe ịta ụta karịa ndị ọzọ.
Keep na-emehie ihe, nvidia na amd enweghị mmejọ ọ bụla na canonical na-aga mpekere linux ọbụna karịa, na -emepụta sava eserese dị iche, naanị n'ihi na ọ dị ha ka ọ. Ha achọghịdị linux ma ị nweghị ike ịrịọ ha ka ha na-akwado puku ihe anọ, yabụ na nke a ọ bụ canonical ụta dịịrị, aha otutu gị anaghị atụkwasị obi n'ihe ị na-ede.
Ezigbo ahịhịa ikpeazụ ga-abụ Debian iji Mir kama Xorg na / ma ọ bụ wayland.
Ọ bụrụ na PC gị na-eji NVIDIA dị ka kaadị vidiyo kachasị mma, mgbe ahụ ojiji nke RHEL, Mint ma ọ bụ Ubuntu dị irè (karịa Mint n'ihi na Ubuntu m furu efu na Unitydị n'Otu).
Ka anyị hụ ..., n'ihi na m na-eche ikwere na Ubuntu nwere ike imechu ihu na akụkọ ihe mere eme, ebe ọ na-enwetaghị nkwado ọ kwenyere, anyị ga-ahụ.
ikekwe ị ga-ewere ya
Isi okwu ya bụ na onyinye nke Ubuntu bụ, maka ọtụtụ akụkụ, naanị iji ya rụọ ọrụ na Ubuntu, dịka Ubuntu Otu, ya bụ, ha enweghị ọgụgụ isi nke imepụta ihe enwere ike iji maka Linux ụwa n'ozuzu mana naanị maka naanị maka Ubuntu, ma nke a bu ebe ndi mmadu na-ewe iwe, n'ihi na obughi anyi nile na anyi na Ubuntu na Canonical kwurita okwu ma o bu na ekwesiri ka a manye anyi ime ya, agbanyeghi ego onyinye Mr. Shuttleworth nyere n'oge ya.
Ma lee anya, ọ bụrụ na ọ bụ ngwa a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ ebe njikwa a kapịrị ọnụ, gafere, mana mgbe ihe a na-egwu bụ nkwado eserese nke gburugburu desktọọpụ n'ụzọ ọ bụla, echere m na Canonical kwesịrị iweta ihe masịrị ha.
Nwere ike kwuo nke ka elu, mana ọbụghị nke doro anya
Agbanyeghị na anaghị m eji ya, enwere m Ubuntu Otu na Arch m, dịka m tinyere Unity na ya.
Azịza ya bụ gara aga ikwu XD
Na njiko, enwere ike itinye ya na xDD niile, mana dịka ị ga-ahụ, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ndị akpọrọ akpọrọ na ịdabere naanị site na Ubuntu, ọ gaghị adị na nchekwa.
ahh lol! Ndo, ọ bụrụ na ọ dị na repo obodo, ị nwere ike ịhụ na ọ hapụlarị aur xD
Ghọtakwuo, mmiri adịghị
Enwere ike itinye ihe niile na njiko, mana ịdị n'otu na-agba ọsọ na-achọ nnukwu ọrụ na nkedo site na onye ọrụ (enwere post na njiko arch banyere nke a).
Dị ka ha na-ekwu site na AUR ị nwere ike iwunye ọtụtụ ihe (ọbụlagodi ụfọdụ mmemme Windows nke na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru Wine), mana ịwụnye Unity, telita.
Ugbu a, enwere ike na Arch ma kwatuo m nwere ike iwunye ịdị n'otu (mgbe m nọrọ ogologo oge na-adabere na ịdabere na ya, ọbụlagodi iji Yaour ma ọ bụ Packer), mana ugbu a chee banyere distros ndị ọzọ, dị ka Debian ebe ọ bụrụ na ị ga-emerụ nke gị, ma mee ngwugwu .deb na-ebu ya.
Ma nke a MIR. na ụfọdụ distroki nke Ubuntu nwere ike ịkwụsị iji ya (nke m na-ekwenyesi ike na ndị Mint ga-eme).
Otu ihe bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na nke ọzọ bụ ime ka ọ rụọ ọrụ naanị na Linux distro, na - ahapụ ndị ọzọ.
Agbanyeghị, ka anyị wepụta oge iji hụ ihe na - eme na Wayland, a bụ m n’etiti ndị nọ na Xorg ahụ, agbanyeghị na ọ na - arụ ọrụ ọfụma, na - ebido.
Echere m na otu ihe, ị nọghị naanị gị.
Ọtụtụ afọ gara aga, agbahapụwo m Ubuntu, Canonical, na nke kachasị mkpa, ihe niile ha na-anọchite anya ya.
Isiokwu nke Wayland bụ ahịhịa ikpeazụ, nke mere na m kpebiri ihichapụ ihe dị ka posts 80 raara nye Ubuntu na blọgụ m.
Canonical na N'ihi Ubuntu, bụ na ha onwe ha, m na-eche na ọ bụ "ezi", ma ha enweghị nkwado nke free software obodo.
Ha dị ka parasa nke na-eri nri n'enyeghị ya ihe ọ bụla, ụzọ nke ha họọrọ.
Cannonical bụ ụlọ ọrụ kachasị enweghị ekele m hụgoro mgbe ọ bịara na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ na nso nso a.
Ana m ekele gị maka ịmebere etiti ngwanrọ, n'ihi na enweghị ya, agaghị m ama ihe akpọrọ nchịkọta ma ọ bụrụ na echetaghị m (ụdị dị na Debian dị mma karịa nke gụnyere Ubuntu na ezinụlọ) GDebi na launpad.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ma enwere ụlọ ọrụ ọ bụla dị njọ karịa Cannonical, ana m agwa gị na Apple bụ onye na-eti ya ihe (sava ​​ha na-eji Linux na Windows Server 2008 wee ruo ugbu a enweghị mkpesa sitere n'aka ọtụtụ ndị ọrụ ha ebe ọ bụ na ha hụrụ ha dazzled site aqua interface na ịdị mfe nke echichi nke ngwa ha).
Ọmarịcha ire ọkụ nke pandev92 mere. Enwere m olileanya na ọ na-eme ka ọkụ ọzọ ma raara onwe ya nye Debian.
Ihe dị iche bụ na apụl anaghị ere gị ngwanrọ n'efu, yabụ na ọ na-apụ apụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, site na mbido ọ na-agwa gị ihe dị.
Ọfọn, Mac nwere Bash na Bash bụ GPL # na ahụbeghị m na akara ndị ha na-eji na-agba ọsọ ya na-ebi ma ọ bụ ihe
mana nke ọma, oge ga-agwa Quen Win, mana site na ihe m na-ahụ IHE SITE n'akụkụ atọ anyị ga-ejedebe n'oké ịtụnanya
Ahụghị m ihe ọ bụla dị njọ na Canonical chọrọ ịme ngwanrọ nke ha dịka ọdịmma ha si dị. Ubochi Canonical gbaliri ịmanye ndi ozo imeghari na ngwanro ha a gha enwe nsogbu, mana KDE ekwuola na ha agaghi anabata Mir. MBA, onye ọ bụla chọrọ imeghari na Mir kwesịrị ime otú ahụ, na onye ọ bụla achọghị ịme ya.
Canonical bụ ụlọ ọrụ ma na-agaghị ele anya maka ọdịmma gị, ọ dị nfe. Kedu ihe dị njọ na ha chọrọ ijikọ ikpo okwu ha na Mir? Ha choro ihe nkesa nke enwere ike iji PC, mbadamba, mobiles, wdg, o doro anya na Wayland ekweghị ka ha rụọ ọrụ otu ahụ, ọ bụkwa ebe ahụ ka a mụrụ Mir, dịrị njikere.
ọ bụrụ na otu ụbọchị ị ga-eji kde na ndị ọkwọ ụgbọala nouveau, anyị ga-ekwu okwu.
Ọfọn, M ga-eji ndị ọkwọ ụgbọala mepere emepe nke ATI n'ihi na ndị AMD (ma ọ bụghị Canonical) achọghị ịkwado nkwado maka kaadị m.
Eeee, igwe ATI m adiwo ochie. Ma tupu ị gwa m ka m zụta nke ọhụrụ, nye m ego ahụ. Yabụ site n'echiche m, onye ọjọọ ahụ bụ AMD. Ma ọ dịghị. A na m ahụ ya dịka Ebum n’uche. Na m screwed elu? Ee ee, gịnị ka anyị ga-eme? Ma ọ bụghị ya mere m ji ebe ákwá.
Ga - ahụ na n’ikpeazụ ihe a niile gwụsịrị n’enweghị ihe ga - enwe nkwado maka ihe niile.
@ pandev92, ị na-ebe akwa ihe iti egwu ị natabeghi. Anyị ga-ahụ ihe na-eme Wayland na Mir. N'oge a ị na-adabere n'echiche ndị dị ize ndụ dị ka ndị ọkà ihe ọmụma dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ na oru ngo n'oge ọ bụ nwata nwere ike iwepụta onye mepere emepe ma kwado ya… guysmụ okorobịa si Wayland ga-adị njọ nke ukwuu n'agbanyeghị na a na-ahụ ha anya (echeghị m na ọ ga-eme). Ma anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-adabere na ihe AMD na NVIDIA kpebiri. Ya mere klọb maka ndị kwesịrị ha (n'oge ahụ).
Ga-akwa ákwá mgbe niile iji gbochie ya, ka ọ ghara ịbụ na oge ga-aga, ịnọdụ ala ichere ọrịa niile ga-abịakwute gị, abụghị amamihe.
N’ezie, ịkwa ákwá n’ihe ọ bụla bụ ihe amamihe dị na ya. Ihe i kwuru XD.
Ndị mmepe KDE n'onwe ha ekwuola na ha ga-echere mmepe. N'oge a ha agaghị akwado Mir n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ ma ọ nweghị uru ọ bụla karịa Wayland (mana ha anaghị ewepu iso Mir na-arụ ọrụ n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ha hụ na ọ dị mkpa).
Onye na-ebeghi akwa, adighi ara ara.
@ Windóusico: Ihe ndị mmepe KDE kwuru bụ na ha agaghị akwado Mir ruo mgbe ọ bụ ihe nkesa maka otu ikpo okwu (Ubuntu), na mgbakwunye ịgbanwe ụdị ikike Mir na ọbụlagodi injinia nke na-esiteghị na TDD (Ule Ule Mmepe). Echeghị m na Ubuntu chọrọ ịgbanwe akụkụ ndị ahụ ma echeghị m na ndị KDE ga-adalata (echeghị m).
Dani, ọ bụghị na "ọ nweghị ihe mere" n'ihi na KDE esoghị Mir gaa mana ya na Wayland, etinyebeghị mgbanwe ndị ahụ, nsonaazụ mkpebi ndị a anyị ga-amalite ịhụ site n'afọ ọzọ mgbe KDE na Gnome zuru oke ( ma ọ bụ na ezigbo akụkụ) dị na Wayland, na Unity na Mir.
Fannụ ọkụ n’obi? n'ezie
Ahụghị m ihe ọ bụla na-ezighi ezi na Ubuntu na-aga n'ụzọ nke ya, ọ nweere onwe ya ime ya.
Ihe m na-aghọtaghị bụ okwu gbasara ị chọrọ ili X11 / X.org, onye ọ bụla na-ekwu maka Wayland ka ọ ka mma yana X.org bụ ihe ochie na ihe ndị ọzọ, mgbe ọ kwụsiri ike, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ ihe tozuru oke ọ na-emepe kemgbe ọtụtụ afọ. Na Windows enweghị ihe dịka usoro X nke eserese nke na-enye ọtụtụ puku ihe ị nwere ike ime na netwọkụ ahụ n'ihi usoro ihe nkesa ahịa ya, mana ọ nweghị onye na-ekwu na Windows anaghịzi adị na isiokwu ahụ. Mmadu enwere ike ikowara m ihe mgbochi na igba ochie X11 / X.org ga-eji dochie ya?
The Xorg mmepe onwe ha bụ ndị na-emebe wayland. Na nkenke, koodu X.org siri ike idebe, ọ na-ewe ndị mmepe ọtụtụ ọrụ.
N'ọnọdụ ahụ ọ dịghị mkpa, n'ihi na nke ahụ pụtara na ha ga-emepụta ezigbo ndakọrịta oyi akwa ka ngwa ndị na-eji Xorg rụọ ọrụ nke ọma na Wayland.
Dị ka m maara na ọ nweghị 'Vesa' Driver maka Wayland ma ọ bụrụhaala na edozibeghị nke ahụ, ọ nweghị ihe ịtụ egwu na X11
Okwu dị otú ahụ mara mma ma ghara ịkụ aka. : ') * kụọ aka gị *
LOL! Ederede m. Site n'ụzọ, ana m arịọ mgbaghara maka obodo DesdeLinux maka ịhọrọ aha ọjọọ maka post ...
Ọnweghị ihe ọ mere. Edere ederede gị nke ọma karịa nke m (lee https://blog.desdelinux.net/convirtiendo-a-un-windowser-en-linuxero-como-hacerlo/).
Nke ahụ masịrị m, nke edere nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị. Aga m ahụ ma ọ bụrụ na mụ etinye ya n'ọrụ na enyi m hụrụ Windows n'anya (nna ya bụ otu n'ime ndị wetara Win2 na Colombia).
Ha na-ebo ebubo Canonical nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị?
Mgbe Linus Torvalds kwuru na "Linux nwere ihe ịga nke ọma n'ihi ịchọ ọdịmma onwe na ntụkwasị obi", enwere ọtụtụ ndị toro ọnwụ. Mana ugbu a ọ bụrụ na Canonical gosipụtara okwu nke Torvalds yana mmepe ịchọ ọdịmma onwe ya nanị, Ubuntu bụ mmụọ ọjọọ.
Canonical kpochapụrụ oghere oghere Amazon, naanị maka ịghara ịdọ onye ọrụ aka na ntị ihe lens ahụ na-eme ma ghara igosi ozi iwu nzuzo site na mmalite.
Mana ahughi m ezi nma nke otutu nkatọ nke Mir.
Banyere ndị ọkwọ ụgbọala nvidia, jide n'aka na ọ bụrụ na RedHat ma ọ bụ SUSE tinye Wayland, ejiri m n'aka na ha ga-akwado ya.
Dịka onye ọrụ Kubuntu na KDE, anyị ga-ahụ. O doro anya na a ga-enwe ebe nchekwa na-akwado X na Wayland. Ma ọ bụ na anyị ga-ahụ ihe ndị na-elekọta Kubuntu kpebiri.
"Echere m n'echiche n'ezie ezigbo echiche nke oghere mmalite bụ ka ọ kwe ka mmadụ niile bụrụ" ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ", ọ bụghị maka ịnwa ime ka mmadụ niile tinye aka na ọdịmma ọ bụla."
Ekwesịrị m ịsị na ekwenyeghị m iji okwu ndị ahụ mee ihe n'ụzọ nkịtị, mana ọ bụ eziokwu.
Sụgharị ihe Linus Trovals kwuru:
"Ugbu a, echere m na ezigbo echiche nke imeghe oghere bụ ikwe ka mmadụ niile nwee 'ịchọ ọdịmma onwe onye', ọ bụghị maka ịnwa ime ka mmadụ niile tinye aka maka ọdịmma."
Na ọ bụ eziokwu. Anyị ahụwo ya ruo ọtụtụ iri afọ na desktọọpụ na sọftụwia nke bụ ndụdụ na ndụdụ nke ndụdụ, nke ọ bụla jiri ọhụụ nke ya, ma ọ bụ n'ihi na nke mbụ ekweghị mgbanwe ma ọ bụ nke abụọ achọghị itinye echiche ha wee bupụta nke ha n'ihu ọha na-enweghị ndị nnọchi anya. .
Ka anyị hụ, atụgharịghị m ya maka na onye ntụgharị Google mere nke ọma. Nsụgharị ga-abụ:
"N'ezie, ọ dị m ka n'eche na echiche nke OpenSource bụ ịhapụ mmadụ niile ka ha nwee 'ịchọ ọdịmma onwe onye', ọ bụghị ịnwa ime ka onye ọ bụla tinye aka na ọdịmma ọ bụla."
Ọ bụrụ na atụgharịrị ya na "Ugbu a," ọ dịka a ga - asị na Torvalds chere na ugbu a echiche nke OpenSource nke o nwere, agbagọla ndị ọzọ, ọ dịghị otu ahụ. Torvalds na-eche na ihe ịga nke ọma nke OpenSource bụ ihe kpatara ya mgbe ụfọdụ n'ụzọ ịchọ ọdịmma onwe onye nke ọrụ.
Na nke a bụ eziokwu, mana cheta na n’oge gara aga, enwere ọgba aghara n’etiti ọha na eze n’etiti okwu “sọftụwia efu” na “oghere mepere emepe.” Na mgbakwunye, n'ime afọ 90, ha kwadoro nkà ihe ọmụma nke sọftụwia n'efu karịa ihe mepere emepe ebe ọ bụ na ngwanrọ nke oge ahụ eruteghị Linux ma bụrụ nke ewepụrụ karịa nke ụlọ ọrụ Williamsoft Microsoft.
Ugbu a, site na ngọngọ nke NVIDIA, ATI na ndị ọzọ, ọtụtụ esila na nkà ihe ọmụma nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ mepee isi mmalite, n'ihi eziokwu ahụ bụ na "nnwere onwe 4" nwere nnukwu ntụpọ na nnwere onwe 3, ebe ọ na-elekwasị anya na ihe bara uru ma ọ bụghị site n'echiche onwe onye.
Enweghị m ọtụtụ ozi gbasara ọrụ Mir, mana m ga-ajụ ndị maara karịa ma ọ bụ ọrụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ọ bụrụ na ọ bụ, gịnị kpatara ị ga-eji katọọ na Ubuntu anaghị atụpụta ihe ọhụụ? mepụta ọrụ ọzọ karịa Wayland? Ma ọ bụ ọ bụ ọrụ mechiri emechi? Ma ọ bụ ya mere iwe ji nke na ọ nweghị onye nwere ike gbanwee ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọ masịrị gị?
Dịka ị ga-ahụ, ha nwere naanị obi abụọ, onye ọ bụla nwere ikike iwere ọnọdụ ha chọrọ maka ma ọ bụ megide nkesa, na ngwụcha ihe niile m chere na ndị anyị na-eji GNU / Linux ọ bụ maka na anyị achọghị ka emechie Software.
1- Ọ bụ ọrụ mmeghe maka iji bụrụ ụdị njikọta na ịdị n'otu
2- N’ịbụ onye ọrụ n’ezi n’echeghị echiche, ọ pụtaghị na ndị ọzọ nwere ike gbanwee ọrụ a etu ha si masị ha, n’okwu a, canonical nwere ike imebi api mgbe ọ bụla ọchọrọ na enweghị ike ịme ihe ọ bụla.
3 - Mmadu na ewe iwe, nihi na onye mbu gha agha ugha, mgbe ahu o ghagha ozo si na asland emeghi ihe mir (ma oburu na eme ihe obula na ihe ozo) ma n'ikpeazu n'ihi na ndi nile ndi na aru oru na uzo di iche iche ewerewo ndi nzuzu, kde, gnome, e17, gtk, ndị nke qt wdg,
4-Ọ bụrụ na ị gbanwee ya n’ọchịchọ, ikekwe ndị ọkwọ ụgbọala mechiri emechi agaghị arụ ọrụ xdddddddddddddd
Aghọtara m - ma dị ka ihe ọjọọ - na Mir bụ naanị Wayland retouched iji kwado ndị ọkwọ ụgbọ ala gam akporo ma ghara ichere Wayland na ndị ọkwọ ụgbọala ya - ka eme ya - iji nwee ike iji ekwentị Ubuntu bịa n'oge, ebe Xwindows maka ARM GPU jiri nwayọ.
Dị ka Nvidia na AMD maka x86_64 enweghị ndị ọkwọ ụgbọ ala maka gam akporo, Intel nwere nnwere onwe ga-agbanwe ngwa ngwa ma ọ ga-adị mkpa iji ihe ọzọ ma ọ bụ obere arụmọrụ na-enweghị Nvidia na AMD,
Yabụ na desktọọpụ Ubuntu ga-enye Wayland opekata mpe nhọrọ, mana na ekwentị na mbadamba ha chọrọ MIR, ebe ha na-eme ya, ọ bụrụ na ha nwere ike ịrụ ọrụ na desktọọpụ ha zọpụtara onwe ha.
Wayland na-ewe ogologo oge, o were obere oge ịmalite iyingomi ihe site na MIR dị ka ịnabata ndị ọkwọ ụgbọala android, maka ihe kpatara ya.
Nsogbu banyere ihe niile sitere na ibe nke ibe ha, nke, ma ka anyị kelee ya, Linux abụrụla nnukwu azụmaahịa, ndị injinia nke Wayland ma ọ bụrụ na MIR ga-aga nke ọma, ha ga-achọta ọrụ ọzọ, ọ bụrụ na ọ ga n'ihu n'ihu, ha ga-ekwenye na enweghị ike ha.
Nabata na asọmpi - nkwado - na koodu MIR bụ GNU, n'agbanyeghị eziokwu ahụ n'ụzọ ndị Wayland chere na ha raara onwe ha nye, mana Ubuntu nwere ọtụtụ ndụdụ, ụfọdụ ndị na-aga nke ọma dị ka Mint anaghị eche na a raara ya nye n'ikpeazụ, ọdịdị ka na-aghọ aghụghọ
ọ bụ ya, ị nweghị ike ikwu karịa ma ọ bụ karịa
Aghọtaghị m ha. Ọ bụrụ na Canonical mee “x” ka ọ gbanwee nye Ubuntu, ha na-akatọ ya mgbe niile na ọ “na - eche maka ndị ọrụ ya, ọ bụghị ndị nke distros ndị ọzọ”, na “ọ na - echezọ onye mere Ubuntu”, na “oge ọ bụla ọ dị ka OS X ». Ka o sina dị, ọ nwere ike ịga n'ihu ma ghara ịkwụsị.
Ekwenyere m n'ọtụtụ n'ime isi ihe ndị ahụ, yana ọtụtụ ndị ọrụ Ubuntu bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi, mana etinyekwala ya oke. Dịka ọmụmaatụ, mgbe Manjaro (echere m na nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ya) kpebiri ịhapụ Cinnamon na ihe niile (ka mma ịgụ isiokwu a bipụtara ebe a), enwere mkpesa na nkọcha na-adịghị agwụ agwụ na GNOME, n'ihi na ọ bụ ha kpatara na blah blah blah.
Yabụ, dị ka Cinnamon ga-adị ugbu a, n'ụzọ ụfọdụ, sọọsọ Mint, ọ dịghị onye na-ekwu ihe ọ bụla gbasara ya, n'agbanyeghị na a na-eche ya mgbe niile dị ka ebe pụrụ iche maka distro ahụ, n'agbanyeghị ma enwere ike itinye ya na ndị ọzọ ma ọ bụ na ọ gaghị.
Dịka m kwuru na mbido, anaghị m aghọta ha.
Amabeghịkwa m Ubuntu ruo ọtụtụ afọ, m na-eme ka o doo anya.
bụ na gburugburu abụghị ihe bụ isi nke gnu / Linux, onye ọ bụla na-eji nke ọ chọrọ, ebe ọ bụ na ọ naghị emetụta mwepu, mana sava eserese dị ka iji gbanwee kernel.
Ọbụna ma ọ bụrụ na Ubuntu gbanwere BSD ma ọ bụ mee ndụdụ nke OpenSolaris (iji were ihe atụ kachasị), anaghị m ahụ nsogbu ahụ, ha agaghị emebi iwu ọ bụla nke "ngwanrọ n'efu", n'ezie, ọ bụrụhaala na ikikere nke kwuru kernels dakọtara na sọftụwia ejiri na distro, nke m amaghị.
Ee, m ga-ekweta na e nwere azịza banyere etu Canonical si echefu banyere ndị ọrụ yana ihe niile ahụ, mana ọ bụ eziokwu na nnwere onwe ime nke a adị, dịrị ma ga-adịkwa.
ọ bụrụ na ọ mere bsd enweghi nsogbu. n'ihi na ọ dịghị onye ga-enye nkwado maka ubuntu ndị ọzọ n'ebe ahụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-aga n'ihu na-akwado linux dị ka ndụ xDDDDDDD
Gbaso echiche nke ikwu gị, na iburu n'uche na ị bụ onye edemede nke post:
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme MIR enweghị nsogbu. n'ihi na agbanyeghị ka ubuntu si dị, ndị mmepe ọkwọ ụgbọala ga-aga n'ihu na-akwado linux dị ka ndụ xDDDDDD
Na-arịọ mgbaghara tupu oge eruo, ka ị ghara iwere okwu gị dịka ntọala na ịme mgbanwe ụfọdụ na ikpughere ya obodo ọ bụla, ị na-ewepụta ntinye ọzọ nke omume m na ndị ọrụ Ubuntu ndị ọzọ juru.
Kpamkpam ezighi ezi, kenel bụ ihe miri emi karịa ihe eserese na eserese ma na-eburu n'uche na ọ bụrụ na ubuntu gara bsd, ọ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na ọtụtụ puku PC n'ụwa, ọ gaghị enwe nkwado site na onye ọ bụla.
Ọ bụ okwu nke ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ!
FlameWar na efere ọlaọcha ... Nke a bụ otu akụkụ nke ihe kpatara Ubuntu, ọ dịkarịa ala nye m ọ naghị adọta uche m ... ...
Isiokwu ahụ gosiri na Ubuntu enweela mmeri n’ihe ndị ọzọ nọ kemgbe na-ada ada nke ukwuu maka iche echiche dịka onye dere akwụkwọ ahụ.
Zaghachi Mariano O.
ubuntu enweela ihe ịga nke ọma ..., ee, ọ bụ ya mere onye ọ bụla ji eji ya (lee asusu)
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ịga nke ọma, ọ ga-enweghị isi nye gị na ha mere sava eserese ebe ọ bụ na ọ gaghị emetụta onye ọ bụla.
o gbasara m! makana o na emetuta m na eji Gnu / Linux l na adighi ubuntu
oleekwa otú o si emetụta gị nke ukwuu? enweghi uzo, gnome na okpu uhie? Ọfọn, obere ịkpọasị na ndị ọzọ wena jụụ
Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu tammux, ị gaghị ajụ ihe a. Mana ebe ọ bụ na i meghị ya, aga m edegara gị akụkụ kachasị mkpa:
Ọ bụ ihe nkịtị maka ndị mmepe ịda mba, ha na-eche ụwa, ebe naanị gburugburu ebe obibi nwere ike ịdị na-agba ọsọ bụ ịdị n'otu, na ndị ọzọ niile na-achọghị ma ọ bụ dị ka ịdị n'otu, anyị enweghị ike iji gburugburu nwere nkwado ọkwọ ụgbọala mechiri emechi?
iche na echiche adighi egosi ihe di adi
Naanị m na-eche ihe kde na gnome devs na-ekwu, ọ dịghị ihe ọzọ 🙂
na nke a, gnome na okpu uhie na-aga aka na aka, ọzọ, ọ bụrụ na ị naghị eji ubuntu nke ọma maka onwe gị mana ịkwụsị ịkwanye bọọlụ gị, anyị anaghị akatọ KDE, fedora ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eji, rapara na ya ma hapụ ndị ọzọ ma ọ bụ dika ha siri n’abu: di ndu ma nwua
. ndị ọzọ ma ọ bụ dị ka ha kwuru na abụ: ndụ ma nwụọ [/ see okwu]
N'ezie, m ga-arapara na ya, yana kde, yana e17, mana ọ bụrụhaala na mmadụ gbalịa ịmegharị gnu / linux ụwa na ọchịchọ, m ga-ekwu ya ma ịchọrọ ma ọ masịghị.
n'ozuzu ka ị ghara ikwu mgbe niile ụwa Linux na-emejọ omume nke ndị ọrụ ya na ịkọwapụta post gị: »na-eriju afọ na omume nke ụfọdụ ndị ọrụ Linux»
Odi nma, ebe ubuntu a drinksu mmiri na Linux, oburu na iju gi afo, jiri osx xDDDDDDDDDDDD
enwere ike itinye otu azịza gị
haha, ihichapu ihe m kwuru, okwu esemokwu agwụla gị ?????
Enweghị m ike ihichapụ ihe, mmụọ.
Nanị ụzọ ị ga - esi debe Canonical bụ nke ọzọ doro anya na Ubuntu. O doro anya na ọ dịghị otu onye ọrụ oge mbụ, onye na-achọ izu ike na ọrụ siri ike dị n'azụ, nke anaghị agbaze na mgbanwe mbụ. Site na ụlọ ọrụ siri ike n'azụ enweghị ọtụtụ: Fedora, akwa akwa ule ma ọ bụ OpenSUSE, na-agbanwe agbanwe maka gburugburu ebe obibi. Ndị ọzọ bụ ọrụ nke mmadụ ole na ole na-anụ ọkụ n'obi, na-enwe ihe egwu nke ịkwụsị ma ọ bụ dị mgbagwoju anya ịwụnye na karịa ihe niile, hazie. Nyaahụ ka m gbalịrị imebi ụzọ m iji wepụ Ubuntu, Antergos. Achọpụtara m na ọ nwere ihe ọ bụla arụnyere dị ka ọkọlọtọ…. ya mere, m na-enyo enyo na nrụnye post-aghaghị ịbụ nnwale. Anaghị m ekwu maka mmemme dị ka LibreOffice…. Ọ fọrọ nke nta ka m ahọrọ inwe ike ịhọrọ ihe m chọrọ iji wụnye…. mana n'ihe dika ngwugwu ka onye nbipute wee rụọ ọrụ, ma ọ bụ wifi, ma ọ bụ kaadị TV…. wee hazie ha…. uuuufffff. Nke ahụ bụ ihe Ubuntu nyere: oru ngo nke nwere obere ohere ịhapụ na usoro iji malite. Taa nke a bụ naanị nke ndị Ubuntu n'onwe ya nyere given. ọ bụ ezie na enweghị Canonical n’azụ. Agbalịrị m ihe niile na m na-agaghachi Ubuntu n'ihi na nsogbu na-akwụsị mgbe niile ma ana m agbasi mgba ike na console, ihe m chefuru Ubuntu. Fedora bụ ihe kacha nso…. mana echeghị m na ọ bụ ka o kwụsie ike. Arch M na-enwekarị mmasị na RR mana ọ dabere na obodo ndị na-anụ ọkụ n'obi m na-enyo enyo na ọ dị njọ karịa Debian.
nke oma, amaghi m eziokwu, nke ahu bu ihe doro anya nke oma, etinyego m Linux chakra na enyi m abuo ndi na amaghi ihe obula banyere Linux, ma taa ana m ahu ka ha nwere obi uto na iji kde na chakra, ma ha amaghi eziokwu otutu, ma ha nwere ike hazie ihe niile n'onwe ha, dị ka isiokwu nke ngwa nbipute ma ọ bụ tabom tablet.
Maka m enwere ụzọ ndị ọzọ dị ukwuu maka ubuntu, dị ka emepe, pclinux os, ọbụlagodi sabayaon n'onwe ya (onye nrụnye na-enye ya automaico ma ọ dị oke mfe) wdg wdg, nke onye ọrụ nkịtị nwere ike iji. Ihe na - eme bụ na ha enweghị ego iji jupụta ịntanetị na mgbasa ozi.
Enwere m ike ịgwa gị n'atụghị ụjọ na m ga-emejọ na Linux Mint bụ ọrụ nwere ike ibi na-enweghị Ubuntu. E nwere ndị nkesa ndị ọzọ dị mfe iji: Manjaro, Chakra, Neptune OS ... agbanyeghị. Ubuntu abụghịzi naanị onye na-enye onye ọrụ "ihe dị mfe".
Ana m agwa gị okwu site na ahụmịhe nke m. Gnome na-amasị m ma Debian na-amasị m ma ọ nweghị nke na-enyeghị m nsogbu. Naanị na Ubuntu ka ha dị obere.
Banyere Mint…. Echeghị m na ị nwere ike iji ike nke Canonical na atụmatụ ya. Echere m na ọ dị ka Canonical enwere naanị distros dị ka Fedora.
Tanglu di ohuru ma kwe nkwa Debian + KDE
Ma echeghị m na ọ ka na-apụta. You lelee SolydXK anya? Ọ bụ Debian + KDE ma ọ bụ Debian + XFCE
Linux Mint Debian bụ ihe atụ doro anya
Echere m na Mint adịworị karịa ọrụ. The Debian Edition (LMDE) na-eto eto na-enweghị nkwụsịtụ, ọ dị ọkụ karịa nke wuru na Ubuntu na, n'agbanyeghị na ọ dabere na distro na-adịghị akwụsi ike (Debian Testing), ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Anọ m na-eji ya ihe karịrị otu afọ na m ga-ekwupụta na o wetaara m nsogbu karịa Ubuntu na mmelite ya na-adịgide adịgide.
LMDE anọwo na oke nke ya ruo ọtụtụ afọ, mana buru n'uche na ọ dị nwute na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile maka ndị Linux Mint team, yabụ na ọ naghị egbu ya dịka o kwesiri, nke kpatara oke nkụda mmụọ nke ụfọdụ ndị Ha na-aga eleda anya na mgbe eziokwu ọ bụghị nke ọjọọ.
Tupu m ahụghị njọ na Mint na-ahọrọ ịdabere na Ubuntu karịa na Debian n'ihi na ụzọ ahụ ha zọpụtara ọrụ, mana ugbu a na-eche banyere ya karịa, echere m na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na onye isi na Debian na (dịka ọmụmaatụ ) nwere mbipụta nke abụọ dabere na Ubuntu si LTS iji mee ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya obi ụtọ, nke bụ ihe ha na-anwalekarị.
Maka otutu nsụgharị m gbalịrị ịtọpụ onwe m site na Ubuntu n'otu oge ahụ dị ka idozi nsụgharị m. Agbalịrị m Mint…. ma ọ dịghị ihe. N'agbanyeghị ihe m gụrụ, Ubuntu ka bụ nzọụkwụ dị elu n'echiche nke idozi ndụ gị. M na-ahụkarị nsogbu dị ole na ole na Ubuntu karịa nke ọ bụla ọzọ.
Ma okwu banyere ịdị n'otu, ihe nkesa eserese ọhụrụ, usoro mmepe nke na-edo anya mgbe ụfọdụ na mgbe ụfọdụ mgbagwoju anya, wdg ... .. n'ikpeazụ mkpebi nke afọ ndị na-adịbeghị anya dịka Steve Jobs dị ọnụ ala .... Ọ na-akpali m ná mbọ m na-echefu Ubuntu.
N'oge m na-aga n'ihu na Ubuntu GNOME na olile anya m ugbu a bụ GNOME OS na m nwere olile anya bụ eziokwu dabere na Debian, Antergos mana currada ọzọ etinyere ma ọ bụ ọbụlagodi Debian dị ọcha ma ọ bụrụ na ọ nakweere mmalite ọsọ ọsọ ma ọ bụ RR.
N'oge okpomọkụ a, obere oge m nwere ike gbadata na Debian ọhụrụ.
Tux de Triana dijo
@jose, ana m amata gị kpamkpam, m na-anagide Ubuntu Gnome n'ihi okwu nkasi obi, mana omume Canonical na njedebe ga-eme ka m gbahapụ Ubuntu
Zaghachi Tux De Triana
Ekwetaghị m. M wụnyere Fedora na akwụkwọ nwanne m nwanyị, ọ maghị ihe ọ bụla gbasara Linux. Ọzọkwa, na desktọọpụ a maara nke ọma, arụnyere m OpenSUSE na GNOME ma enwebeghị mkpesa ọ bụla.
Isiike imeghe maka desktọọpụ?
Ma olee ebe ị ga-esi nweta ya, ọ bụrụ na ọ bụ ihe megidere ya.
Ihe e nwere ịgụ.
Ubuntu sitere na Debian, nke bu ezigbo onye ọsụ ụzọ nke echiche nke ịdị mfe iji n'ụzọ ọbụla nke okwu (desktọọpụ, sava, ngwaọrụ ARM…). Ọzọkwa, amalitere m na Mandrake 9, nke m nwere nkụda mmụọ n'ụzọ ọ na-ahazi nchịkọta ya .rpm nke m mechara daa ada nke Debian sụgharịrị (nsụgharị mbụ m ji mee ihe bụ 5 akpọ Lenny, na-enwe ụfọdụ mgbochi na Squeeze edoziri na ọrụ PC nke desktọọpụ), ma echiche ya bụ otu ihe ahụ, m gbalịrị ịchọta distro yiri Debian nke sitere na ya, mana m mechara laghachi Debian (Daalụ Ubuntu maka iji Sid na nsụgharị na ule gị ugbu a na LTS), Na mgbakwunye, distros ndị ọzọ dịka Slackware na CentOS nwere ntọala kwụsiri ike, mana ndị na-agbapụ na ndị na-agba ọsọ karịa Debian nwere (Ekele, EsDebian maka ịmejọ aha maka ndị ọrụ nke ọmarịcha distro a, mana m na-ahọrọ ige ndị otu na FSF n'ihi na opekata mpe ha mara etu esi akwado ntọala ya).
Maka ndị ọrụ Ubuntu, m na-atụ aro ka ị jiri LTS, ebe ha dịkarịa ala ugbu a karịa ndị na-agba ọsọ agba ọsọ.
Enwetara m OpenSUSE maka enyi ọ na-eji ekiri ihe nkiri, ịnyagharịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe mgbasa ozi, ya na ya anọnyere ọnwa 2 ma ọ na-enwe obi ụtọ, na naanị ya maara windo na obere ihe. Ihe OpenSUSE siri ike, amaghi m ihe i bu n'uche.
N'ezie, ụbọchị Canonical na-eme akụrụngwa dị ka ọrụ emeghe Mee, ebe ị nwere ike ikpokọta ngwugwu maka distro ịchọrọ, anyị ga-ekwu okwu. Agaghị m akwado Canonical ọzọ n'ihi na, ebe ọ bụ na ha lekwasịrị anya na aka ha na ụlọ ha dị na mbara igwe, ha anaghị eme ihe ọ bụla maka ngwanrọ na-enweghị ego, n'adịghị ka, dịka ọmụmaatụ, Suse.
Dị ka abụ ahụ kwuru, sị:
Ebee ka anyị ga-akwụsị?
jiri àgwà ọjọọ na nzuzu a
ka anyị nye ụzọ ịdị umeala n'obi ...
mana hey, aga m eji wayland n'ihi na m na-eji Fedora, ndị ọzọ bụ nke pere mpe na ya.
M ga-asị na anaghị m echegbu ma eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ọ bụghị ụkpụrụ na-agha ụgha na wayland nwere ike nke ọma na-uru nke, ma ọ bụ na e nwere ezi ihe mere ikewa?
Enwere m mmasị na distros ndị ọzọ kama Ubuntu, na ịdị n'otu abụghị nnukwu nsogbu, ihe ngwọta ya bụ ntinye net, XFCE na ọ bụ ya, maka ugbu a.
Gini mere m ji eji Ubuntu n’oge a? Enwetara m Arch ma chọọ usoro nke nwere ike inye m ihe m ga-achọ na mberede. Taa bụ ụbọchị ahụ.
O juru m anya na achọtara m edemede a, ọ ga-abụ oge ịmalite iche echiche banyere Debian.
Tinye Debian ka ogbe Arch, yabụ ị si na "ọdịda".
Nke ahụ bụ. Soro Debian.
Ponte Manjaro na-eji arch ihe Ubuntu mere na mbu mee ka ntinye ya di nfe
Manjaro anaghị adọta m nke ukwuu ma echere m otu ihe ahụ. Nanị obi abụọ m bụ ịga n'ihu nke ọrụ ndị ahụ, nke nwere nsụgharị mbụ nke Ubuntu, tupu ha agaa osisi vaịn, bCanonical kwadoro ya. Ana m atụ anya otu ihe ahụ na Antergos.
Ekwenyere m na Ubuntu (Canonical) agaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ ga-edebe ma Mir, Wailand na xorg n'ọchịchị gọọmentị n'ọdịnihu iji kwado Ubuntu na Unity, KDE, Gnome wdg.
Ọ ga-abụ ihe kachasị mma ka ị nọgide na-abụ otu n'ime ihe ndị kachasị eji arụ ọrụ.
Ugbu a, enwere ike ịnwe nnwere onwe zuru oke site na sistemụ linux ndị ọzọ. Nke ahụ ga-agụnye iwepụ gburugburu ebe ọ bụla na-abụghị Unity site na Ubuntu, na-ekepụta usoro ngwugwu nke ya ma na-abanye na Windows, Red Hat, SUSE na APPLE na ụwa nke usoro ịkwụ ụgwọ .. Iji mara ihe Canonical ga-eme ..
Mfe: Aga m aga akụ na Valve ga-etinyekwu na Debian / Arch / Mint karịa Ubuntu.
Cannonical kwesiri ka ghara inwe obi ekele nye ndi obodo ya ndi n’eme ihe nile ike ha ime ka oru dika Kubuntu, Xubuntu na ezi n’ulo di ndu (M ka ga-eji Debian n’agbanyeghi otutu uzo di nfe na idi mfe i gha eji tinye ihe omimi a na ihe o bula. ).
O di nwute na otu ulo oru kesara Ubuntu ma ha adighi nma banyere obodo, ha nwere mmasi inweta ego.
Ma ha enweghi ike nke ...
Ọ dịghị onye nọ [fanye pro pro Software na-enweghị uru] na-ajụ m ma ọ bụ jụọ m ma distro ha na-arụ ọrụ nke ọma na laptọọpụ m dị ala. Ọ ga - abụrịrị n'ihi na m pere mpe na anaghị m mkpa.
Nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ya. Ọ bụ na ụlọ ọrụ akwadoghị Fedora?
Eji m ubuntu maka na onweghi ihe m choro ma tinye m ya n’amaghi ihe. N’ime ọnwa ole na ole ọ bịara doo m anya na Canonical kwenyere na ya bụ Apple ma na-achọ ịdị udele na unyi karịa nke bu ya ụzọ. Ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ ihe m nwetara mgbe m bụ nwa okorobịa n'ihi oke iwe nke Jobbs, ezi nzọpụ azụ, teknụzụ etiti afọ nke ọbịbịa nke Mac. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, ruo ọtụtụ iri afọ anyị agafeghị MSDOS.
Mgbe m nwere ike, m ga-eme ka ịwụfu Devian dị ọcha ma dị mfe, ma ọ bụ Linux mint ma ọ bụ ọbụna archlinux, achọghị m ịkwado ngwa ahịa ngwanrọ a n'ụzọ ọ bụla.
Iji ghọta ntakịrị ihe banyere isiokwu a, gụọ echiche Malcer tinyere aka na mmepe chakra: http://ext4.wordpress.com/2013/03/08/mark-shuttleworth-no-sabe-lo-que-quiere/#more-5756
Ọfọn, nwute m, mana Xubuntu m na-arụ ọrụ nke ọma maka m ma ugbu a achọghị m ịhapụ ya.
Lezienụ anya na ha. Taa ha biliri n'akụkụ aka nri nke ụlọ ndina na nke a bụ ihe na-eme.
Chọpụta Mark na-agụ nke a post ga-ama jijiji! Kpebie ịgbanwe usoro na ihe niile. HAHAHA. Na nkenke, ihe ndị mmadụ na-agụ ebe a.
Ah, echefuru m, iji mee ihe na-amasị post:
Ubuntu dị njọ. BU-BU-BU. Lee ka o si dị njọ!
Lee anya na dịka ọnụ ọgụgụ, sayensị, nke igwe mmadụ, nke ọdịbendị na nke teknụzụ gosipụtarala na ha kwadoro post a, ha meghere anya m n'eziokwu, yabụ m gbara ihe niile enweghị ihe na laptọọpụ m ọkụ. Amalitere m na Ubuntu mana oputara na HDD abughi "ngwaike mepere emepe" na otu ihe duga nke ozo ... Btw ana m ahapu, oge m na agaghari na cybercafé maka ihe ochi ...: C
o doro anya na gụọ ebe a ihe mgbochi ubuntu na-ekwu na ị maghị ihe na-eme na ị na-akwado SL naanị n'ihi na ọ bụ n'efu na ndị PC gị tozuru oke afọ ma ọ bụrụ na ịgaghị ọsọ ọsọ ịga n'ihu ma ọ bụ centOS, ma ọ bụghị ha na-agba ọsọ na ha, yabụ obere nkwenkwe bụ isi na pragmatism ọ bụ ezie na ọ na-afụ ụfụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kwụọ ụgwọ maka windo ma ọ bụ OSX
ee ..., pc m na intel i5 3570k na nvidia gtx670, na 8 gb nke ebule, sitere na okwute okike, gaa dinara ala ...
Ọfọn mgbe obere taliban mpịakọta
Ọfọn, gụọ isiokwu ndị ahụ, jiri nghọta gị ghọta ihe ha kwuru wee dee, tinye akụkọ ahụ.
Agụọla m ya, na amatala m n'ụzọ zuru oke, ide ụdị ụdị a anaghị ebulite ọkwa nke blog ahụ, na nke ọzọ ọ na-ewetu ya na apịtị, enwere m olileanya na onyinye gị ọzọ ga-arụ ọrụ
Ọ bụrụ n’ikwu eziokwu bụ ọgụ, yabụ site na echi m ga-ebido kwuo na Ubuntu kachasị mma n’eluigwe na ụwa, na ọ dịghị ihe dị mma karịa ịdị n’otu na ịkọgharị iwu na-alọ ụwa Jesu Kristi, yabụ ị ga-enwe ọ happyụ na dịka okpukperechi, ị ga-eto onye nzọpụta gị jupụta n’ọ ofụ.
Ee e, Jizọs Kraịst bụ ihe doro anya na ị bụ, onye nwere eziokwu zuru oke. Kama ikwu banyere echiche, ị na-ekwu maka eziokwu, dịka naanị na oke. Cerrazónico ruo na njedebe kachasị.
Odi nma, agam abu Jisos Kraist, gini ka ichoro ka m gwa gi? XDDDD
Echegbula onwe gị, ndị Mir na-eji TDD ma ihe niile ga-aga nke ọma, na ịdị n'otu ga-abụ nke abụọ nke Minehunt na QML.
Canonical maara nke ọma ihe ọ chọrọ. Windows ọhụrụ, mana iji Linux. Ihe ọ bụla ọzọ ị na-ekwu adịghị mkpa, n'ihi na ị d ị mma. Gịnị bụ azịza ya? Ndị ọrụ Linux jiri sistemụ a maka "nnwere onwe", dị iche na Windows ma ọ bụ Mac. Ubuntu anaghịzi anọchite anya nnwere onwe ahụ? Ọfọn, ọ na-akwụsị iji ya na ọ bụ ya. Onwe m, ọ dịbeghị mgbe m masịrị Ubuntu na m iloghị Canonical, n'ihi na ihe niile a mara ma hụ na-abịa ogologo oge.
Ọ bụ ihe ọmụmụ banyere ihe niile Ubuntu kwesiri ịbụ ezigbo na…. kamakwa ihe niile merụrụ ahụ. Karịsịa njirimara nke Linux na Ubuntu ... maka njọ na uto nke mmegharị nke asitali na-akwado otu distro ma ọ bụ ọzọ.
Onwe m aga m eji Linux; agakwaghị n'ihi na ọ bụ n'efu ma ọ bụ iji zere usoro hacking ma ọ bụ usoro ọgbụgba, nke na-enwewanye nsogbu ... mana n'ihi na echere m na ruo otu ọkwa, ngwanrọ dị mkpa na ndụ anyị na ọ gaghị abụ nke onye. Ọ dị ka ihe bụ isi.
nke a yiri Linux.
Zaghachi na Filomatic
+1 #adịghị atụ
Ikwuru eziokwu, mana opekata mpe enwere ụmụ obere ụmụ nwanyị ebe a karịa ka nke dị na MuyLinux na EsDebian (kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke rere ure na ndị ọkpọ na fanboys n'oge dị mkpirikpi!).
Ka o sina dị, ana m akpọtụrụ ihe ọ bụla na obodo a ma ọ bụ na nnọkọ Bekee nke Debian, Arch na ndị ọzọ (ekele m maara nke Bekee nke ọma).
tinye na trolls
XD. Na iche na DesdeLinux bụ ebe mgbaba m, ebe m nwere ike ịgụ nkwupụta na-atụghị ụjọ ịhụ mkparị na trolls dị iche iche.
Ka ndị mmadụ ghọta ihe dị njọ na Mir, echere m na ọ ga-adị mma ịsụgharị isiokwu site na kwin onye nrụpụta ebe ọ na-akọwa ihe niile n'ụzọ dị mfe.
Aghọtaghị m ọtụtụ ihe iwe, n'ezie ...
Ekwenyere m na Canonical nwere ikike ọ bụla n'ụwa iji duzie azụmahịa ha dịka ha si chọọ. O doro anya. Koodu gi di n’ebe ahu ka onye choro choo ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na mmadụ amalite ịrịa Ubuntu ahụ, ha nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla nke mgbagha na mbara igwe Linux: iji ya eme ihe abụghị iwu.
Ugbu a ọ tụgharịrị na Canonical bụ satan n'ihi na ọ naghị eme ihe "obodo" chọrọ ka ọ mee… anyị ara arala ma ọ bụ gịnị?
O doro m anya na Canonical chọrọ ịmepụta distro zuru oke maka onye ọrụ "na-abụghị teknụzụ", ya bụ, onye ọ bụla. Populari ya, bia. Ọ na-enye m hunch ahụ na ọ ga-enweta ya. Ahụghị m nsogbu na nke ahụ. Kedu ihe ọzọ, ma "obodo" masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị ya, igwe Linux niile ga-erite uru na ya.
Agbanyeghị, m na-ahụ ụfọdụ erughị ala banyere Ubuntu gburugburu ebe a;). Ọ bụ ihe na-arụpụta ka mma.
sụgharịrị, ị agụbeghị isiokwu ma ị ghọtabeghị ndị ọkwọ ụgbọala mechiri emechi, agbanyeghị.
ọ bụ naanị gị gụrụ ya n'ụzọ doro anya
troll na ndi na amaghi ka esi eme ya ofuma.
N'ụzọ ahụ, ị ​​gaghị agagharị! Trokwaga ebe a ga-enwe njakịrị na acidity na njakịrị ha.
Anaghị m eme ihe ọ bụla, enweghị m akaụntụ 2 maka ya, ebe ọ bụ onye ọrụ Ubuntu m na-eche na post gị metụtara m
Echeghị m na ọ ga-abụ eziokwu na ọ ga-abara onye ọ bụla uru na Linux. Nke ahụ ga-erite uru ụwa nke Ubuntu.
Anyị ahụworị na ọtụtụ mmadụ chere na Linux bụ Ubuntu, nke na-abụghị eziokwu, Ubuntu bụ Linux. Enweelarị m enyi na-ekwu, "Ọ nwere ọkpụkpọ n'akụkụ ya, dịka Linux."
Ihe onye ọrụ "na-abụghị teknụzụ", ọ bụghị naanị Ubuntu dị, OpenSUSE na Sabayon bụ ezigbo disros maka ebumnuche ahụ (site n'echiche m)
Dabere na, mana n’etiti ụmụ Marị atọ nke nkwụsi ike (RHEL / CentOS, Debian, Slackware), ọtụtụ ga - ahọrọ Debian n’ihi na Ubuntu na - eji ọtụtụ njikwa ya dị ka ntọala, ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ahụmịhe windo karịa, ana m akwado CentOS / RHEL (gbakwunyere RHEL ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka ndenye aha maka "naanị" ohere ha na ebe nchekwa ha na blobs dị oké ọnụ ahịa).
Ubuntu na-erite uru naanị Ubuntu. Ha ji achịcha ha rie ya.
Hụzie gị dijo
Ebumnuche na-enweghị isi, ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, aghụghọ na ọbụna omume fascist nke Ubuntu bụ ihe ndị mmadụ niile nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ gosipụtara. N’ezie, ewepụrụ muylinux.com fan base.
Kemgbe 2010, a hụla nke a ka ọ na-abịa ... Ana m eji nwute cheta nsụgharị dịka Hardy Heron ma ọ bụ Karmic Koala, ndị m jiri ma gbaa ume, ka ha bụrụ nke a ...
Zaghachi ilere gi anya
Eha! Achọtara m gị ebe a, "Nostradamus." Nke ahụ mere gị ka ị ghara iji ike gị n'oge ahụ….
O doro anya, ị chọtara m, olee onye nzuzu m na-agaghị agbanwe aha m na ịghara ịkọwa ebe ọzọ iji ghara ịchọpụta, nri?
Hahaha… n’ikpeazụ ọ bụ eziokwu, ụwa bụ ịkacha akwa.
n'agbanyeghị, maka ndị chọrọ ịhụ ọganihu nke kwin na wayland
Echere m na ị na-echefu ihe na nkà ihe ọmụma nke ngwanrọ n'efu na-enye gị, ngụkọta nnwere onwe na nke ahụ bụ ebe mmadụ nwere ike ime ma ọ bụ mebie, na ụfọdụ dị ka ya bụ nsogbu, na ndị ọzọ na-anabata ya bụ nsogbu ọzọ na ugbu a na anyị chọrọ ihe ọzọ Ohere 8 shit, ndị ọrụ ga-achọ ụzọ ọzọ dị mfe iji dị ka nke ochie ha na-esote nke ọma, echere m na nke a bụ ihe ọzọ Canonical na-eke, dị ka Mac mana yana ọzọ nke ịbụ "onye nweere onwe" (na ntụgharị uche ya ngụkọta) na nke ahụ gbakwunyere "miun" (amazon na ndị ọzọ), ihe a na-ejikarị ụdị ndị ọrụ ndị ọzọ eme ihe, maka ndị ọzọ anyị nwere ihe anyị maralarị, anyị nwere kpochapụwo nke na-arịọ anyị ma na-akpali anyị ịga n'ihu na-enye ya aka pụrụ iche na GNU / Linux, ọ bụ eziokwu na ọ ga-ahapụ ọtụtụ ihe ọjọọ, mana ihe anyị ma emebeghi ya
Kwuru nke ọma. Mana onye ode akwụkwọ na-ezo aka na “nnwere onwe anọ” nke Free Software Foundation kwusara, nke Cannonical anaghị asọpụrụ nnwere onwe 4 ma ọ bụ nke anọ. nnwere onwe.
Ihe gbasara nnwere onwe zuru oke bụ akụkọ ifo. Enwere ikikere (nke a bụ otu n'ime nnukwu nsogbu Mir).
Echere m na ndị ga-emecha kwụsị ebe a bụ iwu.
Site na echiche anyị (ọtụtụ ndị ọrụ Linux Linux) Canonical bụ nnukwu, mana n'eziokwu ọ pere mpe (na Linux ego adịghị na desktọọpụ).
N'azụ wayland enwere ndị dike teknụzụ na mgbakwunye na ịbụ protocol lekwasịrị anya na nkwụsi ike yana o nwere ikike MIT (site na ihe m gụrụ na ọ ka mma karịa azụmaahịa na dakọtara karịa GPLv3 na Mir's CLA)
Mir bụ "protocol-agnostic" na-elekwasị anya naanị ubuntu ma ruo ugbu a enweghị uru ọrụ aka doro anya karịa wayland.
Achọghị m ka ubuntu mee ihe ọjọọ, amalitere m na Linux na Karmic Koala ruo taa ma m nwere mmasị na distro a, mana echeghị m na Mir bụ ihe amamihe dị na ya. Enwere ike itinye ego ndị ahụ n'ebe ọzọ.
Ka o sina dị, ịkwesighi inwe nchekwube, enwere ọtụtụ mbọ na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala nọrọ onwe ha na ihe nkesa ihe ngosi, nke ga-edozi ọtụtụ nsogbu 😀
Ndo, ọ bụghị gị NayosX XD ka okwu a dakwasịrị gị
Ubuntu abụrụla ihe dịka ọkọlọtọ maka ndị mmepe sọftụwia. A na-emepụta sọftụwia na-egosi na ọ na-agba na ụdị Ubuntu ahụ.
Achọghị m ka m nwee obi ọjọọ, mana mmadụ ole na ole na-eji Linux. Imirikiti ya na-eji Ubuntu. Ọ bụrụ na m ga - azụlite sọftụwia nwere ikike, (enwere m obi abụọ na m ga - eme ya maka linux, mana ọ bụrụ na m mee ya, m ga - eme ya ka ọ na - agba naanị Ubuntu, m ga - eche naanị maka ya) Ha nwere ụlọ ahịa sọftụwia. Ọwa nke a ga-ere ngwaahịa m.
N'ebe a, ịkwa ákwá bụ maka sọftụwia na ndị ọkwọ ụgbọala. Kedu ihe ha na-agbapụ na Windows ma ọ bụ?
Debian gị ma ọ bụ archlinux ga-anọgide na-arụ ọrụ nke ọma na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na ndị ọkwọ ụgbọala anaghị akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ nkeonwe ma gaa Windows.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Ubuntu mee ihe, ma ọ bụ gaa Windows. Enwere m olileanya na Ubuntu na-agbanahụ oke ịnụ ọkụ n'obi ma na-agụnye ọkwọ ụgbọ ala nke ndabara, na ndabara koodu nke ndabara.
Na ArchLinux, ha anaghị ekewapụ onwe ha na sọftụwia nwere nke ha. Na Debian ma ọ bụrụ na ha kewaa ma ọ dị m nzuzu.
Pandev92 naanị agaghị emetụta onye ọrụ m: p
Enweghị m nsogbu banyere ihe ọ bụla gbasara Onye Ọrụ gị. Kedu ihe ọzọ, enwere m anyaụfụ na ị na-eji RHEL (ikwu eziokwu, ọ bụ ezigbo MS Windows na GNU / Linux).
Kedu ihe ederede ma ọ bụ ihe m na-achọghị ịma ma ọ bụrụ na ha kwuo na ha anaghị akwado ala nna, ikekwe ndị Ubuntu bụ naanị ndị ahụ, n'ezie enwere ndị mmepe ka mma, ha na-eme ya maka ojiji ha. Ọ dị ka nke a mgbe niile, ha dabere na Debian ma jiri ihe kacha mma Debian nwere. Ọ dị otu a oge niile, enweghị nsogbu, ọ bụghị oge izizi ya nwere ike ọ bụghị oge ikpeazu, hahaha, yabụ na ị gaghị ebugharị n'oké mmiri n'ime mmiri. Ihe kachasị mma bụ ịnwe nhọrọ na ịnwe ike ịhọrọ, mkpebi ị mere maka ịdị mma, ụkpụrụ ma ọ bụ ihe masịrị gị nwere opekata mpe ịhọrọ!
Ọ na-ewute onye ọ bụla na-ewute Ubuntu bụ naanị distro nwere ike ịsọ mpi na Windows 7 maka iji desktọọpụ (Lelee ihe nkiri, Gwuo, Gee ntị na egwu, sọọfụ ịntanetị, dee na okwu?). N’ime ndị ọzọ niile, ị ga-ebido idozi ihe ndị ị na-ekwesịghị ịrụzi. (Ewezuga nkwekọrịta Ubuntu ...)
Otú ọ dị. Windows ka elu haha. Chei ya.
Mmmmm ... Ekwetaghị m, echeghị m Windows 7, mana ọnyà kachasị ọhụrụ nwere ike ịbụ.
Pandev92, obodo anyị bụ mkpịsị aka nke dynamite na ị na-agbanye ọkụ ọkụ. Ọganihu! Emechabeghị m ịgụ ihe a kwuru, mana ọ dị ka ọ ga-abụ nnukwu ụda blast. Achọrọ m ka ọdịmma gị 😉
Ubuntu. Ọ na-echetara m windo 8.
M onwe m kwa
N'ikwu eziokwu, ahụrụ m Ubuntu ka ọ na-abịa na "ebumnuche" ya iji mechie ihe niile na mgbe m na-ekwu maka ihe niile ọ bụghị naanị na echiche nke imeri Windows na Mac kamakwa sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọ dị ịtụnanya etu esi mee usoro canonical a, mana ọ dịkarịrị njọ Enwere nkesa dị ka Debian, nke na-agaghị ahapụ echiche ha na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka Trisquel nke ga-aga n'ihu na-akpasu Ubuntu nnupụisi nke na ọ dị ọcha naanị sọftụwia na-enweghị ego, echiche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ nke Microsoft na Apple kama Ugbu a ọ bụ Microsoft na nke Apple na nke Canonical, n'ihi na ọbụnadị okpu Red Hat abanyela na enweghị ntụkwasị obi, ma gbaghara m maka ịza gị site na Windows Vista, mana m nọ n'ụlọ enyi nke dị isi ike na achọghị ị gbanwee GNU / Linux hehehehe. Cheers!
Ana m agbaghara gị maka ihe Windows Vista, ebe ọ bụ na ọ bụ fiasco kachasị amasị m (M ga-eji ya na Core i7 na vidiyo NVIDIA 1.5GB, 7GB RAM na ị maara ihe niile ahụ). Agbanyeghị, Trisquel abụghị naanị GNU / Linux distro na-FSF gbaara, ma ndị ọzọ ndụdụ dị ka Parabola, nke bụ a ndụdụ nke njiko na 100% free software.
Banyere Debian, ọ ka ga-abụ ihe kacha mma GNU / Linux nke dị ebe ahụ, ebe ọ bụ 2nd. distro nke m mere ka m mata onwe m na mbara igwe GNU / Linux ma ugbu a, m na-ekwu site na PC m na Debian Oldtable (piakota) na ọ chọrọ ngwa ngwa nnukwu F5 nke chọrọ ịwụnye Wheezy na XFCE (Gbaghara m ma ọ bụrụ na onye ọrụ m anaghị agwa m ma ọ bụrụ na m jiri Debian n'ezie, mana m na-aza ajụjụ site na Google Chrome 26).
Ka anyị hụ, ka anyị hụ ma m ghọtara post ahụ, m na-aza ajụjụ enyerelarị
«Companlọ ọrụ ọtụtụ oge mgbe ha mepụtara maka Linux, ha na-ewepụta ngwugwu .deb naanị, ọ bụrụ na Canonical na-aga n'ihu na atụmatụ ha na ụlọ ọrụ X kpebiri ịmalite maka linux ... ma eleghị anya ọ bụ naanị ya maka Ubuntu, dịka ọmụmaatụ Steam dị naanị maka Ubuntu na nchịkọta. .deb (m na-ekwu na eze) »
Yabụ ọ bụrụ na m ghọtara n'ụzọ ziri ezi:
* Dika ihe nkesa eserese nke ubuntu di na mmepe, ya na ngwa mbadamba, ihe onyonyo na ihe obula ime m gha eji ihe nkesa ihe ngosi.
* Ka ha na-akwụ ụgwọ ngwaahịa, ha ga-adọrọ mmasị ndị nrụpụta ọkwọ ụgbọ ala, ihe ndị a, dị ka uzuoku, ga-etolite naanị maka Ubuntu.
* Mgbe anyị na-emepe emepe maka Ubuntu, ndị ọzọ fọdụrụnụ ga-ahapụ imi imi, naanị na anyị ga-enweta ngwa intel.
Dezie m ma ọ bụrụ na aghọtaghị m, mana ọ bụrụ na nyocha m ziri ezi, ọ gaghị aba uru ịgbanwe nkesa ahụ.
Ugbu a, na nkwa nke ubuntu ka ọ bụrụ onye nweere onwe ya ma nwee ike ịnweta ya, ọ gaghị ekwe omume ka ubuntu mee ka redhat, nkesa a na-akwụ ụgwọ (ihe ọhụrụ ị na-eke) na nke nweere onwe ya (nke bụ ubuntu na-enweghị mgbanwe na sava gị wdg)?
Maka ugbu a, ihe niile bụ nkwenye, ebe ọ bụ na emebeghị ya.
Ọ bụrụ na nsụgharị nke Ubuntu LTS nsụgharị zuru oke na nsụgharị Debian Stable. Aghọtaghị m ihe kpatara okwu a sitere na nnukwu fanboy.
[sarcasm] N'ọnọdụ ọ bụla @ pandev92, ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ngwanrọ ngwanrọ, ana m akwado ka ị jiri ngwaike Intel ma wụnye Ark fork nke a na-akpọ Parabola, nke Free Software Foundation kwadoro site na Project GNU [/ njakịrị].
ebe ọ bụ na kernel 3.8 enweghị m ike ịbido ihe ọ bụla distro: / na intel hd4000 eserese, kọọ njehie ahụ, mana ọ dị ka kernel 3.9.2 adịghị edozi, naanị m ga-enweta ihuenyo ojii ...
Nke a na-egosi na Red Hat nwere otu ihe dị mkpa mere eji amanye ya ịdebe kernel mbipute 2.6.x
M ga-akọwara gị, ọ bụrụ na ndị mmepe nke ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị ike ma ọ bụ na ha achọghị ịmepụta onye ọkwọ ụgbọ ala na-abụghị nke sava ahụ, ọ nwere ike bụrụ na ọkwọ ụgbọ ala a na-agba naanị na mir, nke na-arụ ọrụ na Ubuntu. Ya mere, ọ gaghịzi abụ onye ọkwọ ụgbọ ala maka Linux, mana ọ ga-abụ ọkwọ ụgbọ ala maka ubuntu, ebe ọ bụ na ndị ọkwọ ụgbọala maka gam akporo anaghị adịkarị dakọtara na Linux (nke ahụ na-agbanwe).
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ihe m kwuru mere, ọ ga-adị ka nke ime windo ọkwọ ụgbọ ala na-arụ ọrụ na Linux…, ọ gaghị arụ ọrụ.
Maka m, ndị canonical ahụ gara n'isi tiketi $ $ $ $ $ $ $
Ọ bụrụ na a "bulitere ha" (ọ bụ ụlọ ọrụ, emechaa), achọghị m iche n'echiche tiketi nke Red Hat bulitere!
Na nkenke, esemokwu gị enweghị uru ma ọ bụ eziokwu na nsogbu a ọkụ jikọtara ya na onye edemede nke post a: ha na-alụ ọgụ maka nzuzu.
ị dị mma, ị bụ onye ọrụ ubuntu, na-arịọ gị maka nnọpụiche na iche echiche maka ndị ọzọ dịka ịjụ onye na-ekwu okwu na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
Ma ọ dịkarịa ala ndị Red Hat na-eme ihe na nghọta na anaghị ezipụ data ndekọ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ha na-eme, Red Hat dị oke njọ ụlọ ọrụ iji mesoo ihe ndị ahụ.
Ihe kwesịrị ịdaba na nke ha (m na-ekwu nkwado site na Nvidia na ndị ọzọ), echere m na enwere nhụsianya na ụjọ na ndị na-abanye na Wayland bandwagon, Ubuntu emebighị Wayland, ma eleghị anya o kwuru ihe ọ kwesịrị Ekwurula banyere ihe Wayland nwere ike ime ma ọ bụ enweghị ike ịme, echere m na nke ahụ bụ naanị ihe na-adịghị mma na Canonical kwesịrị ịkpachara anya banyere nke ahụ. Ugbu a, echeghị m na Canonical bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n'ihi na ọ chọrọ ime ihe n'ụzọ ọ ghọtara, usoro ọdịmma onwe nanị ma ọ bụrụ na emesịa ọ nweghị ịkekọrịta ngwaahịa ya na obodo.
Ọ bụrụ na ikenyeghị ha, gịnị bụ ikpe ahụ, n'agbanyeghị na ịkekọrịta ha, enweghị ikpe n'ihi na ha bụ ngwaahịa ngwaahịa (Ubuntu-> Mir-> Unity)
Echere m na Mark na-ama gwụrụ na nkà ihe ọmụma nke nyere ndụ a distro >> http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosof%C3%ADa)
Na-ekwu na Ubuntu na-agbasawanye Linux bụ ụdị ihe ọchị mgbe ụwa Linux niile bụ mega-fragmenting, puff
Free software, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ka mfe Linux, ka mgbe niile, ka ihu ya, "oké akwụna." Canonical emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịtọlite ​​lupanar ya. Ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụ dị njọ, oge ga-ekpe ya ikpe, mana akwụna ahụ bụ nke ya ọ na-emejọ ha mgbe ọ bụla ọ chọrọ.
Onye ọ bụla maara na ịwakpo Ubuntu bụ isi, distro na-enweghị nke ọtụtụ ndị taa ga-emepe ma mechie windo.
Zaghachi na DevilTroll
Nke a bụ azịza doro anya ma rụọ ụka nke ọma, kwenyere na gị + 1
Na-asọpụrụ aha aha gị
Ikekwe ị nwere obi abụọ? ma troll x troll = troll ^ 2
Ọ bụrụ na ndị na-eme ihe ike na Fedora ma ọ bụ Suse na-emeghe na-eme ka ha zoo BetaTesters site na sistemụ azụmahịa ha, nke ahụ magburu onwe ya na ọ dịghị onye na-ekwu ihe ọ bụla.
Mana ọ bụrụ na Ubuntu kpebiri ịga n'ihu n'ụzọ ya ọ dị ka ọrịa na-efe efe dara n'ụwa.
Na nkenke "Ndị kpọrọ gị asị ịkpọasị".
Ọ dị mma na distro na-eme ka ụwa nke NKE SOFTWARE maa jijiji nke ukwuu.
Ruo ọtụtụ afọ, dị ka ọtụtụ kwenyere, agbalịrị m nkesa na-enweghị atụ ma na-akwụwa aka ọtọ, alaghachiri m Ubuntu mgbe niile.
Onwe m rịa ọrịa Arch na nbudata ya na-adịghị agwụ agwụ, enweghị mmasị nke obodo Debian na passivity ya na ndị ọrụ, mgbanwe Chakra na-agbanwe na mberede, oke (enweghị uru) nke ngwanrọ Sabayon, ịdị nwayọ nke Linux Mint na na, ihe na-agwụkarị onye ọrụ.
N'ikwu okwu na afọ ole na ole gara aga na otu enyi, anyị kwuru na ịwụnye Ubuntu na iji ya na-ewe ihe dị ka awa abụọ, ọ bụrụ na ị wụnye na kọmputa ọhụrụ, ọ ga-amata gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile, nnukwu pasent nke ngwaike. Ihe ndị ọzọ na-ahapụ gị ọkara, ị ga-alụ ọgụ iji hazi ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ bọtịnụ nke igodo Fn (onye na-emeghị ya?)
Ihe kachasị mma na nke a niile, ihe kacha baa uru m na-ahụ bụ na n’ime ụwa SL anyị nwere ohere dị iche iche na-enweghị ngwụcha iji ihe na-enye anyị onyinye.
Taa, m na-eji Ubuntu, akwụkwọ ndekọ m ọhụụ na-enwe ekele maka ya kemgbe ihe niile m nwara ọ bụ nke ahụ siri ike ghọtara nke ọma. Echi ma eleghị anya, m ga-etinye distro ọzọ ma nwee obi ụtọ, yana onye ọrụ njedebe anaghị atụ ma ọ bụ Wayland, Mir, ma ọ bụ agadi nwoke Xorg. Ọ bụrụhaala na ọ na-arụ ọrụ, nnabata!
The ire oku na spiel nke ma o ziri ezi ma obu na-ezighi ezi… Echere m na ọ bụ igbu oge, ndi nwe mmadu. Ọ bụ echiche m dị umeala n'obi-
N'uche m, onye nwere ike ịkwado mmepe nke ndị ọkwọ ụgbọ ala abụghị Canonical ma ọ bụ RH. Maka m ọ bụ nke ọma Valve. Na ngwụsị nke ụbọchị, a na-eji eserese eserese egwu egwu ọtụtụ.
Echere m na m gụrụ n'oge na-adịbeghị anya na ọbụna Blizzard ga-ahapụ onye ahịa WoW maka Linux. Ana m agwa gị na ọ bụrụ na Valve na Blizzard zụlitere maka Linux nvidia ga-eme ya, ma eleghị anya kwa kwa ...
Nke a bụ ihe mkpofu…
1 - Maka ịrara mmadụ nye, a ga-enwerịrị iyi nke iguzosi ike n'ihe.
2 - Na mmadụ abụọ na-arụ ọrụ na mmepe dị iche iche na-ekpuchi otu mkpa abụghị nsogbu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara nkatọ, ole ka ị kwesịrị ịkatọ?
3 - Nnukwu nsogbu nke canonical abụghị ịkpọtụrụ, mana ọ bụ mkpebi ha, Ọ D NEGH they mgbe ha kwere nkwa ihe ọ bụla, nye onye ee? The wayland ihe abụghị nkwa, Agaghị m eji kpọrọ ihe na ụlọ ọrụ na-ekwu "Anyị na-ekwe nkwa iwebata mmepe dị otú ahụ" ma ọ bụrụ na ọ gaghị egbo mkpa gị?
Maka ndị ọzọ, ọ ga-amasị m ka CANONICAL rụkọta ọrụ na wayland, mana agbanyeghị.
PS: companylọ ọrụ enweghị MORALS ma ọ bụ ụkpụrụ, ndị mmadụ na-eme ...
Enwere ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na akwụkwọ nkwado na ndị na-akwado sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọtụtụ, na - ekwu Canonical this, Canonical that, gbara ha gburugburu ...
Daalụ maka ime ka m gụọ, ọmarịcha ọkwa.
Zaghachi na HQ
Foto ndị dị na dijo
Ebube ihe okwu ndi a mebiri. Taa, ọ gaghị ekwe omume ikwu maka ụfọdụ ihe, ọ bụ oke ịnụ ọkụ n'obi, n'agbanyeghị ihe a na-ekwu, ọ bụrụ na ọ gaghị susuo ịnyịnya ibu nke "Chineke" kwekọrọ, a kwadobela nnọkọ ahụ
Agbanyeghị na akọwara ya, kwuo ya na agbanyeghị ọkwupụta ya nke ọma, nsonazụ ya na-abụkarị otu.
Echere m na nke a bụ isiokwu ebe akọwapụtara ọnọdụ ahụ n'ụzọ doro anya, ihe anaghị eme nke ọma, ọ bụ ihe dị na ihe anyị ga-eme, ma ndị na-ahụ ihe site n'akụkụ ọzọ na ụjọ na-atụ n'akụkụ nke ọzọ , dị ka ndị “anya na-agba” na-ele n’ime ụlọ na ndị ọ ga-akacha ata ahụhụ ma ọ bụrụ na ihe agazie dị ka ọ ga-akwụsị.
Ọ dịka m na-ekwukarị, ọ na-esiri m ike ịchọta ebumnuche ebumnuche na ụwa Linux n'oge na-adịbeghị anya.
Oburu na ha dabere na otutu ihe nke Suttleworth na “ihe ohuru”, mgbe ahu echere m na ihe adabaghi. Kedu ihe software ngwanrọ na-eme? Kemgbe ụwa, gịnị ejirila obodo mepere emepe wee weghachi ihe ọ bụla? N'ezie, Ubuntu bụ "Linux maka Subhuman" na-achọghị ikpokọta ihe ọ bụla ma ọ bụ jiri njikwa ahụ; ghara inye onyinye ma ọ bụ nye ha ọkọlọtọ ihe ngosi sava (na onye chọrọ ka ha hazie software? maka gịnị? maka Apple ọhụrụ? hahaha). Kedu ihe Ubuntu bụ Windows ọhụrụ? Ogologo oge (ha chọrọ ịbụ Mac OS ọhụrụ, mana Unity dị oke egwu na nne ochie Suttleworth anaghị eji ya, onye wụnye Gnome Classic ozugbo ọ nwere ike ọ bụ naanị n soomi yiri Redmond) Ma ọ bụrụ na anyị Anyị na-ebe ákwá dị ka muffins oge ọ bụla Linux gamers na-enweghị ike iji egwuregwu ochie ha na-agba ọsọ egwuregwu ha hụrụ n'anya site na afọ iri gara aga n'ihi na arụnyere nkewa ha na Windows 7 piratota ka ha wee na-egwu egwu ha, emela ya. Nke a Pandev92 mgbe ọ dị njọ, ọ bụ ọtụtụ ihe ọchị.
xDDDDDDDDDDDDDDDDD * ROFL »XD
O nwere ike ichefu na ọ bụ obodo mere ya nnukwu, na-enweghị nkwado nke ndị obodo ọ gaghị agabiga oke.
Inwe ụmụaka anaghị alụ ọgụ! ihe a abụghị ezigbo UBUNTU! HEH. kpọrọ, echefula a onwe ụlọ ọrụ bụ onye ụlọ ọrụ! Ahụbeghị m onye mbụ họọrọ inye karịa ịnata ego canonical na ihe masịrị ya na mmeri nke suse, okpu na-acha uhie uhie na ọbụlagodi microsoft karịa ihe nwere ike ime obodo. Ugbua o doro anya na ihe a niile na-eme ka ọ dị mma na ọ gaghị abụ ihe ijuanya na otu ụbọchị ubuntu bụ windo ọzọ ma ọ bụ osx ọzọ. Ya mere, wetuo obi.
Ha achoghi iji uzoland ma obu xorg ma obu ihe ozo n’obodo, n’ihi na nke ahu bu PEO ha, ha gha ahuru ihe ha n’eme, ha gha ahuta otu ha si edozi ya ma ya buru na ha achoghi ka ha ghara ime ya! ihe dika Mazi Liuns kwuru nwa oge gara aga M mara….!
obodo ga-adi ndu, ogaghi abu ogwugwu gnu / linux, asim na m ji Kubuntu na ihe ndi ozo nke debian.
Ọ bụrụ na m chọpụta na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya bụ ụzọ e si emeso obodo, dị ka ihe okwu ikpeazụ kwuru, ihe dịka (nke ọma, m ghọtara ya), gaa na shit ... achọghịzi m ha ma achọghị m ị, M na-ama na-eji ihe niile ị chọrọ ... ihe a agba
Ihe kwesiri ime bu na, obodo jiri nwayọ ju azu ha nye Canon dika ha si eme ugbua
Canonical nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ, ihe ọ bụla ọ ghọtara, ihe ọ bụla si na mkpụrụ obi Mark Shuttleworth pụta. Ọ dịịrị anyị ndị ọrụ ikpebi ma atụmatụ na ebumnuche ha ọ ga-aga nke ọma.
Ubuntu abughi GNU / Linux, GNU / Linux Ubuntu abughi. Cheta na Ubuntu na-enweghi Debian abughi ihe obula, ya na nkesa a na-enweta site na ya, mana enwere nsogbu di ezigbo: Ubuntu ka bu ntughari aka maka "onye obula na amaghi" ihe GNU / Linux bu, mgbe I na ekwu Linux, I na-asi Ubuntu, ma oburu ime ka ihe di njo, ndi na emeputa ekwere otu, anyi agbari.
Ọ bụrụ na Intel, AMD, NVidia, na-etinye onwe ha inye nkwado na ịdị mkpa nye Mir, ọrụ nke Xorg ma ọ bụ Wayland ga-abụ ihe na-agwụ ike karị. Ọ bụ ezie na ọ dị mma, m ghọtara na Mir na-enweghị Wayland abụghị ihe ọ bụla. Agbanyeghị.
Ọ dị m ka ya bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ Ubuntu ga-akwụsị iji distro a, n'ihi na nke ahụ ga-abụ naanị ụzọ Canonical ga-etinye isi ya n'ọnọdụ ya wee kwụsị iberibe nke ukwuu. Ọ dị mma, ha chọrọ ịkpata ego, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ, mana abịala ma kpachara ndụ anyị.
Intel n’azụ wayland ma AMD ma ọ bụ nvidia agaghị akwado onye ọ bụla n’ime ha n’oge na-adịghị anya, o yikarịrị ka ị ga-eji ndị ọkwọ ụgbọala nwere onwe ha ogologo oge, agbanyeghị na echere m na ịme ndị ọkwọ ụgbọ ala maka Mir ma ọ bụ wayland kwesịrị dị mfe karịa maka X.org.
Agaghị m agwa gị maka na abụghị m onye nrụpụta. Echere na nke a abụghị nsogbu, n'ihi na ọ bụrụ na ịnweghị iji Intel, chefuo kaadị AMD ma ọ bụ NVidia.
O doro anya na enwekwara mgbalị n'akụkụ n'akụkụ iji zụlite ndị ọkwọ ụgbọala sava onwe ha. Nke ahụ ga - abụ nnukwu ọganiihu.
ebe m huru na i jiri Debian achorom ima ma Intel HD4000 aru oru nke oma na distro a
Agaghị m agwa gị. Chipset m echeghị m nke ahụ dị elu.
Na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, mana m na-adụ gị ọdụ mgbe niile iji nyocha, maka intel hd4000, ebe ọ bụ na ha na-emeziwanye na kernel ọhụrụ ọ bụla ...
Daalụ, bụ na n'oge na-adịghị anya, m ga-enwe otu na m ga-achọ inwe ike ịga n'ihu na debian
Onye na-akwado Mark dijo
uhhh! na mmụọ nke mkparịta ụka a dum na-achịkọta na otu ahịrịokwu nke nnukwu Elav "Achọrọ m ka ọtụtụ ndị ọrụ Ubuntu kwusi iji distro a, n'ihi na nke ahụ ga-abụ naanị ụzọ Canonical ga-etinye isi ya n'ọnọdụ ya wee kwụsị iberibe nke ukwuu"
anyaụfụ…? ekwo ihe ubuntu? akụkọ ọjọọ maka onye ọ bụla chọrọ ubuntu ịda, ọtụtụ ndị ọrụ ga-abata na ubuntu, maka ebumnuche dị mfe, mmechuihu mgbe niile nke windo na-ebute n'etiti ndị ọrụ ya na ubuntu bụ nkesa kachasị mma yana naanị onye na-achịkwa iji merie. obi nke ndị si na ọchịchịrị ụwa nke Microsoft kwaga. Ubuntu huru n'anya 😉 ọ na-afụ ụfụ onye ọ bụla
Zaghachi onye na-akwado Mark
Anyaụfụ na ekworo nke Ubuntu? Hahahahaha ... Ekwela ka m chịa ochi.Gini ka m ji kworo Ubuntu ekworo? Dị n'otu? Mir? Ubuntu Ekwentị OS? Maka na enweghị nke a. Nke mbu, ana m eji Debian, nke enweghi ihe obula nwere anyaụfụ Ubuntu, ewezuga PPA, nke ha na-enweghi n'ihi na ha achoghi ma o megidere nkwụsi ike na nchekwa. Anaghị m eji GNOME eme ihe, ya mere, ịdị n'Otu adịghị m mkpa, maka nagbanyeghi na m nwere mmasị na ha “anyị piomiri Mac” nkà ihe ọmụma, ọ bụ n'ezie nwayọ nwayọ nke ukwuu. Mir? Na Xorg m hapụrụ.
Ekwughị m na ị na-ekwu maka Ubuntu anyaụfụ, mana n'ihi na naanị otu ụzọ Mark ga-esi achọpụta ma ọ bụrụ na ọ mejọrọ ma ọ bụ na ọ nọ n'ụzọ ziri ezi dabere na otu ndị ọrụ ya si eme, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ Fans n'ụwa a, na ọbụlagodi Ubuntu nkesa kachasị njọ nke emere, ha agaghị amata ya ma nọgide na-eji ya n'ihi na ha chere na ha pụrụ iche.
Ọ bụ uche m tupu nri ehihie.
dika i nweghi ihe obula ikwo ubuntu. Elav, ha nwere ọtụtụ narị ọrụ ndị ka mma karịa blọọgụ gị ma ha nyere onyinye karịa Linux karịa gị, ebe ị nweghị ihe ị ga-enwe anyaụfụ na opekata mpe gị.
Ha ga enwe otutu oru kariri blog m, mana “My blog” adighi eji OpenSource eme ihe maka uru ya na o gha eweghachi “ihe” na Obodo ya, nke n’ikpeazụ, nke bu ebum n’uche anyi.
Ndo itinye m na, ma ọ bụrụ na ị na-eche Canonical nwere oru ngo ka mma karịa nke a blog, gịnị kpatara ị nọ ebe a ma ghara iji "oru" ndị ahụ? Eziokwu a na-eche m na ọ bụ okwu mkparị. Ọ dị mma na anyị na-ekerịta echiche, ọ bụrụhaala na ọ na-asọpụrụ (nke ọma ... post ahụ anaghị asọpụrụ Canonical / Ubuntu ma ọ bụ ndị ọrụ ya, mana opekata mpe anyị kwesịrị isetịpụ ihe atụ).
Amaghị m otú ị pụrụ isi jiri blog na distro…., Ọ bụ ọchịchọ troll.
Mm, troll na anya.
ihe niile debianita na envy ubuntu elav ... ewu ewu ya ...! Amaghị m ma ọ bụrụ na ị hụrụ akara ajuju, ọ bụghị nkwupụta, mana dịka ha na-ekwu, ọ bụrụ na ị nweta ọkọ!
Enweghị m ọkọ .. Ndị ọrụ Ubuntu ga-enweta ọkọ mgbe ha matara na ha nọ n'okpuru ụlọ ọrụ na-achọ kwa ụbọchị ịdị ka Apple na Microsoft .. Ma mgbe ha ghọtara ya ma chọọ ịgbapụ, mgbe ahụ ọ ga-abụ mgbe m, si Debian m, a ga m ahuru unu niile na-atu onwe gi aka. Muajajajaa
Gịnị ka ị ga-ekworo? Dịka ọmụmaatụ, KDE 4.10, dịka ọmụmaatụ, nke ị nwara ịwụnye na debian gị site na ppa. Anwu ejide onye ugha ngwa ngwa karie onye ngwurọ.
Adịghị m wụnye KDE 4.10 site na PPA, agbanyeghị, dịka m kwuru n'elu, PPA bụ ihe anyaụfụ, nke Debian enweghị n'ihi na ọ chọghị, mana enwere m ike ịme na-enweghị ha zuru oke .. 😛
Didn't wụnyeghị ya na otu ppa, mana tupu i mee hodgepodge iji wụnye ya, ị gbalịrị
Ghota ihe, na njedebe ị na-trolling na m na-eso eruba, ma ọ dịghị mkpa, m na-agwa gị na agbanyeghị: PPAs esiteghị Ubuntu, ha na-elekọta ha site Community ọrụ .. ya mere .. Enweghị m nsogbu na na.
Ànyị na-enwere anyaụfụ ọtụtụ nde nke Uncle Mark nwere? hehehe, elav ka ubuntu onweghi ihe inwere anyaụfụ, a na m ekekọrịta uche gị
Echere m na Ubuntu bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị chọrọ ịhapụ Windows wee gaa ụwa Linux. Ma ozugbo enwere ahụmahụ ụfọdụ, ọ naghị adọrọ adọrọ n'ihi na enwere ọtụtụ distros. Ubuntu bu uzo nke i si abanye uwa nke ibido choputa ya. Ihe a emeela ọtụtụ mmadụ (ma mụ onwe m).
(M dokwuo anya na m na-ede site na akwụkwọ ndetu ya na Mint 13 "Maya", n'agbanyeghị eziokwu ahụ na akara ngosi na-egosi na okwu ahụ bụ Ubuntu. Isi OS m bụ LMDE, na PC).
"... ma ọ bụrụ na iji mee ka ihe ka njọ, ndị na-emepụta ihe kwenyere otu ihe ahụ, anyị agbaghawo ...". O siri ike, Elav, ndị nọ n'ahịa ahụ maara nke ọma na Linux na-agafere n'akụkụ nke ọzọ, site na ntọala ndị ka mkpa. Okwu a metụtara azụmahịa. Ọ bụrụ na ha hụ na Ubuntu na-agbasawanye, ha ga-ahụ “ụkwụ” ma n’ezie ha ga-agbanye, mana ọ bụghị n’ihi na ha kwenyere na Ubuntu bụ GNU / Linux.
Nke a dokwara m anya, mana ebe a enwere ọtụtụ paranoia. Ha na-enye Canonical ike karịa ka o nwere ... ọ dị ka ahịa arụ ọrụ karịa ndị ọrụ na-abụghị Ubuntu karịa na "ubuntosos" n'onwe ha.
Ọ dị ka mgbe ụfọdụ ha na-echefu na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji kọmputa abụghị ndị na-eme ihe mmemme ma ọ bụ na ha nwere mmasị na otu sistemụ arụmọrụ si arụ ọrụ, ha na-eji ihe kachasị mma enwere ike ịnweta yana ọ bụ ezie na Windows abụghị nke kachasị mma, ọ kachasị enwere ike ịnweta ya n'ihi na etinyego ya na ndabara na ọ bụkwa nke ọtụtụ ka mara, ma ọ bụ ị ga-etinye sistemụ arụmọrụ nke ị na-amaghị ịdị adị ya? Ma nke ahụ bụ ebe Ubuntu na-atụnye ọka ya n'ihi na, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere ike ịkwa ụta maka ya, Ubuntu bụ nkesa kachasị ewu ewu na ụdị nke 13.04 bụ n'ezie otu n'ime nkwụsi ike, opekata mpe na kọmputa m ma dokwuo m anya na m nwalere Debian 7. N'aka nke ọzọ, agụọla m okwu na-ekwu na Ubutnu anaghị ege ndị obodo ntị, echekwara m kesaa nke ndị a ma ama, ọ na-eme ya? Ikekwe Chakra mere ntuli aka ịjụ ndị obodo mgbe ọ kpebiri ịkwụsị ịkwado akụrụngwa 32-bit ma ọ bụ mgbe ha gbanwere usoro Bundles maka nchekwa "mgbakwunye" ma ọ bụ ikekwe Debian gakwuuru ndị obodo mgbe ọ gbanyere Gnome-shea dị ka isi obodo nke mbipute ya dị ugbu a n'agbanyeghị ọtụtụ nkatọ. Na nkenke, ọ dịghị onye kpuru ìsì ka njọ karịa onye na-achọghị ịhụ ụzọ.
Amaghị m ụwa ị bi na ya, mana ebe ọ bụ na enwere ịdị n'otu karịa otu onye si na windo xp gaa ubuntu, gwara m ka m wụnye distro na kde ..., ịdị n'otu dara mbọ i toomi osx, ma ka ihere ma dịkwa arọ.
Chakra kwụsịrị iji ụyọkọ mee ihe n'ihi na onye ọ bụla na-eme mkpesa banyere ha, na debian ị nwere ike ibudata iso na gburugburu ebe ị chọrọ, ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere m nsogbu.
Echere m na ị maara na ụwa buru oke ibu nakwa na ndị enyi gị enweghị mmasị na ya apụtaghị na ọtụtụ n'ime ha enweghị mmasị na ya, dịka ọmụmaatụ, o zuru ezu ịsị na ndị enyi m atọ ndị m tinyegoro. Ubuntu ma oburu na ichoro ya mana obughi ya mere m ji kwuo na idi n’otu bu ebe kachasi nma, ma obu ihe di otua, ya bu na ekwutagh m idi n’otu na nkowa m mana, obu ezie na edeputara ntughari nke ohuru na intaneti. Banyere Debian, esemokwu gị anaghị adị irè n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ahụ ka m na-aghọtaghị ihe mere ị ji eme mkpesa banyere Ubuntu na ịdị n'otu ya mgbe enwere Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, wdg.
otu, m na-eme mkpesa na ịdị n'otu bụ a unyi na a oyiri nke osx na nnọọ arọ (compiz n'ime), abụọ n'ezie i nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ, ọ ga na-efu efu, ọ bụ ezie na ọma, eleghị anya kemgbe 14.04, i nwere ike na-eji ịdị n'otu, nyere Na ndị nwere ọgụgụ isi nke ndị so na ha na-aga site na afọ na-efu ego kwa afọ, ọ dị ha ka ha na-arụ ọrụ na sava eserese ọzọ, na mgbe ha hụrụ ọrụ ha ji ịdị n'otu rụọ, ọ dịkarịa ala afọ abụọ ga-abụ ọgba aghara.
Ma hey, o nweghi ihe kpuru ìsì karịa onye na-achọghị ịhụ ụzọ
A na-ekwu okwu na pandev92
1.- Mgbe m kwuru Debian na nhọrọ nke gnome-sheel dị ka ebe bụ isi, ọ bụ iji gosipụta na eziokwu ndị ọzọ na-ege ndị obodo ntị bụ akụkọ dị ọcha na o doro anya na ị gbaghaala arụmụka iji gbaghaa nke a.
2.- Banyere ịdị n'otu ị chere na ọ bụ ọgbaghara na otu OSX, enweghị ọtụtụ ihe ị ga-ekwu ebe ọ bụ ihe dịịrị onwe, ọ masịrị m n'onwe ya n'agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ihe iji melite.
3.- Banyere ihe osise ihe osise na banyere enweghi ike iji gburugburu desktọọpụ na Ubuntu enwere m obi abụọ banyere ya, ọ bụ ezie na abụghị m onye mmemme ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, mana ọ bụrụ na mmadụ nwere ike iru ọnwa m ekwenyeghị na nke a nnukwu nnukwu nsogbu teknụzụ. Ọzọkwa, na ịkọ nkọ banyere ihe nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị eme, na-enweghị inye arụmụka siri ike, enweghị uche n'ihi na, dị ka gị, enwere m ike ịsị na mir ga-abụ ihe nkesa kachasị mma kachasị dị adị na KDE dịkwa ga-aza maka njehie ya. na ga-akwado mir, mana ọ bụ naanị ịkọ nkọ na ọ nweghị ihe na-enye aka yana n'ụzọ ọzọ, ọ na -emepụta esemokwu na obodo Linux.
Ikekwe Debian gakwuuru ndị obodo mgbe ọ na-etinye Gnome-sheel dị ka ebe bụ isi nke ụdị mbipụta ya ugbu a n'agbanyeghị ọtụtụ nkatọ. Na nkenke, ọ dịghị onye kpuru ìsì ka njọ karịa onye na-achọghị ịhụ ụzọ.
Biko ị nwere ike ịgwa m ebe nkatọ niile dị? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Debian chere na iji Xfce eme ihe na ndabara, ma gwa ya Community. Ọ bụrụ n'ikpeazụ, ha kpebiri ịlaghachi na GNOME (nke bụ mgbe ọ bụla bụ Default Environment) ha araraghị onye ọ bụla anya, Ọzọkwa, Debian wepụtara ọzọ CD CD / DVD ndị ọzọ dị ka KDE, XFCE na LXDE.
Yabụ gị, anti-ubuntu, ọ bụrụ na ị nwere ike iji arụmụka dịka: ubuntu anaghị ege ndị obodo ntị maka itinye ịdị n'otu, ubuntu anaghị ege ndị obodo ntị maka imepụta mir, wdg, na-ewetaghị ihe akaebe, mana mgbe mmadụ wakporo nkesa ha. ọkacha mmasị na-eji arụmụka yiri nke ahụ, mgbe ahụ ọ bụrụ na ha tie mkpu na mbara igwe. Ọ bụrụ n ’ewetaghị ihe akaebe siri ike mgbe ahụ, anaghị achọ ya. Na mgbakwunye, ikwukọrịta abụghị otu ịjụ, n'ihi na ọ bụrụ na anyị agaa na ndị ahụ, Ubuntu kọkwara na ọ ga-eji ịdị n'otu na ụdị ya n'ọdịnihu.
Yabụ ọrụ na-echere bụ ọtụtụ, agadi nwoke, n'ihi na ị ga-aga n'ihu igosi onye ọ bụla ụzọ ndị ọzọ ma gosi ụlọ ọrụ dịka ndị ahụ ị kpọrọ aha na enwere ndụ mgbe Ubuntu gasịrị. Site na blog a na-enyere ọtụtụ aka n'echiche ahụ
Achọtara m isiokwu banyere uru ala wayland dị na X.org ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị (ha nọ na Bekee)
ajụjụ maka onye edemede:
1) Afọ ole ka ị dị?
2) have nwere ndụ mmekọrịta?
3) Kedu distro ị malitere?
1) Adị m afọ iri abụọ na otu
2) Abụ m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na enwere m ndụ mmekọrịta ọha na eze, ọ dịkarịa ala na gburugburu m.
3) Amalitere m na fedora, linux lint na n'ikpeazụ ubuntu
pandev, a choro m iju ma i nwere enyi nwanyi, hehe
xDDD n'oge na-adịbeghị anya naanị m nwere ndị enyi n'abalị xddd, anọghị m na ọnọdụ maka enyi nwanyị ọ ga - abụ ahahhaa
Ihe ndị a bụ ihe na-akpasu ụfọdụ ndị ọrụ Ubuntu iwe.
O doro anya na n'ekwughị ya n'ụzọ doro anya, Fernando chọrọ ịgwa onye edemede ahụ na maka inwe echiche dị iche, ọ bụ nwatakịrị, na ọ maghị ihe ọ na-ekwu, ọ nweghịkwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na o chere na onye edemede ahụ malitere Ubuntu, ọ bu n'obi iwepụ nkatọ ahụ maka nke ahụ.
Ee, ụfọdụ ndị ọrụ Ubuntu na-agagharị. Dika m mara na ha pere mpe (pere mpe), karie ndi oru Ubuntu a na-akwanyere ugwu. Nsogbu ya bụ na a na-ahụkarị ihe ndị a na-enweghị ike ịpụta.
Na ka eme ya ka amara na n’elu ihem ka m kwuru n’enweghi isi n’agha ihe onye dere ya kwuru.
Ndị uwe ojii dijo
Imirikiti ihe ndị e kwuru na afọ.
Naanị m na-anapụta ihe nke @Acuadros, @Juancarlos na @ DevilTroll na ọ dịghị ihe ọzọ.
Ọ bụ ihe ọ bụ.
Ike gwụrụ nke nkatọ nke Canonical site na ndị ọrụ Linux mechiri emechi na-anaghị ekwe ka ọganihu a.
Ike gwụrụ nke nkatọ nke Canonical maka ịbụ ụlọ ọrụ jisiri ike nweta Windows na Apple na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ihe ọ na - enweghị onye rụzuru.
Na-atụ egwu, na-atụ egwu na Ubuntu bụ Linux na-ejikarị Linux ma ị kwụsịrị ịbụ ndị ọrụ emechiri emechi nke sistemụ pere mpe.
Linux kwesịrị Ubuntu, okwesiri ka ọ merie, onye ọ bụla na-anaghị akwado ya bụ Linux na-aga nke ọma anaghị eme ihe ọ bụla mana gbue sistemụ kachasị mma enwere.
Maka nke a, na enweghị ndị a niile ịkwụsị iberibe ma rara onwe ha nye ịkwado sistemụ arụmọrụ, karịa ịkpọchi ya karịa, m hapụrụ Linux, wee laghachi Windows, ebe n'agbanyeghị ndekọ ya, nje ya, wdg ... enwere m udo nke uche kari na Linux na ndị ọrụ ya Ọkachamara ndị achọghị ka ọ pụta.
Zaghachi to sgaggor
RedHat dị ogologo Windows na Apple, nke mere na ha lekwasịrị anya naanị na okwu ndị Servers, ma kwenye m, Canonical dị ogologo, ogologo oge iji ruo RedHat.
Linux kwesiri Ubuntu, okwesiri ka o mee nke oma
Ọ dịghị nna kwesịrị ka nwa ya gọnahụ ya, mgbe ọ natachara ịhụnanya na mmetụta ya niile kemgbe amụrụ ya. Ikpeazụ ahịhịa bụ na Ubuntu anaghị ekwu banyere Linux Kernel, kama banyere Ubuntu Kernel.
Ọ bụ ya mere ndị a niile na-akwụsị ịkwa ụja na-arara onwe ha nye n'ịkwado sistemụ arụmọrụ, karịa ịkpọchi ya karia
Iji kwado Ubuntu? Ubuntu anaghị akwado m, Ubuntu enweghị mmasị na m ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla ọzọ ị kpọrọ rabble. Ubuntu nwere mmasi inweta ego ... karie ihe obula. Ma ọ dịkarịa ala, m na-akwado Debian, Fedora, openSUSE, ArchLinux, wdg wdg.
Otu ihe ikpeazu, m ji nkwanye ugwu gwa gị, ọ bụrụ na ịlaghachi na Windows ọ bụ n'ihi na ịchọrọ. Ejila ndị ọrụ Linux dị ka ihe ngọpụ, n'ihi na agbanyeghị na enweghị m ike ikwenye na ọtụtụ, nke ahụ abụghị ihe kpatara m ji aga OS ọzọ.
M laghachiri na Windows, na kọmputa m, mgbe afọ 5 ma ọ bụ karịa nọ na Gnu / Linux n'ihi na Miguel de Icaza mere ka m hụ eziokwu na ahụmịhe ya. Linux, M ga-eji ya na sava ma ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụghị dị ka a dochie anya Windows maka PC nkeonwe.
Ọ dị m mma site n’echiche na ọ bụ mkpebi gị na ị ga-asọpụrụ ya.
M na-ejikwa Win7, dị ka ị ga-ahụ, ọ bụkwa maka ihe doro anya na anyị niile amatala, na mgbakwunye na igwefoto m, mana nke ahụ dị n'akụkụ.
Ka o sina dị, isiokwu ndị dị ka nke a (@ pandev92, ọtụtụ oge ekwenyere m n'ihe ị na-ekwu, mana edere ya na afọ, mana isi, mana ebumnuche ya na-efu mgbe niile), na ihe ha na-akpalite bụ nke na-eduga ọtụtụ ka ha ghara iji ma ọ bụ hapụ Linux.
Enweghi nkwekọrịta, yana ịnakwere ma ọ bụ nkwado, na-eduhie ọ bụghị naanị ndị ọrụ kamakwa ahịa (na anaghị m ekwu banyere mpempe akwụkwọ a ma ama).
Cheedị echiche banyere ọnọdụ ebe Mir bịara dị mma karịa Xorg na Wayland, gịnị ka ndị na-ede edemede dị ugbu a ugbu a ga-eme? Lezienụ anya, ụmụ okorobịa, lee keyboard enemas anya ga-emerụ ahụ.
Amụtara m n'ụzọ siri ike na enwere oge mgbe ị ga - amata otu esi atụgharị uche, lelee ma nwee ndidi. Edere m ọtụtụ isiokwu na Burjans Blog, yana ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ, nke dugara m mgbe emesịrị iloda okwu m mgbe m na-atụnyere distros ndị ọzọ na Fedora ma na-ekwutọ onye nke ikpeazụ, na ihe niile maka ide ihe site n'oge m, wee mechaa laghachi na okpu na-acha anụnụ anụnụ na isi ala.
Have ga-achọpụta otu oge na Linux ka na-agbanwe mgbe niile, na steeti Beta nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. Ekwenyela m onwe m na e nwere naanị nkesa abụọ (EE, TWO) naanị nke nwere ike ịkpọ LINUX OPERATING SYSTEM (anaghị eti mkpu) yana leta niile: RedHat na Debian. Otu ebubo, nke ọzọ anaghị, ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ maka RedHat enwere Centos, nke bụ otu ihe ahụ. Ndị ọzọ na-anara ha ma mee ka nsụgharị na ndị ọzọ dịgasị iche iche na-enweghị obi ụtọ na-enweghị obi ụtọ na-adịghị atụnyere Linux na Windows, na-enweghị na-ahụ na otu na ndị ọzọ nwere nnọọ ihe ọ bụla na-eme na ya, na onye ọ bụla dị ezigbo mma na ụzọ nke ya.
Agaba, m wee ju ohia….}
1.- I na-ekwu na Ubuntu na-agọnarị Debian, echekwara m ihe Ubuntu kwesịrị ime ka ọ ghara ịgọnahụ Debian? n'ihi na ọ bụrụ na ị chọpụtaghị na weebụ enwere nnukwu ozi gbasara Ubuntu na ịdabere na debian http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/ubuntu-and-debian
Ma ọ bụ gịnị ọzọ ka ị tụrụ anya ya? ọ bụghị otu ihe ahụ ka manjaro na arch, fuduntu (n'oge ahụ) na fedora, Linux Linux na ubuntu, wdg, wdg.
2.- I na-ekwu na Ubuntu adighizi ekwu okwu banyere kernel linux kama banyere nkpuru ubuntu, ERROR, ka o gosiputa otutu ihe. https://wiki.ubuntu.com/RaringRingtail/ReleaseNotes#Linux_kernel_3.8.8
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-ekwu na ubuntu na-eji "ubuntu linux kernel" nke dabere na "linux kernel" na okwu ndị ọzọ, Ubuntu na-agbanwezi sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, na nke a kernel, ma gbanwee aha mana na - ekwu maka nke ikpeazụ , na m na-eche (ọzọ) nke a abụghị otu n'ime uru ndị na-ukwuu chere na nke free software? mana odi ka, dika obu ihe banyere ubuntu, mgbe ahu i gha acho uzo gbagọrọ agbagọ nke okwu a na nkpuru okwu dika "ubuntu nara uru nke ndi ozo", "ubuntu choro nara otuto nile", wdg bia.
3.- I na-ekwu na Ubuntu akwadoghi gi. Ka m na-ahụ ya, Ubuntu na-eme ka nkesa dị maka nbudata na-akwụghị ụgwọ, ma ọ bụ gịnị ka ị tụrụ anya ya? Kedu ihe Debian, Arch, OpenSuse, Fedora, wdg. maka gi, gini mere ikwere na ha lebara ubuntu anya karis?
4.- I na-ekwu na Ubuntu na-eche naanị maka ego, biko, ọ bụ na ntozu oke pere mpe ị jụọ? Ọ bụghị ihe niile dị oji na ọcha, ọ bụrụ na ha chọrọ ego ha ga-eweta ezigbo ọrụ, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọdịnihu agaghị adị, belụsọ na ha nwere naanị otu Microsoft, ma ọ bụ ụlọ ọrụ telivishọn nke obodo m (Mexico) mana ka anyị chee ya ihu, o yikarịrị ka ọ dị ndụ dị na anyanwụ maka ubuntu ịghọ onye naanị ya.
Ọfọn, ịmalite, mee ka ihe niile ha na-eme kwekọọ na mbọ nke Debian. Site na nke ahụ, m na-ekwu ọbá akwụkwọ ọhụrụ na ịdabere na iji ha naanị, dịka ọmụmaatụ Unity.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-ekwu na ubuntu na-eji "ubuntu linux kernel" nke dabere na "linux kernel" na okwu ndị ọzọ, Ubuntu na-agbanwe sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, na nke a kernel, ma gbanwee aha mana na - ekwu maka nke ikpeazụ, na m jụọ onwe m (ọzọ), nke a abụghị otu n'ime uru ndị a na-eche ebe niile na ngwanrọ n'efu? mana odi ka obu, ebe obu ihe banyere ubuntu, mgbe ahu igha acho uzo gbagọrọ agbagọ nke okwu a na nkpuru okwu dika "ubuntu nara uru nke ndi ozo", "ubuntu choro nara otuto nile", wdg bia elu.
Ekwenyesiri m ike na Ubuntu anaghị agbanwe kernel ma ọlị, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala obere. Debian na-emezigharị ọtụtụ ihe ndị ọzọ anaghị akpọ kernel "debian linux kernel".
Lelee ihe ndị kachasị ọhụrụ na-eme .. Mmadụ ole bụ ndị otu Community ka Ubuntu lebara anya ime ha? Ha ajuju ma ha juo gi, uzo, email, ma obu ihe yiri ya?
Agaghị m abanye n'okwu nke ntozu oke, mana, echere m na ị nwere ezigbo nchekwube na Canonical agaghị abụ ụdị Monopoly n'ime ụwa GNU / Linux. Oge ga-agwa anyị okwu ikpeazụ.
Enwere ihe ole na ole na-esi ísì ọjọọ, Unity Next na-ekwu na a ga-eme ya na QML nakwa na njikọ nke Qt maka Mir QMir nọ na mmepe mana m na-ahụ na launpadpad na arụzigharị ọrụ a agbanwebeghị kemgbe Machị mmm ... Emechara ?
Chaị, onye tinyere aka na ọkụ ọkụ xD, echere m na isiokwu a nwere ọdụ, mana ị ga-ahụ echiche dị iche iche nke nke a:
Na-ewepu Mir dị Wayland dị nzuzu? Kpamkpam ee, n'ihi na ọ na-emechi Ubuntu ọbụna karị, na ịdị n'otu. Ewezuga eziokwu ahụ bụ na Mir bụ ihe ngosi eserese, ọ bụ kama ọ bụ protocol, nke na-enweghị ike ịrụ ọrụ (ugbu a) na-enweghị X.org ma ọ bụ Wayland.
Anaghị m eche na ọ dị mkpa ịdọpụ Ubuntu, o jisiri ike mee Linux ka ọ bụrụ ndị a ma ama, mana ihe enwere ike ịme, mana anaghị m eso ya, bụ ime ka onwe gị bụrụ onye ama ama wee jiri nwayọ mechie ma si na ndị mere gị ewu, hapụ bụ isi nke Linux na GNU ma were ọrụ nke ndị ọzọ na-enyeghị ihe ọ bụla na nloghachi. Nke ahụ bụ nkọwa. N'ihi na nke ikpeazụ bụ ihe Canonical mere, o jiri Gnome mee ihe, ngwa ọrụ ya, Debian, ngwugwu ya na ebe nchekwa ya, GNU na Linux, wee zoo ya n'ime Ubuntu, ma kwuo na ọrụ ndị a bụ ọrụ ya, dị ka ịkpọ aha kernel dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe o mepụtara, na - akpọghị aha Debian ebe ọ bụla, Gnome pere mpe (ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka mmemme ụfọdụ na - etinye ya »About» ma ọ naghị apụ). SUB SUL SU AH..
N'ihi na ị ga-ekwenye karịa ma ọ bụ obere na nkà ihe ọmụma nke oru ngo, mana opekata mpe site na ikikere bụ ịsị onye onye dere ya bụ, na nke ahụ bụ ihe Canonical anaghị eme.
Ma ọ bụrụ na anaghị asọpụrụ nke ahụ, na ha jidere Debian ma gbochie ojiji Canonical nke ebe nchekwa ha, ma ọ bụ na ha jidere Gnome ma gbochie ha iji desktọọpụ ha ... ụfọdụ ga-agwa m ugbu a, mana nke ahụ megidere nkà ihe ọmụma ma ọ bụ ebumnuche nke ọrụ ndị ahụ, ee, dịka ịghara ịsị onye bụ onye edemede nke ngwanrọ ahụ, yabụ ọ bụrụ na ha gafere ndụ na-agafe na-akwado nkwado na ikike nke ọrụ nke ndị ọzọ, ndị nke a nwekwara ike ịgafe nkwado nke a .
M ga-ekwukwa ihe ọzọ, tupu nkewa dị na Linux amachaghị nke ọma, otu sitere na otu distro ma ọ bụ ọzọ, site na otu desktọọpụ ma ọ bụ ọzọ, mana nkwanye ùgwù ahụ bụ otu. Ugbu a onye ọ bụla tinyere Linux na PC ha ma chee na ha bụ eze nke mambo, ha na-abịa troll na-enye ndị ọzọ ihe. Maka m, ndị ọrụ a bụ ndị na-emerụ Linux, na nwute, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị mmepe nke Canonical, ma ọ bụ nke ọrụ ndị ọzọ, na enweghị ndidi maka ndị ọzọ bụ ihe na-akpata nsogbu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye emechiri emechi, na ịgaghị ekele ndị ọzọ maka iji sọftụwia gị, ọ dị mfe, gaa Mac OS ma ọ bụ Windows. Mana na Linux, ọ bụrụ na ị ga - erite uru n'ọrụ ndị ọzọ, opekata mpe bụ ikele ha ma nye aka, nke na - adịghị na Canonical. Ma oburu na ha choro imeputa OS ha nke mechiri emechi ma kwekorita, ka ha kee ya n'onwe ha, ya na isi ya, Unity of shit ** na ngwa oru ya (nke m chere n'echeghị nke ọma) na ọ dịla mma ịnara ọrụ ahụ nke ndị ọzọ.
Thedị Ubuntu kachasị ọhụrụ kwụsiri ike, na Unity emeela ka arụmọrụ ya ka mma, ma ọ ka dị nwayọ ma dị arọ, n'agbanyeghị onye ọ dara.
M na-agụ ihe, ị na-ekwu maka Gnu-Linux dị ka a ga - asị na distros niile na - agbaso njirisi dị mkpa iji bụrụ sọftụwia n'efu. Ọ bụrụ na ịge Stallman ntị, ọ nweghị nke ị kpọtụrụ aha nke a ga-atụle n'ụzọ ahụ, ma ọ bụ Debian nke gụnyere sọftụwia nwere nke ọma.
Dị n'otu bụ ọrụ nke chọrọ itinye otu interface, (na obere mgbanwe) maka ngwaọrụ niile, mbadamba, mobiles, pc, tv ... Ma hụ na ịnweta faịlụ gị niile n'agbanyeghị ngwaọrụ ị na-eji. Nke a abụghị ihe ọzọ distros na-achọ, ndị na-achọghị ịpụ na desktọọpụ pc nke ndụ. Aghọtara m dị ka ihe ezi uche dị na Canonical ga-achọta nke ya, ebe ọ bụ na o doro anya na Wayland anaghị achọ ihe ụlọ ọrụ South Africa na-achọ.
Ihe ọzọ bụ na, na m kwenyere n'ọtụtụ okwu, ụzọ m si eme ya bụ ihe egwu na enweghị m mmasị na nkọcha ha, ọ dị m ka ọ bụ nnukwu nlelị.
Anyị niile maara na n'ime ụwa nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na ọkara, enweghị ụzọ a ga-esi kwenye na ihe ọ bụla ma ọlị. Distro ọ bụla nwere ụzọ nke ya esi akwakọ ngwaahịa, ndị anyị bụ ndị merụrụ ahụ na ụdị nghọtahie a ghọtahiere bụ ndị ọrụ,
Ya mere, anyị na-aga n'ihu, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, na ee .deb ee rpm .., na eziokwu bụ, echeghị m na ọ siri ike ikwenye na opekempe, ihe na-efu bụ uche, nke ahụ bụ ihe m ga-eme na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na nke enweghị ego bụ otu, ọbụlagodi na ihe dị mkpa.
Ma hụrụ ihe anyị hụrụla, ọ bụ nrọ na-agaghị ekwe omume, dịka ọ gaghị ekwe omume dị ka Windows na-eme koodu nke "asaa" ọha na eze. Ezigbo ndị mmeri bụ anyị, ndị ọrụ.
Kedu ihe kpatara nsogbu na ihe ubuntu na-eme dị ka a ga - asị na "nnukwu" ọganihu ya metụtara Debian.
Linux Mint dị mma karịa Ubuntu, mana debian na arch ga-aka mma mgbe niile.
Oke ire ọkụ nke eji egbe ebe a.
Eziokwu bu na onodu Canonical-Ubuntu na oru ya adighi m mkpa, ma oburu na o metughi ndi ozo n’adighi nma. N'ibia nke a, kedu ka Mir ga-esi metụta ọrụ ntughari dị ka ọmụmaatụ, Xubuntu?
Ọfọn, ọ na-emetụta ndị nke xcfe kpebiri ịbuga ya na mir, a ga-eji ya mee ihe na wayland ma ọ bụ gaa n'ihu na x, na nke mbụ ọ nwere ike ịbụ eziokwu na ịnweghị nkwado site na nvidia ma ọ bụ amd, na eze, mana ka anyị ga-echere, n'otu afọ anyị ga-ama.
Ọ D OK MMA, ka anyị hụ ihe ga-eme.
Ha juo gi banyere Xubuntu, obughi xfce. Are na-aza dị ka a ga - asị na ihe ị na-eme na Ubuntu na isdị n'Otu ga-emetụta ihe ị na-eme na Xubuntu, ma nke ka njọ, dị ka a ga - asị na ihe emere na xubuntu ga-emeri na xfce.
Ihe Canonical na-eme Mir na Qt / QML bụ naanị maka azụmaahịa eserese Unity na PC na ngwaọrụ mkpanaka, mana sistemụ ntọala (nke a na-esite na Debian) ga-adị otu, na ndị na-elekọta Xubuntu Maka ihe kwekọrọ na tebụl òké ahụ, ị ​​ga-asọpụrụ ihe Xfce kpebiri ma ọ bụghị Canonical. Dika pandev kwuworo gi, na XFCE ha ekwuteghi ihe obula (ha “adighi etinye aka” n’agha a, mgbe a), ha gha ekpebi ma ha na ndi Wayland ma obu Mir, ma obu “no neutral” ma noro. na X.
mana nke ahụ gaara arịọ onye na-abụghị ubuntu maka nnọpụiche na izi ezi
Mba obula, ihe m na ekwu bu na oburu na xcfe anaghi adota, xubuntu enweghi ike ime ihe obula iji nabata ihe obula.
N'ikpeazụ, Nke a bụ nnukwu nsogbu nke "LINUX FRAGMENTATION" KWURU.
MIGUEL DE ICAZA (GNOME DEVELOPER) BIGHTRIGHT KWES ,R ES, NA Ọ B ESP ESTARA ỌD THIS A B PR ỌB ANDR O NA Ọ BEDR EV WORB SWR AND NA MAC, EBE Ọ B S NA Ọ BURE NA-EKWU NA Ihe niile ga-arụ ọrụ nke ọma na ọ gaghị eme ka ndụ dịkwuo njọ.
Ọfọn, nke ahụ bụ mwute dị adị nke ụwa LINUX, Ọ na-emerụ onye ọ bụla na-emerụ ahụ, mana nke a na-abịa na njedebe.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka nnwere onwe na ụwa Linux, mgbe ahụ gịnị bụ nsogbu ahụ? Canonical nwere ikike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ site na ya, ma ọ bụrụ na ị masịghị ya, n'ihi na enwere ọtụtụ ịhọrọ site na, ị na-egbusi oge dị ukwuu ide ụdị post a mgbe ị kwesịrị ibipụta ihe na-adọta ọtụtụ ndị ọrụ na Linux Echere m na ọbụnadị iru 4% n'ụwa, gịnị kpatara ya? Maka ụdị mbipụta a, ndị ọrụ ọhụụ na-achọ ndị ọzọ na-abụghị windo na echiche dị a doaa ka ha na-ewere na ikpe ahịa a? n'ikpeazụ ha na-abịa ịlaghachi na-enweghị ike ịkọwa obi abụọ ha. Ahụrụ m ọtụtụ ịkpa oke ofufe n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ na nke a anaghị enye aka na mgbasa nke sọftụwia n'efu na ike ka ukwuu. Nke a bụ mgbasa ozi na-apụtaghị ìhè nye Ubuntu ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị maka na ha na -ekwupụta akụkọ oge niile ka mma ma ọ bụ ka njọ, na agbanyeghị na ọ na-ewute ya mgbe ọ na-ekwu maka Linux, ihe mbụ ndị mmadụ n'okporo ámá na-agwa gị bụ UBUNTU, ma fedora ma ọ bụ debian ma ọ bụ ọtụtụ obere arch dị ka ihe atụ mara, na ebe a ọ bụghị ajụjụ ikwu onye ka mma, ọ bụrụ na anyị achọghị ka esi tinye akwụkwọ ndị bara uru ịgụ, ka Maazị Shuttleworth mee Ubuntu ihe o chere kacha mma.
ime ihe ị chọrọ site na distro gị, ọ bụrụ na ị masịghị ya, n'ihi na enwere ọtụtụ distro ịhọrọ site na, ị na-egbusi oge dị ukwuu ide ụdị post a mgbe ị kwesịrị ibipụta ihe na-adọta ọtụtụ ndị ọrụ na Linux karịa ka m chere ọ dịghịdị eru 4% n'ụwa, gịnị kpatara ya? Maka ụdị mbipụta a, ndị ọrụ ọhụụ na-achọ ndị ọzọ na-abụghị windo na echiche dị a doaa ka ha na-ewere na ikpe ahịa a? n'ikpeazụ ha na-abịa ịlaghachi na-enweghị ike ịkọwa obi abụọ ha. Ahụrụ m ọtụtụ ịkpa oke ofufe n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ na nke a anaghị enye aka na mgbasa nke sọftụwia n'efu na ike ka ukwuu. Nke a bụ mgbasa ozi na-apụtaghị ìhè nye Ubuntu ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị maka na ha na -ekwupụta akụkọ oge niile ka mma ma ọ bụ ka njọ, na agbanyeghị na ọ na-ewute ya mgbe ọ na-ekwu maka Linux, ihe mbụ ndị mmadụ n'okporo ámá na-agwa gị bụ UBUNTU, ma fedora ma ọ bụ debian ma ọ bụ ọtụtụ obere arch dị ka ihe atụ mara, na ebe a ọ bụghị ajụjụ ikwu onye ka mma, ọ bụrụ na anyị achọghị ka esi tinye akwụkwọ ndị bara uru ịgụ, ka Maazị Shuttleworth mee Ubuntu ihe o chere kacha mma.
Na ụdị mkparịta ụka a na-ekewapụ ma ọ bụ na-atụ ndị na-eche banyere ịnwale Linux ị bụ ezigbo ihe ziri ezi, ọbụlagodi n'ọnọdụ m, m mere atụmatụ ịmalite na Ubuntu mana m hụrụ na ha tụbara ya ụjọ m kpebiri na Mint ( Ọ bụ ezie na ọ bụghị mkpebi ọjọọ, Mint bụ ezigbo enyi na enyi n'ọnọdụ ọ bụla).
Ya mere, ị nwalere ma ọ nwere ihu ọma ma ọ bụ na ọ bụghị ndị mmadụ?
You ga-atụ uche ịnwale ọtụtụ ihe mgbe ahụ, n'ihi na ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere ihe isi ike nke ịwụnye Arch ma ọ bụ Gentoo; ndị mmadụ na-ekwu na KDE bụ desktọọpụ kacha mma; Ndị mmadụ na-ekwukwa na ihe nchọgharị kachasị mma bụ Chrome ... enwere m ike ịga n'ihu na ihe atụ ndị ọzọ nke ọtụtụ ndị na-ekwu na nke ahụ, n'agbanyeghị na enweghị m ike ịsị na ọ bụ nke ahụ, ọ bụrụ na m nwere ike ịkwado na ihe a ma ama abụghị mgbe niile ihe kacha mma nabatara mmadụ niile, gụnyere gị.
Chọrọ ndụmọdụ, jụọ ma gee ntị, mana agụla echiche ndị metụtara ihe masịrị gị were ha dị ka a ga-asị na ha bụ eziokwu.
Ikwesiri igbakwunye: Nwale, nwalee na ule ma mee nyocha nke onwe gi, na-agbaso ndumodu ndi ozo.
Nke ahụ bụ mgbe m ka malitere ịbido na Linux, mgbe m jidere eriri m gbalịrị ọtụtụ distros ma site na ebe ahụ ihe m masịrị m malitere ịpụta ... ihe m na-ekwu bụ na ọ naghị atọ ụtọ ịbịaru mmasị na ihe na ihe mbụ ị hụrụ bụ mkparịta ụka maka ebe niile. Banyere.
Ezigbo enyi, nsogbu abụghị mkparịta ụka ma ọ bụrụhaala na ha na-eduga na isi bara uru, nsogbu bụ mkparịta ụka "asshole" (nwute) nke na-adịghị eduga ebe ọ bụla, nke ahụ bụkwa ngwaahịa nke enweghị uche, dịka a na-ahụkarị n'oge na-adịbeghị anya dị iche iche blog si.
Echiche kachasị nzuzu na nke dị mfe m hụtụrụla, na ihe kpatara Linux anaghị agafe 2% na desktọọpụ ụlọ ... pffff
N'ezie, maka ihe ndị dị ka nke a ..., mgbe ahụ ọ gaghị abụ n'ihi enweghị ahịa, n'ihi enweghị nkwado site na ụlọ ọrụ ngwaike, n'ihi enweghị egwuregwu (obere nke nta ọ ga-agbazi obere dị ka osx), n'ihi enweghị Ezigbo ndị ọkwọ ụgbọala igwu egwu site na amd na intel, n'ihi enweghị ezigbo ọkwọ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ, nke na-anaghị akpata nsogbu dị ka pulseaudio nyere m dabere na kọmputa, wdg wdg ...
Mba, ọ bụ ikwu eziokwu na blọọgụ, Kpee akwa gị.
Ahụrụ m na ha kpochapụrụ otu ihe m kwuru, n'agbanyeghị na ọ nweghị ụdị mkparị ọ bụla. Echeghị m na ha ga-emikpu ala ahụ.
Enweghị m ike ihichapụ ihe ọ bụla, ma anaghị m ahụ ihe ọ bụla ehichapụ sitere n'aka gị, yabụ aghọtaghị m ihe nke ahụ bụ.
Ubuntu (ya bu, Canonical) di ka onye nkpuru obi onye nkpuru obi n’enye gi nkpisi n’onwe ya, ya onwe gi ghotara na ya adighi eme enyi dika odi.
Mụtara ihe na enyi gị na ị nwere nnukwu oge, ị ga-enwe ekele mgbe niile, mana ị ghọtara na n'ikpeazụ ọ bụ shit na ọ bụghị uru ya.
Ihe Ubuntu choro ime bu iji ike ya (ibu Linux kacha jiri na desktọọpụ) ma tinye ụkpụrụ ya na azịza ya, nke ha ga-ejikwa, ebe ha na-etolite maka distro ha, na-enweghị inye onyinye na mgbago.
Ihe m na-eche bụ na e nwere ndị na-asị na ha bụ ndị hụrụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na-akwado ma na-agbachitere ha, na ọ bụrụ na nnwere onwe, na ọ bụrụ na ha emee ọtụtụ ihe ọma ... ụbọchị nke ọzọ, agụrụ m okwu si n'aka onye nwara na kọmputa Dell yana Ubuntu arụnyere wụnye distro ọzọ, ma nwee ọtụtụ nsogbu, n'ihi na o doro anya na Dell emeela patch ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala kpọmkwem maka ubuntu ... OLÉ!
Idozi ahụhụ # 1 na-alụ ọgụ Microsoft, ha na-aghọ Microsoft n'ụzọ. Ka ha mee ihe ha choro, ma adaberela na m.
Kpọmkwem, na anaghị m ahụ ihe mere ji ezi obi, ozugbo canonical kwuru na ọhụụ ha chọrọ ịgbaso bụ nke osx na ọ bụghị nke windo ..., ọfụma ha na-agahie mgbe ahụ, n'ihi na anaghị m ahụ ịdị n'otu nke ọ nwere ike merie osx, belụsọ na ịdị arọ ahaahahahha.
Ysmụ okorobịa, ụmụ okorobịa, ha na-egbu oge naanị na mkparịta ụka nzuzu, m dokwara anya: Anaghị m ekwu na isiokwu a adịghị mkpa is. (na mkparịta ụka nzuzu na-aga, n'ihi na ọ dịghị onye ga-agbanwe obi ha) na mkparịta ụka ọgụgụ isi ndị abụọ ahụ ga-enweta nkwekọrịta, nke ha abụọ ga-enwe mkparịta ụka iji nweta nkwekọrịta ga-abara ha abụọ uru. Mana nke a site na echiche ha lere ya anya, agaghị eweta ezi ihe ọ bụla, ha na-akparị mkparị, nwee oge ọjọọ, were iwe ...
heee ewu dijo
Ọ ga-amasị m iji ohere ahụ jụọ ndị nchịkwa maka ịkwanyere ugwu maka ndị ọrụ ubuntu na-eleta blog. Ga na blọgụ ahụ ma hụ ka ụfọdụ ndị nchịkwa si ebipụta ihe ndị dị ka ndị a, ma ọ bụ kwuo okwu adịghị mma n'akụkụ ubunto bụ ahụmịhe adịghị mma, Elav ị bụ onye nwere ọgụgụ isi, nwee ọtụtụ ihe ọmụma banyere Linux (na n'ezie n'ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ) mmadụ onye obu ezie na amaghi m enwe mmasi. Eziokwu dị mfe nke ịbụ nke mba ukwu na nke ọma dị ka Cuba, na-eme ka ị bụrụ onye pụrụ iche nye m. Biko adala na nkpasu iwe nke nzuzu. Ekele dị ukwuu site na El Salvador.
hey olee ihe dị njọ, ọ bụrụ na ha ehichapụ otu n'ime ihe m kwuru ... ihe na-atọ ọchị bụ na ọ kpasuoghị onye ọ bụla iwe, ọ gbalịrị ịkọwapụta uru ọ bara ịgbagha n'ụzọ dị otú a.
Ugbu a ọ bụrụ na ihe m kwuru pụtara, Daalụ
O mere na ha anabataghị ha, mana ọ dị obere na DLinux anyị na-ehichapụ okwu ... ọ dị obere.
Linux kwesiri ibia onu ma ghara iwe iwe, ma amam ihe kpatara ya; anyaụfụ.
Enwere m olileanya na otu ụbọchị agha a nke mkparị na enweghị nkwenye ga-akwụsị.
Ahụla m ọtụtụ okwu nzuzu n'akụkụ ebe a, gbaghara m ndị mmekọ mana ọ bụ otu ahụ.
Ihe a niile bụ ihe uto na mkpa, lee m anya linux, na kọmpụta a nke nwunye m nwere canaima ma merie vista, n'ihi na ọ si n'ụzọ ahụ wee pụta site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma linux anaghị amasị ya n'ihi na ọ nweghị ndidi iji were ụzọ ahụ mu.
na mkpara m nwere kubuntu nke m emelitere ụnyaahụ na ọ masịrị m, ha makwaara na canonica echefuru ya na ọbụnadị na ha anaghị ahụ m ka m na-ede ihe nzuzu ma ọ bụ nzuzu, yabụ ana m arịọ onye ọ bụla maka ndidi.
Ugbu a, m na-edebe ihe m kwuru bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na Ubuntu bụ ngwaahịa, n'ihi na ha nwere ikike ime ihe ha chọrọ n'ihi na ihe dị mkpa bụ uru, ọ bụghị obodo. Ọgwụgwụ akụkọ, gịnị bụ enweghị ekele? Gịnịkwa ka ha tụrụ anya ya? mkpa bụ ebumnobi ha, yabụ ka anyị chigharịa azụ ha ma hapụ ha ka ha gaa n'ụzọ ha.
Na ngwa ndị a bụ na ha bụ ndị na-ewebata ọtụtụ ụwa linux, nke ọma n’uche m ọ bụrụ na ọtụtụ n’ime anyị chọpụtara tetra, echeghị m na ndị ọhụụ makwaara ya.
Ihe ngwọta m ga-abụ iwelata akụkọ banyere ubuntu ma ghara itinye ya na akaụntụ dị ka o kwere mee, yana ịbawanye ozi na mgbasa ozi nke ndị ọzọ niile. na onye choro iji ubuntu, ya buru na ha choro.
Nke mbụ ị nabatara na nke a bụ maka ihe ụtọ na mkpa maka ihe onye ọ bụla chọrọ ịnye dị ka ngwaahịa linux na onye ọ bụla chọrọ iri ya, na n'ikpeazụ, ị ga-apụta n'eziokwu na ị ga-ewepụ akụkọ banyere ngwaahịa nke nnukwu ụwa Linux ahụ. Dị ka ọ na-adịghị elele ihe ị na-ekwu na-akwanyere na ngwọta ị chọrọ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-akwanyere echiche dịgasị iche iche ùgwù, mana a ga-ewepụ ndị na-eche echiche n'ụzọ ụfọdụ.
nwa, ọ bụghị na m chọrọ ọgbaghara na iche iche nke echiche, ọ bụ megide a ụlọ ọrụ na-eji na ndị depresses na uche. Ka ọ bụ na ihe omume ndị a niile esiteghị n'aka ha? Anaghị m ekwu ikpe onye ọ bụla chọrọ iji Ubuntu-mba, n'ihi na onye ọ bụla nweere onwe ya ịme ya, ma ọ bụrụ na anyị anaghịzi agbaso okwu nduhie Canonical na omume ya, n'ihi na ihe abụọ dị ka nke ahụ nwere ike ime, ma ọ bụ Ha na-enye nkọwa na ọ dịghị mma ịjụ mmalite dị ka ha na-eme, ma ọ bụ otu ugboro na ihe niile ha na-ekewapụ kpamkpam na ụwa bụ gnu / linux. (nke m chere bụ n'ikpeazụ ihe ha ga-eme maka ngagharị ha doro anya).
Daalụ Daniel, ụtụtụ ọma
Ọfọn, "okwu nduhie" bụ naanị ndị ọzọ abụọ mere: Canonical na ihu ọma (ya na blọgụ omgubuntu ha, dịka ọmụmaatụ), na antiubuntu megide (yana isiokwu ndị dị ka nke a). Na mpụga nke abụọ ndị a, ọ dị obere maka ndị ọrụ Ubuntu ịrụ ọrụ ahịa, naanị ha na-eme usoro sistemụ yana onye ọrụ ọ bụla nke distro ọ bụla.
Ihe gbasara nnwere onwe nke echiche bụ ihe atụ na ihe ị tinyere na post gị, n'ihi na, m kwughachiri, n'otu aka ị na-anakwere na nke a bụ ihe uto ma ị na-enye ihe atụ nke ihe na-eme gị na onye gị, ma na nke ọzọ ị na-atụ aro otu Ihe ngwọta ya bụ ịtọhapụ ozi ọma nke nkesa nwere, naanị n'ihi na e nwere ndị na-akwado ya na-awakpo ya na ndị ọrụ ya maka mkpebi nke ụlọ ọrụ enyere ikike karịrị nke o nwere n'ezie.
Ogbolu3 m3s dijo
Echefula na onye dere ya bụ Uruguayan; ya bu, nzuzu nke obodo bi na Argentina na Brazil na-ebe akwa mgbe ewepuru karama a.
Zaghachi r3irm3 m4s
Nwetaghị ya. Onye dere ihe a bụ onye Italiantali bi na Spen.
wtf lol? xD abughi m onye Uruguayan ahahhahh
Ana m arịọ mgbaghara. Okwu na-adịghị mma nke m. Ọ bụghị n'ihi na echeghị m banyere ya, mana ọ bụghị ebe kwesịrị ekwesị ime ya. Site na ekwughị m blog ma ọ bụ post n'onwe ya.
Ubuntu bu ngwakọ ngwakọ (obodo + ụlọ ọrụ) na ọ bụ ihe a na-ahụkarị ụdị esemokwu a. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ MIR, wee banye na Launchpad, jidere koodu isi ma melite ndakọrịta na KDE na gburugburu desktọọpụ ndị ọzọ (ọ bụrụ na ị ga-anwa anwa dezie koodu isi ma nwalee ya mgbe niile, n'ezie). Nke a bụ ihe ndị Mint mere mgbe ha hụrụ na sistemu njikwa ngwungwu Ubuntu esila na Guatemala ruo Guatemala.
Debian agbakwunyela GDebi na ngwanrọ-ngwanrọ (ma, site n'ikike nke Cannonical) ma ọ bụrụ na n'oge na-adịghị anya MIR na-achịkwa ịnọ na nnwale / nkwụsi ike, mgbe ahụ mkpasu iwe nke ndị fanboys / ndị kpọrọ asị na distro a ga-emechi ma Ha ga-ekwenye na Cannonical dị ka a ga - asị na ọ nweghị ihe mere (enwere ndị na - amasị Unity GUI na anaghị m eme mkpesa, n'ihi na ọ bụ swiiti anya dị ka Aqua na OS X na Aero na Windows Vista / 7, mana ka Ana m asọpụrụ ha ma ghara ịnwa ime dị ka a ga - asị na m bụ onye na - ezisa ozi ọma dị ka ọ bụ ime ya na ire ọkụ a)
Ugbu a, egwuregwu bụ nke a: Gịnị ma ọ bụrụ na MIR bụ ihe nkesa ihe osise dị iche iche? Ihe ndị a na-eme ugbu a ọ̀ bara uru?
Onye ọ bụla na-eme mkpesa banyere Ubuntu maka nzuzu ndị a na maka ụzọ o si ejikwa nchịkọta ya na ndị isi nke ndị ọrụ n'ihi mmebi iwu nke "sudo" (nke m na-ekwenyeghị na ya, ebe ọ naghị eme onye ọrụ na-abịa) Windows n'ezie na-amata na gị usoro nwere ike-echebe).
Ọzọkwa, Launchpad na-arụ ọrụ oge niile Debian Stable anaghị etinye Chromium emelitere na akwụkwọ nkwado ya mgbe ọ dị na mmelite 4 nke alaka Stable ya na ihe ọ bụla ọzọ na-enye anyị umengwụ ma ọ bụ na anyị chọrọ ịbelata Debian anyị ka ọ bụrụ ọkwa nke stratospheric.
Na ndị ọrụ a, onye ọ bụla ga-eji Crunchbang, CentOS na / ma ọ bụ slackware.
Ọ dịghị ihe ọ bụla dijo
Ọrụ nke ime ka gburugburu niile kwekọọ na ọgbọ ọhụrụ nke sava eserese emeelarị, enwere okwu dị ogologo ma ọ dịla ọtụtụ afọ ruo mgbe Wayland gwụchara. Gini mere aga eji megharia ugboala a ugboro abuo na whim Canonical onye nyere iwu na-enweghị ịdabere na onye ọ bụla?
Enwere nnukwu ọdịiche na inye / gbanwee ihe na sọftụwia ụfọdụ iji mee ka ọ zuo oke ma ọ bụ dozie nsogbu ọ bụla ị nwere ma nwee obere obere iji mee ihe niile maka ihe emere na okwukwe ọjọọ na ebumnuche na iche. .
Otu ụzọ anyị ga - esi hụ Mir na distro dị ka Debian bụ na, ọ dị nwute na ihe niile, a na - enye ya iwu ma ọ nweghị nhọrọ ọ bụla karịa ịme ya na ọbụlagodi, ọ ga - abụ na ọ ga - abụ na ọ ga - abụ na ọbụlagodi na ihe atụ dị ka nke a na - abịa. Mgbe ọ na - eme, ekwesighi ịkọwa okwu banyere Mir na ihe kpatara ya n'ụwa niile, n'agbanyeghị nkesa na - etinye ya, ọ bụghị maka ịnụ ọkụ n'obi ma ọ bụ egos merụrụ ahụ, kama ịnwe mkpịsị aka abụọ na ihu na iji hụ ihe na nghọta.
Ọ bụrụ na ederede ahụ kwuru maka otu esi ejikwa nchịkọta na ndị isi ọchịchị
nke ndị ọrụ, ị gaara agụ ihe banyere ya, mana ebe ọ bụ na ọ bụghị maka nke ahụ mana banyere ihe nkesa eserese, ịkọ maka OS ndị ọzọ ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ na-enweghị njikọ adịghị mkpa na ọ ga-abụ ịdọpụ uche site na isi okwu nke isiokwu ahụ.
Launchpad (Echere m na ndị PPA) anaghị echekwa ya na Canonical, mana ndị mmadụ si n'obodo ahụ, enwere ike ị nweta ụlọ nkwakọba ihe, ọ nweghị ihe ọzọ, ọrụ ndị ọzọ bụ naanị obodo.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịhapụ n'ihi na ndị ọzọ anaghị eche echiche ma ọ bụ na-ahụ otu ihe, ma ọ bụ na ọ pụta na ịnweta njirisi nke gị kama ịgbaso ngwugwu ahụ na-enweghị ajụjụ ga-abụ ihe ziri ezi ịme?
Dị ka ha na-ekwu gburugburu ebe a, mgbe ị kụrụ ikuku, ihe ị na-ewe bụ oké ifufe. Ọ bụghị n'ihi ịbụ ha, ma ọ bụ n'ihi ekworo, ma ọ bụ n'ihi nke ọ bụla n'ime ndị ngọpụ mgbaghara ndị akpọrọ aha, ọ bụ naanị na Canonical na-atụtụ mkpụrụ.
Ajụjụ Gini kpatara ejiri megharịa wiil ahụ ugboro abụọ n'ihi na ị na-eme ihe n'eziokwu nke na-etinyeghị aka na onye ọ bụla?
Azịza: n'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ nkeonwe ya nwere ọdịmma nke ya yana ebumnuche guzobere nke dị iche na ọdịmma na ebumnuche nke obodo)
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ maka Red Hat na Novell, ụlọ ọrụ ndị na-elekwasịkarị anya na ngalaba azụmahịa ma na-enye njikwa njikwa dị mma karịa Ubuntu.
Ka o sina dị, enwere karịa 300 GNU / Linux distros na ịnọ na-akatọ otu distro abụghị ihe ngwọta. Ọ bụrụ na m ahọrọ ọrụ adịchaghị, mgbe ahụ, m ga-edebanye aha na Red Hat Network, kwụọ ụgwọ maka ndenye aha m nke dị ọnụ ala karịa ikikere Windows Server 2012 ma enwere m ike ịnweta akwụkwọ ikike ha, ebe m maara na m nwere ike iburu n'uche ụlọ ọrụ nke bụ n'ezie lelee ndị ọrụ gị na onyinye ha (Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ mgbochi, mgbe ahụ ị na-eji Debian, Slackware, CentOS na distros ndị ọzọ).
Otu ihe kwesiri iburu n'uche na nke a bu na, ewezuga okwu ole na ole, aga m etinye aka m n'ọkụ n'ihi na a naghị akatọ Ubuntu (nkesa), mana ulo oru n'azu ya na atumatu ya.
"Linux maka mmadụ", na-abịarukwu ndị ọrụ nso, na-eme ka distro na-ewu ewu, ịmara na ịgbasa GNU / Linux…. n'ikpeazụ echiche zuru ezu nke Ubuntu si malite B NOT abụghị nsogbu. Nsogbu bụ na ụlọ ọrụ dị n'azụ ya "na-ere" nke ahụ mana ihe ọ na - enye mgbe ahụ bụ nke na - abụghị.
N'ụzọ bụ isi, ha na-emebi ọrụ nwere ọtụtụ ikike, dị ka Ubuntu (ma ọ bụ) na-enweghị oke oke na mmasị azụmahịa. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iwe iwe ọkụ mgbe ha chọrọ “ibibi” ihe dị mma.
Echere m na ịkwesịrị ị attentiona ntị na isiokwu dị na blọọgụ dị iche iche, n'ihi na mgbe ọ bụla a na-ekwu banyere Ubuntu (n'ihi na ụdị ọhụrụ na-apụta, n'ihi na ha na-akpọsa mgbanwe ụfọdụ, wdg) ndị ọbịa antiubuntu (ọ bụghị mgbochi canonical) ndị mmadụ na-apụta iji iwe na ihe niile megide Ubuntu, Unitydị n'otu na ndị ọrụ nke distro a.
DanielC, Echere m na ha na-a attentiona ntị nke ukwuu ma na-enye ndị na-agba ume na trolls ihe dị oke mkpa, ị kwesịrị ị paya ntị na ìgwè ahụ dum na ndị nwere mkpịsị aka abụọ nke ọkpọiso, ọ bụghị naanị ndị nzuzu, ndị dị mwute, enwere ebe niile.
Ọ bụghịkwa na ọtụtụ ndị e dinara n’uche na-abata m n’obi.
Ọ dị mma, yabụ ka ha mepụta ngwanrọ na-ezute ọdịmma ha na ebumnuche ha na mpụga obodo kama ịda mba ha ma chọọ ka ha na-agba nwa ha nwoke egwu mgbe ọ bụla ọ masịrị ha.
Ugbu a, ọ bụrụhaala na ị na-erite uru zuru oke nke ọrụ ndị ọzọ, opekata mpe ike ịme bụ ịnwe modicum na-echebara echiche ma ghara ịnwale ịchịkwa na ịmanye uche gị otu ị si eme ya.
A na m atụ ụjọ na inye nkwado KDE maka Mir abụghị ihe dị n'aka Linuxeros ole na ole, enwere ọtụtụ ihe na-egbochi nkwado a, ana m akwado gị ma ọ bụrụ na ịgughi akwụkwọ ndị a Martin Gräßlin, bụ isi onye nrụpụta KDE:
Blablablablabla… dị ka onye ọrụ ubuntu m na-arịa ọrịa nke ịgụ ụda nke ndị ọrụ distros ndị ọzọ na-eme mkpesa banyere ubuntu. Ọ bụrụ na ụbọchị ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na-efu, ọ ga-abụ n'ihi na obodo gị dị ebube anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-eme ya n'echiche na-ezighi ezi ... m na-ekwu obodo gị n'ihi na anaghị m eso ya, ana m agafe n'aka gị dị ka canonical, achọpụtara m mkpọtụ niile nke ị na-eme n'ihi na canonical ọ bụghị ya na-arụ ọrụ gị .nke a bụ free software… ọ bụghị ihe ị na-ekwu na ọ bụ.
Ma kedu ihe ị na-ekwu? Ọ bụrụ na ihe na-erughị 10% nke Ubuntu bụ nke Canonical mere, ndị ọzọ bụ sọftụwia sitere na ndị obodo, ndị ọkwọ ụgbọala gụnyere.
Ọ dị mma, ha chọrọ ịhapụ GNU na Linux iji wuo "ihe ọzọ" n'onwe ha, mana ha ka dị anya site na imezu ya, yabụ na ha ma gị ime nzuzu nke eze site n'ilelị obodo ahụ bụ nke na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ niile. O pere mpe karịa ịgbụpụ ọnụma ma ọ bụ iwesa ifufe, ọ ga-akwụsị ịgba ha.
Ọ dị mkpa nke ukwuu ịdị oke mkpa na ịnụ ọkụ n'obi naanị iji chebe ụlọ ọrụ gosipụtara ọtụtụ oge na ọ naghị eche banyere gị?
Ikwu okwu banyere onye ga - ahọrọ ịhụ iji windo, tupu ịhapụ Linux dị njọ, na - ekwu ọtụtụ okwu nzuzu na - erughị ahịrị 10, kedu ihe ihere bụ eziokwu ..., Atụrụ m anya na ọ na - agbakasị iwe.
90% Ubuntu: Mmepe Debian, Mozilla Foundation, * ndị mmepe buntu (kubuntu, xubuntu, lubuntu) na ndị ọrụ Ubuntu chọrọ imeziwanye distro.
10% Ubuntu: Mark Shuttleworth, Cannonical na ndị mmekọ.
"Ọ bụrụ na otu ụbọchị ndị ọkwọ ụgbọala na-efu, ọ ga-abụ n'ihi na obodo gị dị ebube anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ na-eme ya n'echiche na-ezighi ezi" olee ụdị nzuzu nke ahụ bụ?
Edela ihe mbụ batara gị n’obi, chee echiche karịa.
Aga m akpọ gị GNU / abụ nke ndị m http://k42.kn3.net/taringa/9/9/6/1/7/6//pampelito/1F2.jpg
Ndị Rom a bụ ndị ara ... Nke a na-echetara m Ndụ nke Brian site na Monty Python ...
- you si n'aka ndị Juu a ma ama?
- Chei gị! Ọchịchị ndị Juu a ma ama? Anyị sitere na Ọdịda Anyanwụ mara Jude! Ọchịchị ndị Juu a ma ama ...? Ndi ekweghi ekwe!
- Naanị ndị anyị kpọrọ asị karịa ndị Roman bụ bastards si Front of the Jewish People, ndị mgbagha!
- na Popular Front nke ndị Juu, ndị niile na-ekwenye ekwenye!
- na Popular Front nke Judia, ndị nkwenye!
- Ndi ochichi nke ndi Judia, ndi nkwekorita!
- The Popular Front of Judea bụ anyị ...
- eeeh, nke a, echere m na anyị si na Union Popular
- sitere na Popular Front
- Gini mere ndi otu ndi ama ama, Rex?
- enwere ya (ọ na-atụ aka na ịnọdụ ala naanị ya)
Tinye Ubuntu, Arch, Win $, wdg kama aha ndi agha na ...
Ka anyị hụ ma anyị niile ga-akwụsị ịbụ assholes.
jajjaajajajajaj echetaghị m ihe nkiri ahụ, mana ọ bụ eziokwu na ọ na-abịa ntutu nke xd a.
RomeANI ITE DOMUN!
HAHAHA. Ị nwetara ya!
Ekwu ole ka post a nwere? ... mgbasa ozi kacha mma na nke ka njọ maka ubuntu echere m na enwere ike
Ọfọn, n'ihi na onye ọ bụla nwere "nnwere onwe", n'ihi Chineke kwụsị ikwu okwu nzuzu, Canonical na-eme ihe ọ bụla iji mee ka ngwaahịa ha nwee ihe ịga nke ọma, ọ na-agbasi mbọ ike iweta Ubuntu na PC, mbadamba na ekwentị. Gbalịa iweta LINUX na ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na ha kere MIR, ọ bụ n'ihi na Xor anaghịzị atụ anya ihe ha tụrụ anya ya ma ha mee ihe iji gbanwee nke ahụ, ọ bụrụ na oge ụfọdụ nkesa ndị ọzọ agbapụla ndị ọkwọ ụgbọala, ọ bụ n'ihi na ekwuru na nkesa emebeghị ihe dị mkpa ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ hụ ya.
Kwụsị okwu nzuzu dị ka ndị a, echere m na o doro anya na Canonical anaghị achọ ịsọ mpi megide nkesa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị megide sistemụ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara ngwanrọ, ịsọ mpi, na nkwado ọzọ, hapụ ha ka ha meere m ihe ha chọrọ.
Achọrọ m ịhụ ubuntu arụnyere na kọmputa, mbadamba, na ekwentị.
N'ikpeazụ obere ọgụgụ isi. Okwu m masịrị m.
Lee anya, anaghị m agbachitere onye ọ bụla. Mana uche m bụ na ikekwe Canonical na-achọ maka mmepe ka mma, ọ na-elekwasị anya na "mmebi mmekọrịta" nke mkpebi ya nwere ike ibute. N'agbanyeghị nke ahụ, ekwenyere m na ịda ogbenye nwere ike iweta ihe ọhụụ. Mgbanwe na-ewute, ee, mana onweghị onye ma ọdịniihu. Achọpụtara m n'ezie na Canonical na-ele naanị n'ọdịnihu, na ọtụtụ ndị ọrụ na-ele anya ugbu a.
Ma ọ bụ ka ọ bụrụ iwe ọkụ, naanị n'ọdịnihu, lee ebe ifufe na-efe ma mee mkpebi anyị kachasị mma (gaa ebe masịrị anyị).
Aga m echere oge iji gosi m Ka ọ dị ugbu a, ana m aga n'ihu na Debian. Amam na ihe m degara ụfọdụ ga-eme ka ntị ha nụ.
Ọ dị mma maka ndị mbido na dịka onye ọrụ Fedora ruo ọnwụ; Compiz; Xfce; Fluxbox na Debian. Ekwesịrị m ịsị na ọ bụrụ na Canonical bụ HR n'oge HR malitere, ọ ga-abụ akụ ma ọ bụ na ọ bụ ụlọ ọrụ Apple mana akpachapụrụ anya. Inweta ihe kacha mma nke OpenSource na FreeWare iji ree ya dị ka nke ha, n'ihi na nke ahụ bụ ihe Ubuntu bụ, ọ dịghị ihe ọzọ karịa ọtụtụ nchịkọta sitere na Debian na RH si na SUSE maka ebumnuche ha. Ha anaghị emepụta ntọala ma ọ bụ ihe ndị bụ isi ma ha na-etinye ya na ya na ụfọdụ ihe ịchọ mma nke n'ikpeazụ adịghị mkpa iji mee ihe dị iche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ Canonical na distro ha ihe ụfọdụ ndị na-egbu egbu na-eme bụ na-egbuchasị ihe emerela. Site na mbido mmadụ ole na ole na-e Appleomi Apple. Ihe niile a na-akụzi na nkà ihe ọmụma ya nke SL bụ karịa akụkụ nke ahịa na ọ bụrụ na distro ahụ bụ ihe ha na-enyekarị ahịa dị mma.
Zaghachi ka ewepu
ị pụrụ ịhụ na-abịa ..
Haha, lee ezigbo ọkwa, na mmetụta ọ nwere.
Amaghị m n'ezie ihe bụ nsogbu. Echere m, A hụrụ m ka a mụrụ Ubuntu, ma ghara iwere ya dịka ọrụ nke masịrị gị na ngwanrọ n'efu. Ahụtụbeghị m nkwado nke otu a, m na-elekwasị anya na azụmahịa. Ọ bụrụ na m na-ewetara udo tupu ndị ọzọ distros ọ bụ n'ihi na ha na nghazi, M pụtara ahia. N'ime afọ ndị mbụ etolite, ntinye aka na obodo fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu, ha na-ewere ọrụ nke ndị ọzọ, na-egbu maramara, jikọtara ma tinye ya na distro. Ruo taa, anaghị m eche na e nwere ihe Ubuntu na-eme na Debian enweghị ike. Ọ bụ naanị na ngwugwu lekwasịrị anya «Ọzọ, ọzọ Etc» na o yiri ka ọ dị ukwuu nye m, ọ bụ ihe ọzọ nye ndị na-achọghị imebi isi ha.
N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na canonical chọrọ ikewa ma ọ bụ kewapụ ụwa a, ọ dị m ka ọ kacha mma. Ebe ọ bụ na m ga-enye ihe atụ na enwere ike ịmepụta ngwaahịa bara uru site na GNU / Linux. E nwere ọtụtụ distros ga-anọgide na-adị. Ka anyị chee na ekele maka Ubuntu anyị nwere Mint ugbu a, nke m tụlere ụdị kacha mma "Nke ọzọ, Ọzọ".
Ke ọkpọkpọ usụn̄. Anọ m na-anwale Linux ruo ogologo oge, eziokwu ahụ bụ na ahụrụ m ịla azụ n'ihe ụfọdụ, na nro m bụ na site na afọ iri ha ga-eme ka ọ bụrụ eziokwu, mana ee e. Isiokwu a bụ otu ihe atụ. Enweghi ike ịga n'ihu n'oge a enwere m laptọọpụ nwere Intel HD ndịna-emeputa na ọ bụ ihe arụ na ijikọ TV site na HDMI, nsogbu mkpebi, ọdịyo, na tiori anyị na-ekwu maka onye ọkwọ ụgbọ ala n'efu nke Intel mepụtara.
Echere m na maka nsogbu ndị a, Canonical na-ejide ehi na mpi, m wee hụ ya dị ka mkpuru. M ga-aga n'ihu na-agọnahụ debian, n'ihi na ọ masịrị m, mana obi abụọ adịghị ya na Ubuntu ga-agbakwunye ndị ọrụ ndị ọzọ na-anaghị achọ imebi okpokoro isi ha hehe.
Ha na-ekwu maka nnwere onwe. Ha ehichapụ ọkwa m
Etu ibudata usoro iji flexget